မည်သူမဆို ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း
-------နေပြည်တော်မြို့မဈေးရှိ (၃)ထပ်ဆိုင်ခန်း အဆောက်အဦ(၁)လုံး (၄၀'×၄၀'×၃၂'-၆")3Story RCC Building အား ဒုတိယအကြိမ် ဈေးပြိုင်စနစ် လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်၍ မည်သူ မဆိုလွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် ဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာအား (15.12.2021)ရက်နေ့ (၁၆:00)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ဈေးများဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာပုံစံအား ဈေးများဌာနတွင် ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ၀၆၇-၃၄၁၄၂၉၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၄၁၆၈၊ ၀၉-၂၆၁၂၅၅၂၂၅၊ ၀၉-၂၅၀၀၉၀၀၀၆သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (K-6)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်ခင်ခင်လေး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/ရဘန(နိုင်)၀၇၉၁၂၈ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဦးဖေဝင်းသန့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/တသန(နိုင်) ၀၉၂၄၈၆ မှ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (S-2)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်နှင်းနှင်းလွင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၀၁၂၀၉ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဦးပေါင်ဆွင်းလျန်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/ကလထ(နိုင်) ၁၅၉၅၅၂ မှ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (A-1)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (04)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးသော်ဇင်မိုးသန့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/တကန(နိုင်)၁၄၁၃၇၆ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဒေါ်မဉ္ဇူမြင့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ရမသ(နိုင်) ၀၉၇၂၃၅ မှ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (K-6)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (04)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးကိုကိုလတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ဉကမ(နိုင်) ၁၅၄၀၄၂ မှ ကွယ်လွန် သွား၍ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ကျော့ကျော့ခိုင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/ဟမလ(နိုင်) ၀၆၃၈၄၈ မှ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (L-7)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (02)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်နီလာထွန်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/တမန(နိုင်)၀၅၁၇၄၈ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဒေါ်စမ်းသီတာ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၀/ဘလန(နိုင်) ၀၀၁၇၃၃ မှ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (Q-1)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးကြင်စော၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/မရန(နိုင်) ၁၄၉၄၇၃ မှ ကွယ်လွန်သွား၍ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စမ်းစမ်းတင့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/မရန(နိုင်)၀၅၇၉၉၇ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (M-8)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးသန်းအောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/ရနခ(နိုင်)၀၁၇၉၂၁ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသော ဦးတင်မင်းမောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/ရနခ(နိုင်)၀၁၇၉၂၄ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (Q-3)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (01)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဝင်းအောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/မရက(နိုင်) ၀၅၀၆၇၉ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသော ဒေါ်ဖြူဖြူအောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/မရက(နိုင်)၁၁၀၉၈၁ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (G-1)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (12)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးတင်မြ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၁/မပတ(နိုင်) ၀၀၀၃၆၆ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဦးတင်မျိုးကျော်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၁/မပတ(နိုင်) ၀၄၂၇၁၉ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (G-6)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (12)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်မြမြညို၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၄/ပသန(နိုင်) ၀၄၄၀၁၀ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်ချိုနေခြည်နွေး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ပကခ(နိုင်)၀၂၂၄၁၈ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (K-3)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (12)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးခင်လတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ကမရ(နိုင်) ၀၂၀၁၈၀ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်စုစုခင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၁၉၃၅၁ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (K-10)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (11)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးထွန်းမြင့်ထွန်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/ဖပန(နိုင်) ၀၄၃၆၄၄ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသော ဒေါ်ခင်မာမာပြုံး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၀/မဒန(နိုင်)၀၀၈၀၁၂ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (L-2)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (12)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/မထလ(နိုင်) ၀၈၀၇၃၉ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသော ဒေါ်အိအိကျော်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/မထလ(နိုင်) ၂၂၅၂၅၉ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-1)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း (21)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးတင့်ဝေ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/ငဖန(နိုင်) ၀၀၂၈၄၄ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဦးရွှေလွန်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၆/မအရ(နိုင်)၀၁၂၄၃၃ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-10)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း (23)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးမြင့်ဦး ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၁၈၉၂၁ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသော ဦးခင်ဦး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/ပဖန(နိုင်) ၀၂၀၅၀၂ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲ ပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာ ပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-8)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း (23)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်သန်းသန်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ဉကတ(နိုင်)၀၂၂၃၅၆ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသော ဦးကျော်သက်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၀၀၃၃၄၄ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (C-11)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (04)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးမြင့်စိုး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/ရနခ(နိုင်) ၀၆၅၁၃၃ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်ဆန်းစန္ဒာဝင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၇/တငန(နိုင်) ၁၄၃၀၁၀ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (G-5)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (13)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးပါဒွေး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၁/စတန(နိုင်) ၀၀၇၇၅၅ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဦးရင်နောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁/ဗမန(နိုင်) ၀၉၃၅၄၄ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (F-6)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (14)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်ခင်စန်းတင့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/စခန(နိုင်) ၀၂၉၈၇၆ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်သင်းသင်းနွယ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/တမန(နိုင်) ၀၅၉၄၅၇ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (K-1)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (13)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ဗတထ(နိုင်) ၀၁၃၈၀၁ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်စန္ဒာမိုး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ကမတ(နိုင်) ၀၀၉၂၁၃ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (K-3)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း (21)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဖြူမောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၇/ပခန(နိုင်) ၀၀၈၄၀၅ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/ပခက(နိုင်) ၁၆၂၈၈၆ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-6)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း (24)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဟိန်းမင်းထက်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ပဉလ(နိုင်) ၀၂၄၀၃၂ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဦးညီထွန်းစောရွှေ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၁/မဉန(နိုင်) ၀၈၇၀၄၈ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (Q-2)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (14)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးမျိုးညွန့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ပမန(နိုင်) ၀၁၈၁၀၁ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်ဟန်စုယဉ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ပမန(နိုင်) ၁၅၉၉၃၄ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (G-3)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးအောင်သန်းဝင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/စခန(နိုင်) ၀၁၃၅၆၀ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဒေါ်ကြည်ကြည်ငွေ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ဉကတ(နိုင်) ၀၇၅၃၈၂ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (G-2)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဝင်းဇော်ညွန့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ဉကမ(နိုင်) ၀၅၉၁၀၃ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဦးဇော်ထွန်းဦး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၇/ဖမန(နိုင်) ၀၆၀၂၅၅ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-8)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (04)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးချစ်ဖွယ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၄၆၃၀၃ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဦးမြင့်မြတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/စကန(နိုင်) ၁၆၁၁၈၈ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (C-5)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (12)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးစိုးသက်နောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/မရမ(နိုင်) ၀၈၈၇၄၅ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဦးမြင့်နိုင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/တတက(နိုင်) ၁၂၁၆၀၇ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (C-4)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (04)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဟန်ဖြိုးဝေ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ဝတန(နိုင်) ၁၁၅၉၂၅ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဦးမင်းသူဝင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ဝတန(နိုင်) ၁၀၄၉၄၆ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (F-6)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်လှလှသိန်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/မရက(နိုင်)၀၀၅၄၁၇ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဦးအောင်မြင့်သူ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၀၁၁၁၇၂ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (C-3)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (04)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဖေသက်ညွန့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၇/ပတန(နိုင်)၀၁၀၉၆၈ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဒေါ်ခင်ရည်မွန်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၄/မမန(နိုင်) ၁၅၆၅၆၅ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-11)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးလွင်ကိုဦး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/ပမန(နိုင်) ၀၀၈၀၂၀ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်သီတာဖြူ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/သဃက(နိုင်) ၀၀၃၆၉၇ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-12)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(13)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်ခင်မြိုင်ဦး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/တကန(နိုင်)၀၈၃၈၆၂ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်ထားထားယု၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/စခန(နိုင်) ၀၀၃၁၄၂ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (J-5)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (04)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးရွှေငယ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၀၇၈၅၉ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်ဝေလျှံလှိုင်လှိုင်ခင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ပကခ(နိုင်)၀၂၂၄၀၆ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-1)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးထွန်းနိုင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၇/ဝမန(နိုင်) ၀၀၀၂၄၃ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်ဥမ္မာလွင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ပမန(နိုင်) ၀၆၀၉၄၇ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (K-2)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (01)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးအောင်သူ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/ကသန(နိုင်) ၀၅၇၃၇၈ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်နှင်းမာလာဌေး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၁၄၅၁၉၅ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (C-2)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (14)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဝင်းလွင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/လသန(နိုင်) ၀၁၀၉၁၆ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဦးဝဏ္ဏ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/မရက(နိုင်) ၀၁၁၀၉၅ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-12)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (01)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဝဏ္ဏ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/မရက(နိုင်) ၀၁၁၀၉၅ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဦးဝင်းလွင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/လသန(နိုင်) ၀၁၀၉၁၆ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (C-7)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးသက်နိုင်ထွန်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၄/ကပန(နိုင်) ၀၀၁၉၅၅ မှာ ကွယ်လွန်သွား၍ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်လင်းမျိုးထိုက်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၄/ကပန(နိုင်) ၀၀၁၀၅၁ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း နှင့်ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------	နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (K-1)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (02)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဖုန်းမြင့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/ပဇတ(နိုင်) ၀၀၅၆၈၆ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဦးမြင့်အောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/တတက(နိုင်) ၀၇၃၃၁၀ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-9)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (13)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်ရီရီအေး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/ခဥတ(နိုင်) ၀၀၂၂၄၅ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်နေနွယ်နှောင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၆/ကစန(နိုင်)၀၆၀၇၀၄မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (G-4)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၅/အရတ (နိုင်) ၀၀၅၆၈၈ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဦးမျိုးသူ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ပမန(နိုင်) ၁၈၃၂၄၅ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (C-6)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (02)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးစိုးကိုကို၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၃/လရန(နိုင်) ၀၁၀၅၆၄ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်ခင်ဌေးမြင့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/ပမန(နိုင်) ၀၀၉၂၇၇ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (F-4)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း (03)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဇော်ညွန့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၆/မအရ(နိုင်) ၀၃၂၅၀၅ ထံမှ လွှဲပြောင်း ရယူထားသူ ဒေါ်ဖြူဖြူအောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၇/ဖမန(နိုင်) ၀၈၈၇၅၂ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-10)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (14)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးကျော်စိုးလင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၉/မရတ(နိုင်) ၀၀၉၈၈၇ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဒေါ်ပပ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/ခမန(နိုင်) ၀၀၁၂၂၉ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) သုခတော်ဝင်အိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (C-11)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း (13)အား အမည် ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဒေါ်တင်တင်ခိုင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၁၂/သကတ(နိုင်) ၀၉၉၃၀၂ ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသူ ဒေါ်တင်တင်အေး၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ ၈/မမန(နိုင်) ၁၄၃၁၇၀ မှ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက် အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၁.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၁.၂.၂၀၂၂ ထိ) ( ၆ ) လ ကာလ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေစာရင်း အား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/15.9.21attachedfileprice.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်(၆)လကာလ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေစာရင်း အား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/14.9.21InsurencePrice.pdf နှင့် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များအိတ်ဖွင့်တင်ဒါဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ အား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/14.9.21tenderform.pdf တို့တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေစာရင်းအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/13.9.21_လေလံအာမခံ.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေစာရင်းအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/အာမခံငွေစာရင်း(8-9-21).pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန ၏ ဈေးအလိုက် အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ဈေးခုံ) လျှောက်လွှာအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/7.9.21applicationform.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့် အာမခံငွေစာရင်း အား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/7.9.21mktlicenselist.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်(၆)လကာလ အရပ်ရပ်အခွင့်အ‌ရေးလိုင်စင်များ၏ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေစာရင်းအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/23.8.21laylan_attach.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၅၅)ခုအတွက် လေလံဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/form.pdf နှင့် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေစာရင်းအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/ငွေစာရင်း.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၅၅)ခုအတွက် လေလံဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/form.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၃၇)ခုအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား (ပထမအကြိမ်)ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရန် အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၃၇)ခု၏ ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေစာရင်း၊ လျှောက်လွှာပုံစံ၊ အထွေထွေစည်းကမ်းများအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/all.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနကွပ်ကဲမှုအောက် ဈေးအသီးသီးရှိ ဈေးဆိုင်ခန်းများ၊ ပွဲရုံဆိုင်ခန်းများမှ ဆိုင်ခန်းရှင်များ၏ ဈေးဆိုင်ခန်းချေးငွေနှင့်ပတ်သက်၍ ဈေးများဌာနမှ ချေးငွေလျှောက်လွှာများအား လက်ခံ၍ ဈေးဆိုင်ခန်းများချေးငွေစိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ စိစစ်ပြီး ကော်မတီမှ ချေးငွေရယူလိုသူစာရင်းအား နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်သို့ ပေးပို့သည့်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဈေးဆိုင်ခန်းများချေးငွေစိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ထားမှုအား မြို့တော်ဝန်ရုံး၏(၇.၇.၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန့်အမှတ်(၅၈၄/၂၀၂၁)ဖြင့် ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။------- သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆိုင်ခန်းရှင်များမှ ဈေးဆိုင်ခန်းချေးငွေကို နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် လီမိတက်သို့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားသည့်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်)
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိ သော ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီးမှ ဘတ္ထရီအဟောင်းဆိုဒ်စုံ (၈၁)လုံး(Lot-1)၊ Air-Con Compressor အဟောင်းဆိုဒ်စုံ (၁၆၂)လုံး (Lot-2)နှင့် အခွန်ဌာန(ဧည့်ရပ်သာ)မှ Air-Con Compressor အဟောင်း(၇၄)လုံး(Lot-3)တို့အား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း လေလံတင်ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။-------လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များအား (၆.၇.၂၀၂၁)(အင်္ဂါနေ့)မှစ၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၌ လျှောက်လွှာတစ်စုံကို(၂၀၀ဝ/-)ကျပ်ဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာ များကို (၂၀.၇.၂၀၂၁)(အင်္ဂါနေ့)၊ညနေ(၁၆:၃၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါ သည်။
၃။-------အထက်ဖော်ပြပါ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီးမှ ဘတ္ထရီအဟောင်းဆိုဒ်စုံ (၈၁)လုံး (Lot-1)နှင့် Air-Con Compressorအဟောင်းဆိုဒ်စုံ (၁၆၂)လုံး(Lot-2)နှင့် အခွန်ဌာန (ဧည့်ရပ်သာ)မှ Air-Con Compressor အဟောင်း (၇၄)လုံးအား (Lot-3)တို့အား အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ် အတိုင်း လေလံတင် ရောင်းချသွား မည်ဖြစ်ပါသည်-
နေ့ရက် - ( ၂၁ . ၇ . ၂၀၂၁ ) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
အချိန် - ( ၁၀ : ၀၀ )နာရီ
နေရာ - ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန
၄။-------အသေးစိတ်သိရှိလိုသော အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆)သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
နေပြည်တော်ကောင်စီ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
၁။------- မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျိုးရိုးဗီဇကွဲ COVID-19 ရောဂါပိုးသည် ယခုမေလကုန် ဇွန်လဆန်းမှ စတင်၍ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်များ နေ့စဉ်တွေ့ရှိနေရ၍ ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအပြင် ကုသရေးလုပ်ငန်းများအား အရှိန်အဟုန်မြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မရှိစေရေး ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရန် အထူးလိုအပ်လျက်ရှိပါ၍ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အတွင်း နေထိုင်သူများနှင့် နေပြည်တော်ပြင်ပ မှ ဝင်ရောက်လာသူများ၊ ကုန်တင်ယာဉ်များ၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း သိရှိလိုက်နာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သွားရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) နေပြည်တော်ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်လာသူများအား နေပြည်တော်လေဆိပ်၊ ရထားဘူတာများနှင့် မြို့ဝင်/ထွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များဖြစ်သော ညောင်လွန့်စစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ အမှတ် (၅) လမ်းဆုံ စစ်ဆေးရေးဂိတ် ၊ ကင်သာစစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ တောင်စဉ်အေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ စီလမ်းဆုံစစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ ပန်းတင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့တွင် နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့များမှ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ခ) နေပြည်တော်ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်လာသူများအား အထက်ပါနေရာများတွင် ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်ရှိက RDT Test Kit ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ ခရီးသွားပြည်သူများ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ခရီးသွားရာဇဝင်နှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား မှတ်တမ်းရေးသွင်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဂ) Stay at Home သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များမှ ဝင်ရောက်လာသူများအား Facility Quarantine Center များအဖြစ် နေပြည်တော်စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ (၂) ၊ နယူးဧရာဟိုတယ် နှင့် ဇမ္ဗူသီရိဟိုတယ်တို့တွင် (၁၀) ရက် အသွားအလာကန့်သတ် ထားရှိပြီး (၃) ရက်မြောက်နေ့တွင် RDT Test Kit ဖြင့် ပထမအကြိမ်၊ (၇) ရက်မြောက်နေ့တွင် RT-PCR ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်၊ စုစုပေါင်း (၂)ကြိမ် စစ်ဆေးခြင်း။
(ဃ) ခရီးသွားပြည်သူများ၏ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) များ စနစ်တကျတပ်ဆင်နိုင်ရေး၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (၆) ပေအကွာမှ နေထိုင်ရေးတို့အား ပညာပေးကြီးကြပ်ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(င) Facility Quarantine Center များနှင့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် COVID-19 Positive လူနာများ တွေ့ရှိပါက နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး(ကုတင် ၁၀၀၀) (ပြင်းထန်လူနာ)၊ နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ကုတင် ၃၀၀)၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ကုတင် ၅၀ ဆံ့)၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ကုတင် ၅၀ ဆံ့) တို့သို့ ပို့ဆောင်၍ ဆေးကုသမှုခံယူစေခြင်း။
(စ) COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သော Contact Person များကို ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ကုတင် ၅၀ ဆံ့) နှင့် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ကုတင် ၅၀ ဆံ့) များသို့ ပို့ဆောင်၍ သွားလာမှုကန့်သတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဆ) စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သော ယာဉ်မောင်းများအား တည်ဆဲဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူခြင်း၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး မော်တော်ယာဉ်နှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များကို နေပြည်တော်အတွင်းသို့ ထပ်မံလာရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဇ) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူများအကျိုးကို ရှေးရှု့၍ ပြည်သူများ အကြားတွင် ရောဂါကူးစက်မှုအဆင့်ဆင့် ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အတွင်း နေထိုင်သူများနှင့် နေပြည်တော်ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လိုက်နာမှုမရှိပါက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
၂။ ------- သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူများအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားရေးအသွင်အဖြစ် မှတ်ယူပြီး လမ်းညွှန်ချက်များ၊ တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်များကို ဤအသိပေးပန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန် အသိပေးပန်ကြားအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)မှ ကောက်ခံလျက်ရှိသော လစဉ်ရေဖိုးရေခ အခွန်အခများကို Online Service (e-payment) စနစ် အသုံးပြု၍ နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (NDB) Mobile Banking ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး (၉/၂၀၁၉) လမှ စတင်၍ ကောက်ခံလျက်ရှိပါသည်။
-------သို့ရာတွင် Mobile အင်တာနက်လိုင်းအဆင်မပြေမှု အခက်အခဲများကြောင့် (၂၂.၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ (e-payment) စနစ်ဖြင့် ရေဖိုးရေခပေးချေမှုအား ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား ပါသည်။
-------ယခုအခါ Mobile အင်တာနက်လိုင်းများပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် မြို့နယ်အလိုက် ကောက်ခံလျက်ရှိသော လစဉ်ရေဖိုးရေခ ကျသင့်ငွေများအား (၅/၂၀၂၁)လမှစ၍ Online Service (e-payment) စနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနကွပ်ကဲမှုအောက် ပုဗ္ဗသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ပုဗ္ဗသီရိဈေးရှိ ပွဲရုံဆိုင်ခန်း(၂၀'×၅၂')RC(၂)ထပ် (၂၄)ခန်းအား ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။-------ဆိုင်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် (၁၃ - ၇ -၂၀၂၁ )ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံး ထား၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနသို့ လာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ရုံးတယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၁၄၂၉၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၄၁၆၈၊ ၀၉-၂၆၁၂၅၅၂၂၅နှင့် ၀၉-၂၅၀၀၉၀၀၀၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၃။-------ဆိုင်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် လျှောက်လွှာ ပုံစံများအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/application_and_discipline.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ၏ Digitalization ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်း (3T) အတွက် GeoCAD Group Co.,Ltd အား တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
e-Government ဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအပ်နှံရေးနှင့်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနကွပ်ကဲမှုအောက် ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ်ရှိ၊ နေပြည်တော်မြို့မဈေး ယာဉ်ပြင်အလုပ်ရုံ၊ ကားအလှဆင်ခြင်းနှင့် ရေဆေးဆီလိုက်၊ စားသောက်ဆိုင်ခန်း စုစုပေါင်း(၁၁၁)ခန်းအား ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်--
(က) ယာဉ်ပြင်အလုပ်ရုံ(၃၆'×၄၀')(Sub Structure-RC၊ ၄၄ ခန်း ၇၆.၀၀
Super Structure Steel၊ သွပ်မိုး၊အုတ်ကာတစ်ထပ်ခွဲ)
(ခ) ယာဉ်ပြင်အလုပ်ရုံ(၁၂'×၄၀') (Sub Structure-RC၊ ၃၆	ခန်း ၂၆.၀၀
(ဂ) စားသောက်ဆိုင်ခန်း(၂၂'×၄၀') (Sub Structure-RC၊ ၁၀	ခန်း ၄၅.၀၀
(က) ယာဉ်ပြင်အလုပ်ရုံ(၃၆'×၄၀') (Sub Structure-RC၊ ၁၉ ခန်း ၈၀.၀၀
(ခ) ကားအလှဆင်ခြင်းနှင့် ရေဆေးဆီလိုက်(၂၀'×၄၀') (Sub Structure-RC၊ ၂	ခန်း ၄၀.၀၀
၂။-------ဆိုင်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် ဈေးများဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာ ပုံစံအားရယူပြီး (၁၃-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနသို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ရုံးတယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၁၄၂၉၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၄၁၆၈၊ ၀၉-၂၆၁၂၅၅၂၂၅နှင့် ၀၉-၂၅၀၀၉၀၀၀၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၃။-------ဆိုင်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် လျှောက်လွှာ ပုံစံများအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/discipline_and_application.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာနရှိ ကော်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်း ပညာသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ခရေအိမ်ရာ ၊သုခရတနာလမ်းတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စားသောက်ဆိုင်ခန်း အမှတ်(၂) (၁၀'×၄၅'×၁၃')အား မည်သူမဆို ငှားရမ်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်-
(က) တစ်လငှားရမ်းခ - ၂၅,၀၀၀/-
( ခ ) တင်သွင်းရမည့် အာမခံစပေါ်ငွေ	 - ၁၀၀,၀၀၀/-
၂။------- ငှားရမ်းလိုသူများသည် (၂၁ - ၄ - ၂၀၂၁ )ရက်နေ့ (၁၆:၃၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနသို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ရုံးတယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၁၄၂၉၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၄၁၆၈၊ ၀၉-၂၆၁၂၅၅၂2၅နှင့် ၀၉-၂၅၀၀၉၀၀၀၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။------- ဆန်းမြတ်ထွန်းကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နေပြည်တော်ရေပန်းဥယျာဉ် အား COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ခေတ္တပိတ်ထား ခဲ့ရာမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီဖြစ်ပါသည်။
၂။------- ရေပန်းဥယျာဉ်အတွင်းသို့ လာရောက်အနားယူအပန်းဖြေလိုသည့် အများပြည်သူတို့အနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လာရောက်လည်ပတ် အနားယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နှင့် လယ်ဝေးမြို့တို့ရှိ မြို့မြေကွက်များအား မြေတိုင်းတာခြင်းနှင့်စကေးကိုက်မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါတင်သွင်းခဲ့သော ကုမ္ပဏီများအနက် WTK Planet Union Co;Ltd အား တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး) မြေဧရိယာ (၂၃၀) ဧက ပေါ်တွင် (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်၊ အခန်း (၁)ခန်းလျှင် အိပ်ခန်း (၂)ခန်းပါ တိုက်ခန်းများ တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ရောင်းချရန်ကျန်ရှိသော မြေညီထပ်၊ ပထမထပ်၊ ဒုတိယထပ် နှင့် တတိယထပ် တို့အား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၊ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဝန်ထမ်းများ နှင် အများပြည်သူတို့အား မည်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာ ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံအား ဖော်ပြပါ Link www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Thukatawwin_housings_applicants.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၊ ထုတ်လုပ်ရေးဌာန၏ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ထုတ်လုပ်ရေးဌာနပိုင် စိုက်ပျိုးမြေနေရာ အတွင်း ( ၄" Ø ) စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ၊ ဂါလန် ( ၃၂၀၀ ) ဆံ့ သံရေစင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ၊ ဂါလန် ( ၅၀၀၀ ) ဆံ့ Ground Tank အုတ်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -
(က) တင်ဒါပုံစံစတင်ဝယ်ယူနိုင်သည့်နေ့ရက်နှင့် - ၉ - ၃ - ၂၀၂၁ ရက် ၊ ၃၀၀ဝိ/-
တန်ဖိုး	 - ၃၀၀ဝိ/-
( ခ ) တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရန်နေ့ရက်နှင့်	 - ၂၄ - ၃ - ၂၀၂၁ ရက် ၊
အချိန်နာရီ	 - ( ၁၆:၀၀ ) နာရီ
( ဂ ) တင်ဒါဖွင့်မည့်နေ့ရက် - ၃၁ -၃ - ၂၀၂၁ ရက်
(ဃ) တင်ဒါ‌တင်သွင်းရမည့်နေရာ - ထုတ်လုပ်ရေးဌာန ၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------	တင်ဒါပုံစံ နှင့် တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ထုတ်လုပ်ရေးဌာန ဖုန်း ၊ ၀၆၇ - ၈၁၀၈၀၁၅ ၊ ၀၉ - ၄၃၀၃၇၅၁၁ တို့သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဈေးများ အသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလျက်ရှိသော ဈေးရောင်းချသူများကို နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပျက်ပြားစေသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မသမာသူအချို့မှ ဈေးဆိုင်ခန်းများဖွင့်လှစ်ရောင်းချမှုမရှိစေရေး ဈေးများပိတ်သိမ်းရေးတို့အား လိုက်လံစည်းရုံးနှိုးဆော်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိနေရပါသည်။
၂။-------ဈေးရောင်းချလျက်ရှိသော ဈေးသူ/ဈေးသားများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲ စားသုံးသူများ အခက်အခဲမရှိ အဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ရန် ဈေးဆိုင်ခန်းများနှင့် ပျံကျ ဈေးဆိုင်များကို နေ့စဉ်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးကြပါရန် အသိပေးပန်ကြားအပ်ပါသည်။
၃။-------‌ဈေးဆိုင်များအား ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခြင်းမရှိပါက နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဈေးဆိုင်ခန်းရှင်များ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ၊ နေ့စဉ်ပျံကျ ဈေးသည်များ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ၊ စည်းကမ်းများ(Bye Laws)နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)တွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၁၂၅)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် မြေညီထပ် (၃၂) ခန်း၊ ပထမထပ် (၉၁) ခန်း၊ ဒုတိယထပ် (၁) ခန်း နှင့် တတိယထပ် (၁) ခန်းတို့အား (၂၉−၁−၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားမှုကို ဖော်ပြပါ Link Address များတွင် www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Ground Floor_35.pdf ၊ www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/First Floor_91.pdf ၊ www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Second Floor_1.pdf နှင့် www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Third Floor_1.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညို လမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက် (၁၂၅)လုံးရှိ မြေမညီထပ်၊ ပထမထပ်၊ ဒုတိယထပ်နှင့် တတိယထပ်လျှောက်ထားသူများမှ (၁၅-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ငွေပေးသွင်းပြီးသူများကို (၂၉-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချိန်မှစ၍ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မင်္ဂလာခန်းမ၌ မဲနှိုက်နေရာချထားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။-------	အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် လျှောက်ထားသူများကို Covid – 19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း လူစုလူဝေးမဖြစ်စေရေးအတွက် ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုတော့ဘဲ လျှောက်ထား သူများကိုယ်စား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီက မဲနှိုက်ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားကျင်းပနေမှုများအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ NPTDC webportal Facebook Page တွင် တိုက်ရိုက် (Live) ထုတ်လွှင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မဲနှိုက်မည့်လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) မြေညီထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ (၃၂) ခန်း
(၀၃၁၇)၊ (၀၃၃၁)၊ (၀၃၄၀)၊ (၀၃၆၀)၊ (၀၃၆၇)၊ (၀၃၇၂)၊ (၀၄၂၁)၊ (၀၄၈၉)၊ (၀၄၉၀)၊ (၀၅၇၆)၊ (၀၆၂၆)၊ (၀၆၂၈)၊ (၀၆၆၅)၊ (၀၇၃၅)၊ (၀၈၀၁)၊ (၀၈၂၂)၊ (၀၈၂၄)၊ (၀၈၃၂)၊ (၀၈၅၉)၊ (၀၈၇၅)၊ (၀၉၁၂)၊ (၀၉၃၆)၊ (၀၉၇၁)၊ (၀၉၇၈)၊ (၁၀၇၄)၊ (၁၁၇၅)၊ (၁၂၀၂)၊ (၁၂၁၃)၊ (၁၂၆၄)၊ (၁၃၇၃)၊ (၁၄၂၁)၊ (၁၄၃၈)။
(ခ) ပထမထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ (၉၁)ခန်း
(၁၂၁၂)၊ (၁၃၄၇)၊ (၁၃၉၀)၊ (၁၄၁၃)၊ (၁၄၃၇)၊ (၁၅၅၄)၊ (၁၅၆၅)၊ (၁၅၆၈)၊ (၁၅၇၅)၊ (၁၅၉၃)၊ (၁၆၀၇)၊ (၁၇၅၅)၊ (၂၀၅၆)၊ (၂၀၆၂)၊ (၂၀၇၈)၊ (၂၀၈၂)၊ (၂၁၈၀)၊ (၂၁၈၄)၊ (၂၁၉၄)၊ (၂၂၁၇)၊ (၂၂၂၁)၊ (၂၂၂၅)၊ (၂၂၃၁)၊ (၂၂၃၇)၊ (၂၂၅၀)၊ (၂၂၅၃)၊ (၂၂၅၄)၊ (၂၂၆၄)၊ (၂၂၇၅)၊ (၂၂၈၉)၊ (၂၂၉၅)၊ (၂၃၀၄)၊ (၂၃၀၆)၊ (၂၃၁၄)၊ (၂၃၂၃)၊ (၂၃၂၅)၊ (၂၃၂၆)၊ (၂၃၂၉)၊ (၂၃၃၁)၊ (၂၃၃၃)၊ (၂၃၃၄)၊ (၂၃၃၆)၊ (၂၃၄၂)၊ (၂၃၄၇)၊ (၂၃၄၈)၊ (၂၃၄၉)၊ (၂၃၅၁)၊ (၂၃၅၆)၊ (၂၃၅၇)၊ (၂၃၆၃)၊ (၂၃၆၆)၊ (၂၃၆၇)၊ (၂၃၆၉)၊ (၂၃၇၁)၊ (၂၃၇၇)၊ (၂၃၈၂)၊ (၂၃၈၃)၊ (၂၃၈၄)၊ (၂၃၈၅)၊ (၂၃၈၈)၊ (၂၃၈၉)၊ (၂၃၉၀)၊ (၂၃၉၂)၊ (၂၃၉၃)၊ (၂၃၉၄)၊ (၂၄၀၆)၊ (၂၄၀၇)၊ (၂၄၀၈)၊ (၂၄၀၉)၊ (၂၄၁၀)၊ (၂၄၁၁)၊ (၂၄၁၂)၊ (၂၄၁၃)၊ (၂၄၁၄)၊ (၂၄၁၅)၊ (၂၄၂၁)၊ (၂၄၂၆)၊ (၂၄၂၈)၊ (၂၄၃၁)၊ (၂၄၃၃)၊ (၂၄၃၄)၊ (၂၄၃၅)၊ (၂၄၃၉)၊ (၂၄၄၀)၊ (၂၄၄၃)၊ (၂၄၄၅)၊ (၂၄၄၇)၊ (၂၄၅၀)၊ (၂၄၅၅)၊ (၂၄၅၈)၊ (၂၄၅၉)။
(ဂ) ဒုတိယထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ (၁)ခန်း
(ဃ) တတိယထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ (၁)ခန်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် တာယာဆိုဒ်စုံ (၇၀၄)လုံးနှင့် ဘက်ထရီဆိုဒ်စုံ (၂၂၅)လုံး ဝယ်ယူရန်အတွက်
နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်တွင် အသုံးပြုရန် မော်တော်ယာဉ် (၁၁)စီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းအတွက်
RTK Differential GPS (1) set (Country of origin-USA) ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် RTK Differential GPS (1) set (Country of origin-USA) ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါတင်သွင်းခဲ့သော ကုမ္ပဏီများအနက် Suntac International Trading Co., Ltd အား တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)တွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၆၃)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ပထမထပ် (၁၃၉) ခန်း၊ ဒုတိယထပ် (၃၃) ခန်း နှင့် တတိယထပ် (၆) ခန်းတို့အား (၈−၁−၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားမှုကို ဖော်ပြပါ Link Address များတွင် www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Housing_First flr(139)List.pdf ၊ www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/HousingSecondflr (33)List.pdf နှင့် www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Housing_Thirdflr (6) List.pdf တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်မည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးမှ ပထမဦးစွာဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၆၃)လုံးအတွက် ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် မြေညီထပ်(၂၄၉)ခန်းအား မဲနှိုက်နေရာချထားမှုကို ဖော်ပြပါ Link Address တွင် www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Housing_Groundflr(249)List.pdf download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးရှိ မြေညီထပ်၊ ပထမထပ်၊ ဒုတိယထပ်နှင့် တတိယထပ် လျှောက်ထားသူများမှ (၃၀-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ငွေပေးသွင်းပြီးသူများအား (၇-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့နှင့် (၈-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ တို့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားမည့် အခမ်းအနားအား အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) မြေညီထပ်ငွေပေးသွင်းသည့်အခန်း(၂၄၄)ခန်းအား (၇-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီ အချိန်မှစ၍ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း၊
(ခ) ပထမထပ်ငွေပေးသွင်းသည့်(၁၄၀)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်ငွေပေးသွင်းသည့်(၂၉) ခန်းနှင့် တတိယထပ်ငွေပေးသွင်းသည့် (၆)ခန်းတို့အား (၈-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီ အချိန်မှစ၍ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း။
၂။------- အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် လျှောက်ထားသူများကို Covid–19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း လူစုလူဝေးမဖြစ်စေရေးအတွက် ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုတော့ဘဲ လျှောက်ထား သူများကိုယ်စား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီက မဲနှိုက်ဆောက်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားကျင်းပနေမှုများအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ NPTDC webportal Facebook Page တွင် တိုက်ရိုက် ( Live ) ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မဲနှိုက်မည့် လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) မြေညီထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ(၂၄၄)ဦး
(၀၃၀၀)၊ (၀၃၀၁)၊ (၀၃၀၃)၊ (၀၃၀၆)၊ (၀၃၀၇)၊ (၀၃၀၈)၊ (၀၃၀၉)၊ (၀၃၁၂)၊ (၀၃၁၆)၊ (၀၃၁၈)၊ (၀၃၂၀)၊ (၀၃၂၆)၊ (၀၃၂၈)၊ (၀၃၂၉)၊ (၀၃၃၀)၊ (၀၃၃၂)၊ (၀၃၃၃)၊ (၀၃၃၄)၊ (၀၃၃၅)၊ (၀၃၃၆)၊ (၀၃၄၁)၊ (၀၃၄၂)၊ (၀၃၄၃)၊ (၀၃၄၄)၊ (၀၃၄၅)၊ (၀၃၄၉)၊ (၀၃၅၁)၊ (၀၃၅၈)၊ (၀၃၆၃)၊ (၀၃၆၆)၊ (၀၃၇၃)၊ (၀၃၇၈)၊ (၀၃၈၁)၊ (၀၃၈၂)၊ (၀၃၈၄)၊ (၀၃၈၅)၊ (၀၃၈၇)၊ (၀၃၉၀)၊ (၀၃၉၂)၊(၀၃၉၃)၊ (၀၃၉၆)၊ (၀၃၉၈)၊ (၀၄၀၁)၊ (၀၄၀၂)၊ (၀၄၀၄)၊ (၀၄၀၅)၊ (၀၄၀၇)၊ (၀၄၁၀)၊ (၀၄၁၁)၊ (၀၄၁၃)၊ (၀၄၁၇)၊ (၀၄၁၉)၊ (၀၄၂၂)၊ (၀၄၂၃)၊ (၀၄၂၄)၊ (၀၄၂၅)၊ (၀၄၂၉)၊ (၀၄၃၂)၊ (၀၄၃၃)၊ (၀၄၃၉)၊ (၀၄၄၀)၊ (၀၄၄၄)၊ (၀၄၄၆)၊ (၀၄၅၀)၊ (၀၄၅၂)၊ (၀၄၅၃)၊ (၀၄၆၁)၊ (၀၄၆၃)၊ (၀၄၆၅)၊ (၀၄၆၆)၊ (၀၄၆၇)၊ (၀၄၆၉)၊ (၀၄၇၀)၊ (၀၄၇၇)၊ (၀၄၇၈)၊ (၀၄၇၉)၊ (၀၄၈၀)၊ (၀၄၈၂)၊ (၀၄၈၄)၊ (၀၄၈၅)၊ (၀၄၈၇)၊ (၀၄၈၈)၊ (၀၄၉၁)၊ (၀၄၉၂)၊ (၀၄၉၃)၊ (၀၅၀၁)၊ (၀၅၀၂)၊ (၀၅၀၄)၊ (၀၅၀၅)၊ (၀၅၀၈)၊ (၀၅၀၉)၊ (၀၅၁၃)၊ (၀၅၁၄)၊ (၀၅၁၆)၊ (၀၅၁၇)၊ (၀၅၁၈)၊ (၀၅၂၂)၊ (၀၅၂၃)၊ (၀၅၂၅)၊ (၀၅၂၆)၊ (၀၅၂၇)၊ (၀၅၂၈)၊ (၀၅၃၀)၊ (၀၅၃၃)၊ (၀၅၃၄)၊ (၀၅၄၁)၊ (၀၅၄၃)၊ (၀၅၄၄)၊ (၀၅၄၅)၊ (၀၅၄၉)၊ (၀၅၅၀)၊ (၀၅၅၁)၊ (၀၅၅၅)၊ (၀၅၅၆)၊ (၀၅၅၉)၊ (၀၅၆၇)၊ (၀၅၆၈)၊ (၀၅၇၁)၊ (၀၅၇၄)၊ (၀၅၈၁)၊ (၀၅၉၀)၊ (၀၅၉၁)၊ (၀၅၉၂)၊ (၀၅၉၄)၊ (၀၅၉၇)၊ (၀၅၉၈)၊ (၀၆၀၀)၊ (၀၆၀၁)၊ (၀၆၀၂)၊ (၀၆၀၄)၊ (၀၆၀၅)၊ (၀၆၀၆)၊ (၀၆၀၇)၊ (၀၆၀၈)၊ (၀၆၀၉)၊ (၀၆၁၀)၊ (၀၆၁၂)၊ (၀၆၁၄)၊ (၀၆၁၅)၊ (၀၆၁၇)၊ (၀၆၂၀)၊ (၀၆၂၁)၊ (၀၆၃၀)၊ (၀၆၃၃)၊ (၀၆၃၄)၊ (၀၆၃၅)၊ (၀၆၃၉)၊ (၀၆၄၂)၊ (၀၆၄၃)၊ (၀၆၄၄)၊ (၀၆၄၅)၊ (၀၆၄၆)၊ (၀၆၅၃)၊ (၀၆၅၄)၊ (၀၆၅၅)၊ (၀၆၅၇)၊ (၀၆၆၁)၊ (၀၆၆၂)၊ (၀၆၆၄)၊ (၀၆၆၆)၊ (၀၆၇၀)၊ (၀၆၇၁)၊ (၀၆၇၂)၊ (၀၆၈၀)၊ (၀၆၈၂)၊ (၀၆၈၇)၊ (၀၆၉၂)၊ (၀၆၉၅)၊ (၀၆၉၆)၊ (၀၇၀၃)၊ (၀၇၀၄)၊ (၀၇၁၂)၊ (၀၇၁၇)၊ (၀၇၂၄)၊ (၀၇၂၆)၊ (၀၇၃၀)၊ (၀၇၃၃)၊ (၀၇၃၄)၊ (၀၇၃၇)၊ (၀၇၃၈)၊ (၀၇၄၁)၊ (၀၇၄၂)၊ (၀၇၄၃)၊ (၀၇၄၉)၊ (၀၇၅၂)၊ (၀၇၅၇)၊ (၀၇၅၉)၊ (၀၇၆၅)၊ (၀၇၆၆)၊ (၀၇၆၈)၊ (၀၇၇၀)၊ (၀၇၇၁)၊ (၀၇၇၅)၊ (၀၇၈၃)၊ (၀၇၈၄)၊ (၀၇၈၈)၊ (၀၇၉၂)၊ (၀၇၉၃)၊ (၀၈၀၅)၊ (၀၈၀၆)၊ (၀၈၁၉)၊ (၀၈၂၁)၊ (၀၈၂၆)၊ (၀၈၂၈) (၀၈၃၁)၊ (၀၈၃၃)၊ (၀၈၄၀)၊ (၀၈၄၁)၊ (၀၈၄၉)၊ (၀၈၅၂)၊ (၀၈၅၃)၊ (၀၈၅၈)၊ (၀၈၆၆)၊ (၀၈၆၈)၊ (၀၈၆၉)၊ (၀၈၇၀)၊ (၀၈၇၄)၊ (၀၈၇၇)၊ (၀၈၇၉)၊ (၀၈၈၃)၊ (၀၈၈၅)၊ (၀၈၉၃)၊ (၀၈၉၄)၊ (၀၈၉၅)၊ (၀၈၉၈)၊ (၀၉၀၂)၊ (၀၉၀၉)၊ (၀၉၁၁)၊ (၀၉၁၅)၊ (၀၉၁၈)၊ (၀၉၂၁)၊ (၀၉၂၂)၊ (၀၉၃၂)၊ (၀၉၃၄)၊ (၀၉၅၂)၊ (၀၉၅၃)၊ (၀၉၅၇)၊ (၀၉၅၉)၊ (၀၉၆၂)၊ (၀၉၆၃)၊ (၀၉၆၄)၊ (၀၉၆၇)၊ (၀၉၇၃)၊ (၀၉၉၇)။
(ခ) ပထမထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ(၁၄၀)ဦး
(၁၁၅၀)၊ (၁၁၅၁)၊ (၁၁၅၆)၊ (၁၁၅၇)၊ (၁၁၅၈)၊ (၁၁၆၉)၊ (၁၁၇၃)၊ (၁၁၇၅)၊ (၁၁၇၇)၊ (၁၁၈၆)၊ (၁၁၈၉)၊ (၁၁၉၂)၊ (၁၁၉၃)၊ (၁၂၀၀)၊ (၁၂၀၈)၊ (၁၂၁၆)၊ (၁၂၂၃)၊ (၁၂၂၄)၊ (၁၂၂၅)၊ (၁၂၂၆)၊ (၁၂၂၇)၊ (၁၂၃၀)၊ (၁၂၃၁)၊ (၁၂၃၂)၊ (၁၂၃၄)၊ (၁၂၃၅)၊ (၁၂၃၆)၊ (၁၂၃၉)၊ (၁၂၄၁)၊ (၁၂၅၀)၊ (၁၂၅၃)၊ (၁၂၅၄)၊ (၁၂၅၈)၊ (၁၂၆၀)၊ (၁၂၆၄)၊ (၁၂၇၅)၊ (၁၂၇၈)၊ (၁၂၈၂)၊ (၁၂၈၃)၊ (၁၂၉၅)၊ (၁၂၉၈)၊ (၁၃၀၀)၊ (၁၃၀၂)၊ (၁၃၁၂)၊ (၁၃၁၃)၊ (၁၃၂၆)၊ (၁၃၂၈)၊ (၁၃၂၉)၊ (၁၃၃၀)၊ (၁၃၃၂)၊ (၁၃၄၁)၊ (၁၃၅၇)၊ (၁၃၅၉)၊ (၁၃၆၁)၊ (၁၃၆၃)၊ (၁၃၆၈)၊ (၁၃၆၉)၊ (၁၃၇၂)၊ (၁၃၇၄)၊ (၁၃၇၈)၊ (၁၃၈၅)၊ (၁၃၈၆)၊ (၁၃၈၉)၊ (၁၃၉၂)၊ (၁၄၀၁)၊ (၁၄၂၂)၊ (၁၄၂၃)၊ (၁၄၂၆)၊ (၁၄၂၉)၊ (၁၄၃၁)၊ (၁၄၅၆)၊ (၁၄၇၁)၊ (၁၄၇၃)၊ (၁၄၇၄)၊ (၁၄၇၇) (၁၄၈၂)၊ (၁၄၈၅)၊ (၁၄၈၇)၊ (၁၄၉၄)၊ (၁၄၉၅)၊ (၁၄၉၇)၊ (၁၅၀၀)၊ (၁၅၀၁)၊ (၁၅၀၈)၊ (၁၅၁၂)၊ (၁၅၂၁)၊ (၁၅၂၂)၊ (၁၅၃၁)၊ (၁၅၃၂)၊ (၁၅၃၄)၊ (၁၅၆၁)၊ (၁၅၇၂)၊ (၁၆၂၃)၊ (၁၆၄၉)၊ (၁၆၈၀)၊ (၁၆၈၉)၊ (၁၆၉၄)၊ (၁၇၂၂)၊ (၁၇၃၀)၊ (၁၇၃၁)၊ (၁၇၃၉)၊ (၁၇၅၂)၊ (၁၇၅၄)၊ (၁၇၅၆)၊ (၁၇၅၇)၊ (၁၇၅၈)၊ (၁၇၅၉)၊ (၁၇၆၀)၊ (၁၇၆၁)၊ (၁၇၆၂)၊ (၁၇၆၅)၊ (၁၇၆၆)၊ (၁၇၆၇)၊ (၁၇၆၈)၊ (၁၇၇၁)၊ (၁၇၇၂)၊ (၁၇၇၃)၊ (၁၇၈၃)၊ (၁၇၉၁)၊ (၁၈၁၁)၊ (၁၈၄၉)၊ (၂၀၁၇)၊ (၂၀၂၃)၊ (၂၀၂၉)၊ (၂၀၃၀)၊ (၂၀၃၂)၊ (၂၀၄၂)၊ (၂၀၄၃)၊ (၂၀၄၄)၊ (၂၀၄၆)၊ (၂၀၄၇)၊ (၂၀၄၈)၊ (၂၀၅၁)၊ (၂၀၅၅)၊ (၂၀၆၁)၊ (၂၀၆၄)၊ (၂၀၇၆)၊ (၂၀၈၄)၊ (၂၀၈၅)၊ (၂၀၈၉)။
(ဂ) ဒုတိယထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ(၂၉)ဦး
(၁၅၂၃)၊ (၂၁၇၀)၊ (၂၂၁၄)၊ (၂၂၂၈)၊ (၂၂၃၅)၊ (၂၂၃၆)၊ (၂၂၈၅)၊ (၂၂၉၈)၊ (၂၂၉၉)၊ (၂၃၀၈)၊ (၂၃၀၉)၊ (၂၃၁၂)၊ (၂၃၁၇)၊ (၂၃၁၈)၊ (၂၃၁၉)၊ (၂၃၂၀)၊ (၂၃၂၄)၊ (၂၃၂၇)၊ (၂၃၂၈)၊ (၂၃၃၅)၊ (၂၃၃၈)၊ (၂၃၅၀)၊ (၂၃၅၁)၊ (၂၃၇၀)၊ (၂၃၇၆)၊ (၂၃၈၈)၊ (၂၄၂၀)၊ (၂၄၂၉)၊ (၂၄၃၀)။
(ဃ) တတိယထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ(၆)ဦး
(၂၃၆၂)၊ (၂၃၇၃)၊ (၂၃၇၄)၊ (၂၃၉၆)၊ (၂၄၂၄)၊ (၂၄၂၇)။
နေပြည်တော်အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူများအား တိုက်ခန်းတန်ဘိုး၏ (၃၀%) ငွေပေးသွင်းရမည့်ရက်
၁။-------နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)ရှိ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုက်ခန်း (၃၀၀၀)အနက်မှ ဒုတိယ အဆင့်အနေဖြင့် တိုက်(၁၂၅)လုံးရှိ မြေညီထပ်(၅၀၀)ခန်း၊ ပထမထပ်(၅၀၀)ခန်း၊ ဒုတိယထပ် (၅၀၀)ခန်း၊ တတိယထပ် (၅၀၀)ခန်းတို့အား နေရာချထားနိုင်ရေးအတွက် လက်ငင်းငွေချေပေးသွင်းသူ များနှင့် ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းသူများကို (၁၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွင်း တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏(၃၀%)အား ပေးသွင်းရန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။
၂။-------သို့သော် COVID−19 ကာလဖြစ်၍ တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ (၃၀%) ငွေသွင်းရမည့်ရက် အား (၁၅-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပါကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ရက်အတွင်း ငွေမသွင်းသူများ၏ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များကို ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
နေပြည်တော်အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
၁။-------အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး)၊ မြေဧရိယာ (၂၃၀)ဧကပေါ်တွင် (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်၊ အခန်း (၁)ခန်းလျှင် အိပ်ခန်း (၂)ခန်းပါ (၆၅၀)စတုရန်းပေရှိ လူနေတိုက်ခန်းများ တည်ဆောက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။-------ပထမအဆင့်အနေဖြင့် တိုက် (၃၉)လုံးအား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများနှင့် လက်ရှိ ဝန်ထမ်းများအား ရောင်းချခဲ့ပြီး မြေညီထပ် (၁၅၆)ခန်း၊ ပထမထပ် (၁၅၆)ခန်း၊ ဒုတိယထပ် (၁၅၆)ခန်းနှင့် တတိယထပ် (၁၁)ခန်းတို့အား မဲနှိုက်နေရာချထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအဆင့် အနေဖြင့် တိုက် (၁၂၅)လုံးကိုလည်း မဲနှိုက်နေရာချထားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၃။-------မြေညီထပ်နှင့် ပထမထပ်တို့အား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများနှင့် လက်ရှိတာဝန် ထမ်းဆောင်ဆဲဝန်ထမ်းများအား ရောင်းချပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ကျန်ရှိသည့် ဒုတိယထပ် (၃၃၄) ခန်းနှင့် တတိယထပ် (၇၀၁)ခန်းတို့အား ရောင်းချရန် ကျန်ရှိ၍ အဆိုပါအခန်းများသို့ အငြိမ်းစား၊ လက်ရှိဝန်ထမ်းနှင့် အများပြည်သူတို့အား ရောင်းချ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။-------အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုက်ခန်း ဝယ်ယူလျှောက်ထားလိုသူများသည် မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပူးတွဲပါ လျှောက်လွှာပုံစံများတွင် ဖြည့်စွက်၍ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ နေပြည်တော်သို့လိပ်မူ၍ ပေးပို့ပါရန်နှင့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်ခန်းများကို ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် လီမိတက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ တိုက်ခန်းချေးငွေရယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန် နှင့် လိုအပ်သည့်လျှောက်လွှာပုံစံများအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/RetiredHousing001.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါကြော်ငြာစာအမှတ်( ၃/၂၀၂၀ )
( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ လ ၂၈ ရက် )
၁။-------(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်း(၁၅)မျိုးအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါသည်-
( က ) အရာရှိကြီးစားပွဲ (၆' x ၄' x ၂'၆") (၅) လုံး
( ခ ) အရာထမ်းစားပွဲ(၅' x ၃' x ၂'၆") (၃၀) လုံး
( ဂ ) အမှုထမ်းစားပွဲ(၄' x ၂'၆" x ၂'၆") (၃၅) လုံး
( ဃ ) အစည်းအဝေးခန်းသုံးစားပွဲ(၆'၁၀" x ၂၀" x ၂'၆") (၆) လုံး
( င ) ဆက်တီအလယ်စားပွဲ(၅' x ၂' x ၁'၆") (၃) လုံး
( စ ) ဗလာစားပွဲ(အခြားသစ်မာ)(၃' x ၂.၅' x ၂.၅') (၁၂) လုံး
( ဆ ) စားပွဲ(အခြားသစ်မာ)(၈' x ၄' x ၂'၆") (၁၁) လုံး
( ဇ ) စားပွဲ(ကျွန်း)(၆' x ၃' x ၂'၆") (၁၀) လုံး
( ဈ ) ဖိုင်တင်စင်(ကြီး)(၆' x ၂၀" x ၇') (၄၀) လုံး
( ည ) ဖိုင်တင်စင်(သေး)(၄' x ၁၅" x ၃') (၁၅) လုံး
( ဋ ) သစ်သားဗီရို(၆' x ၂၂" x ၃') (၈) လုံး
( ဌ ) မှန်ဗီရို(၆' x ၂၂" x ၃') (၃) လုံး
( ဍ ) လက်တင်ပါကုလားထိုင်(ကျွန်း) (၃၀) လုံး
( ဎ ) လက်တင်ပါကုလားထိုင်(ကြိမ်) (၁၅) လုံး
( ဏ ) လက်တင်မဲ့ကုလားထိုင်(ကျွန်း) (၃၅) လုံး
- တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် ၂၉ - ၁၂ -၂၀၂၀
- တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် ၁၉ - ၁ -၂၀၂၁ ( ၁၆:၀၀ )နာရီ
(မှတ်ချက်။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက် အပြောင်းအလဲရှိပါက ကြိုတင်အကြောင်းကြားပါမည်။)
- တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆)သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်း စုံစမ်းထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
ရက်စွဲ ၊ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (B-8)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း(04)အား အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးချစ်ဖွယ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၄၆၃၀၃ ထံမှ နှစ်ဦးသဘောတူအရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ဦးမြင့်မြတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် ၅/စကန (နိုင်) ၁၆၁၁၃၃ မှ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါ ကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ် ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (F-4)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း(03)အား အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးဇော်ညွန့်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် ၆/မအရ(နိုင်) ၀၃၂၅၀၅ ထံမှ နှစ်ဦးသဘောတူအရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ဒေါ်ဖြူဖြူအောင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် ၇/ဖမန (နိုင်) ၀၈၈၇၅၂ မှ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်း နှင့်ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာရှိ တိုက်အမှတ် (G-4)၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း(03) အား အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် ၅/အရတ(နိုင်) ၀၀၅၆၈၈ ထံမှ နှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ဦးမျိုးသူ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် ၉/ပမန(နိုင်) ၁၈၃၂၄၅ မှ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအား တရားဝင်ခိုင်လုံသော အထောက်အထား များဖြင့် ဤကြော်ငြာစာပါသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်မှု မရှိပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။
၁။-------အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဘူးကွဲဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး၊ မြေဧရိယာ (၂၃၀)ဧကပေါ်တွင် (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်၊ အခန်း (၁)ခန်းလျှင် အိပ်ခန်း (၂)ခန်းပါ (၆၅၀)စတုရန်းပေရှိ တိုက်ခန်းများတည်ဆောက်လျှက်ရှိပြီး မြေညီထပ်နှင့် ပထမထပ်တို့အား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများနှင့် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဝန်ထမ်းများအား ရောင်းချပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ကျန်ရှိသည့် ဒုတိယထပ်နှင့် တတိယထပ်တို့ကို အများပြည်သူအား ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။------- အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုက်ခန်း ဝယ်ယူလျှောက်ထားလိုသူများသည် ပူးတွဲ(က)နှင့်(ခ)ပါ လျှောက်လွှာပုံစံများတွင် ဖြည့်စွက်၍ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူ၍ (၁၅-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပေးပို့ပါရန်နှင့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုက်ခန်းများကို ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ တိုက်ခန်းချေးငွေရယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
၃။-------အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီသို့ ပေးပို့လာ သည့်အမည်စာရင်းများကို အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူပြီး နေထိုင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန် နှင့် လိုအပ်သည့်လျှောက်လွှာပုံစံများအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/11.12.20Housing form.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊အခွန်ဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချမည့် လိုင်စင်များစာရင်း အား အောက်ဖော်ပြပါ Link Address www.nptdc.gov.mm/customized/ images/3.12.20TD02.jpg တွင် download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ပထမ အဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၃၉)လုံးမှ (၂၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ပထမထပ် (၈)ခန်း နှင့် ဒုတိယထပ် (၃၂) ခန်းတို့အား မဲနှိုက်နေရာချထားမှုကို ဖော်ပြပါ Link Address များတွင် www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Housings1st Floor 8 bits.pdf www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Housings2nd Floor 32bits.pdf> download ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညို လမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ပထမအကြိမ်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၃၉)လုံးမှ မဲနှိုက်ရန်ကျန်ရှိသည့် ပထမထပ်(၈)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်(၃၂)ခန်းနှင့် တတိယထပ်ငွေပေးသွင်းသည့်(၂)ခန်း စုစုပေါင်း(၄၂)ခန်းအား (၂၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချိန်မှစ၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မင်္ဂလာခန်းမ၌ မဲနှိုက်နေရာချထားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။------- အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် လျှောက်ထားသူများကို COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း လူစုလူဝေးမဖြစ်စေရေးအတွက် ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုတော့ဘဲ လျှောက်ထားသူများကိုယ်စား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီက မဲနှိုက်ဆောက်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားကျင်းပနေမှုများအား နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၏ NPTDC Webportal Facebook Page တွင် တိုက်ရိုက် ( Live ) ထုတ်လွှင့် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မဲနှိုက်မည့်လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) ပထမထပ် (၈)ခန်း
(၁၁၃၀)၊ (၁၁၃၃)၊ (၁၁၃၆)၊ (၁၁၃၇)၊ (၁၁၄၂)၊ (၁၁၄၃)၊ (၁၁၄၅)၊ (၁၁၄၈)။
(ခ) ဒုတိယထပ် (၃၂)ခန်း
(၁၉၅၂)၊(၁၉၅၅)၊ (၁၉၆၀)၊ (၁၉၆၁)၊ (၁၉၆၂)၊ (၁၉၆၄)၊ (၁၉၆၅)၊ (၁၉၆၈)၊ (၁၉၇၂)၊(၁၉၇၅)၊ (၁၉၈၀)၊ (၁၉၈၃)၊ (၁၉၈၄)၊ (၁၉၈၅)၊(၁၉၈၇)၊ (၁၉၈၈)၊ (၁၉၈၉)၊ (၁၉၉၂)၊ (၁၉၉၃)၊ (၁၉၉၄)၊ (၁၉၉၆)၊ (၁၉၉၈)၊ (၂၀၀၂)၊ (၂၀၀၅)၊ (၂၀၀၆)၊ (၂၀၀၈)၊ (၂၀၀၉)၊ (၂၀၁၀)၊ (၂၀၁၂)၊ (၂၀၁၅)၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၁၆၃)။
(ဂ) တတိယထပ် (၂)ခန်း
တင်ဒါကြော်ငြာစာအမှတ်( ၂ /၂၀၂၀ )
( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ လ ၂၀ ရက် )
၁။-------( ၂၀၂၀-၂၀၂၁ )ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သာမန်အသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့်ဝယ်ယူမည့် အောက်ဖော်ပြပါ မီးသတ်ဆေးဗူး(၃)မျိုးအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
( က ) မီးသတ်ဆေးဗူး(1Kg) (၅၇၄) ဗူး
( ခ ) မီးသတ်ဆေးဗူး(2Kg) (၁၇၅) ဗူး
( ဂ ) မီးသတ်ဆေးဗူး(3Kg) (၅၇၉) ဗူး
- တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် (၂၀ - ၁၁ - ၂၀၂၀)ရက်နေ့
- တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် (၄ - ၁၂ - ၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၆:၀၀)နာရီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တယ်လီဖုန်းအမှတ် (၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်း ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုက်ခန်းများအား ဒုတိယအဆင့် တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်သည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးတွင် လျှောက်ထားသူများသိရှိစေရန် ကြေညာခြင်း
၁။-------နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညို လမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုက်ခန်း(၃၀၀၀)အနက်မှ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် တိုက်(၁၂၅)လုံးရှိ မြေညီထပ်(၅၀၀)ခန်း၊ ပထမထပ်(၅၀၀)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်(၅၀၀)ခန်း၊ တတိယထပ် (၅၀၀)ခန်းတို့အား နေရာချထားနိုင်ရေးအတွက် လက်ငင်းငွေချေပေးသွင်းသူများနှင့် ဘဏ်ချေးငွေစနစ် ဖြင့် ငွေပေးသွင်းသူများကို အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများစိစစ်နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီမှ အောက်ပါ အချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) လျှောက်ထားသူများအား လက်ငင်းငွေချေပေးသွင်းသူနှင့် ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းသူများမှ (၁၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့အတွင်း တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏(၃၀%)အား ပေးသွင်းရန်၊ သတ်မှတ်ထားသောရက်အတွင်း ငွေမသွင်းသူများ၏ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များကို ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်၊
(ခ) ငွေသွင်းပြီးပါက လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်အလိုက် လျှောက်ထားသည့်အထပ်များ ရှိ အခန်းများကို မဲစနစ်ဖြင့် နေရာချထားခြင်း၊
(ဂ) မဲစနစ်ဖြင့်အခန်းနေရာရရှိပါက လက်ငင်းငွေချေစနစ်ဖြင့် ပေးသွင်းသူများအနေ ဖြင့် ကျန်(၇၀%)အား ပထမအရစ်ပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၃၀) အတွင်း အကြေပေးသွင်းရမည်။ ကျန်(၇၀%)အား ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်းမှ ငွေမသွင်းလျှင် အခန်းနေရာရရှိထားမှုအား ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်၊
(ဃ) ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းသူများမှ မဲစနစ်ဖြင့် အခန်းနေရာရရှိပြီးသည့် နေ့မှ(၁၄)ရက်အတွင်း နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်နှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိလျှင် အခန်းနေရာရရှိမှုအား ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
၂။-------လျှောက်ထားသူများအနက် အောက်ပါလျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များမှာ တိုက်ခန်းတန်ဖိုး ကျသင့်ငွေ၏ (၃၀%)အား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ် ကော်မတီ၌ ဘဏ်ငွေသွင်းချလံ လာရောက်ထုတ်ယူ၍ (၁၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ဇမ္ဗူသီရိဘဏ်ခွဲ၊ မြို့မစျေး ဘဏ်ခွဲ၊ သပြေကုန်းစျေးဘဏ်ခွဲ၊ ဥတ္တရသီရိဘဏ်ခွဲ၊ ပျဉ်းမနားဘဏ်ခွဲ)တို့တွင် ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်-
(က) မြေညီထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ
(၀၃၀၀)၊ (၀၃၀၁)၊ (၀၃၀၂)၊ (၀၃၀၃)(၀၃၀၄)၊ (၀၃၀၆)၊ (၀၃၀၇)၊ (၀၃၀၈)၊ (၀၃၀၉)၊ (၀၃၁၁)၊ (၀၃၁၂)၊ (၀၃၁၃)၊ (၀၃၁၄)၊ (၀၃၁၅)၊ (၀၃၁၆)၊ (၀၃၁၇)၊ (၀၃၁၈)၊ (၀၃၂၀)၊ (၀၃၂၁)၊ (၀၃၂၃)၊ (၀၃၂၄)၊ (၀၃၂၅)၊ (၀၃၂၆)၊ (၀၃၂၇)၊ (၀၃၂၈)၊ (၀၃၂၉)၊ (၀၃၃၀)၊ (၀၃၃၁)၊ (၀၃၃၂)၊ (၀၃၃၃)၊ (၀၃၃၄)၊ (၀၃၃၅)၊ (၀၃၃၆)၊ (၀၃၃၇)၊ (၀၃၃၈)၊ (၀၃၄၀)၊ (၀၃၄၁)၊ (၀၃၄၂)၊ (၀၃၄၃)၊ (၀၃၄၄)၊ (၀၃၄၅)၊ (၀၃၄၆)၊ (၀၃၄၇)၊ (၀၃၄၉)၊ (၀၃၅၀)၊ (၀၃၅၁)၊ (၀၃၅၂)၊ (၀၃၅၃)၊ (၀၃၅၄)၊ (၀၃၅၅)၊ (၀၃၅၆)၊ (၀၃၅၇)၊ (၀၃၅၈)၊ (၀၃၅၉)၊ (၀၃၆၀)၊ (၀၃၆၂)၊ (၀၃၆၃)၊ (၀၃၆၅)၊ (၀၃၆၆)၊ (၀၃၆၇)၊ (၀၃၆၈)၊ (၀၃၆၉)၊ (၀၃၇၁)၊ (၀၃၇၂)၊ (၀၃၇၃)၊ (၀၃၇၄)၊ (၀၃၇၆)၊ (၀၃၇၇)၊ (၀၃၇၈)၊ (၀၃၈၁)၊ (၀၃၈၂)၊ (၀၃၈၃)၊ (၀၃၈၄)၊ (၀၃၈၅)၊ (၀၃၈၆)၊ (၀၃၈၇)၊ (၀၃၈၈)၊ (၀၃၈၉)၊ (၀၃၉၀)၊ (၀၃၉၁)၊ (၀၃၉၂)၊ (၀၃၉၃)၊ (၀၃၉၆)၊ (၀၃၉၈)၊ (၀၄၀၀)၊ (၀၄၀၁)၊ (၀၄၀၂)၊ (၀၄၀၃)၊ (၀၄၀၄)၊ (၀၄၀၅)၊ (၀၄၀၆)၊ (၀၄၀၇)၊ (၀၄၀၈)၊ (၀၄၁၀)၊ (၀၄၁၁)၊ (၀၄၁၃)၊ (၀၄၁၅)၊ (၀၄၁၆)၊ (၀၄၁၇)၊ (၀၄၁၈)၊ (၀၄၁၉)၊ (၀၄၂၀)၊ (၀၄၂၁)၊ (၀၄၂၂)၊ (၀၄၂၃)၊ (၀၄၂၄)၊ (၀၄၂၅)၊(၀၄၂၆)၊ (၀၄၂၈)၊ (၀၄၂၉)၊ (၀၄၃၂)၊ (၀၄၃၃)၊ (၀၄၃၄)၊ (၀၄၃၅)၊ (၀၄၃၆)၊ (၀၄၃၈)၊ (၀၄၃၉)၊ (၀၄၄၀)၊ (၀၄၄၁)၊ (၀၄၄၂)၊ (၀၄၄၃)၊(၀၄၄၄)၊ (၀၄၄၆)၊ (၀၄၄၈)၊ (၀၄၄၉)၊ (၀၄၅၀)၊ (၀၄၅၁)၊ (၀၄၅၂)၊ (၀၄၅၃)၊ (၀၄၅၄)၊ (၀၄၅၅)၊ (၀၄၅၆)၊ (၀၄၅၇)၊ (၀၄၅၈)၊ (၀၄၅၉)၊ (၀၄၆၁)၊ (၀၄၆၂)၊ (၀၄၆၃)၊ (၀၄၆၅)၊ (၀၄၆၆)၊ (၀၄၆၇)၊ (၀၄၆၉)၊ (၀၄၇၀)၊ (၀၄၇၅)၊ (၀၄၇၆)၊ (၀၄၇၇)၊ (၀၄၇၈)၊ (၀၄၇၉)၊ (၀၄၈၀)၊ (၀၄၈၂)၊ (၀၄၈၄)၊ (၀၄၈၅)၊ (၀၄၈၇)၊ (၀၄၈၈)၊ (၀၄၈၉)၊ (၀၄၉၀)၊ (၀၄၉၁)၊ (၀၄၉၂)၊ (၀၄၉၃)၊ (၀၄၉၄)၊ (၀၄၉၅)၊ (၀၄၉၆)၊ (၀၄၉၈)၊ (၀၅၀၁)၊ (၀၅၀၂)၊ (၀၅၀၄)၊ (၀၅၀၅)၊ (၀၅၀၆)၊ (၀၅၀၇)၊ (၀၅၀၈)၊ (၀၅၀၉)၊ (၀၅၁၀)၊ (၀၅၁၁)၊ (၀၅၁၂)၊ (၀၅၁၃)၊ (၀၅၁၄)၊ (၀၅၁၆)၊ (၀၅၁၇)၊ (၀၅၁၈)၊ (၀၅၂၀)၊ (၀၅၂၁)၊ (၀၅၂၂)၊ (၀၅၂၃)၊ (၀၅၂၅)၊ (၀၅၂၆)၊ (၀၅၂၇)၊ (၀၅၂၈)၊ (၀၅၃၀)၊ (၀၅၃၁)၊ (၀၅၃၃)၊ (၀၅၃၄)၊ (၀၅၃၅)၊ (၀၅၃၆)၊ (၀၅၃၇)၊ (၀၅၄၁)၊ (၀၅၄၃)၊ (၀၅၄၄)၊ (၀၅၄၅)၊ (၀၅၄၆)၊ (၀၅၄၉)၊ (၀၅၅၀)၊ (၀၅၅၁)၊ (၀၅၅၃)၊ (၀၅၅၅)၊ (၀၅၅၆)၊ (၀၅၅၉)၊ (၀၅၆၀)၊ (၀၅၆၃)၊ (၀၅၆၄)၊ (၀၅၆၇)၊ (၀၅၆၈)၊ (၀၅၆၉)၊ (၀၅၇၁)၊ (၀၅၇၃)၊ (၀၅၇၄)၊ (၀၅၇၆)၊ (၀၅၇၇)၊ (၀၅၇၈)၊ (၀၅၈၁)၊ (၀၅၈၃)၊ (၀၅၈၄)၊ (၀၅၈၅)၊ (၀၅၈၆)၊ (၀၅၈၇)၊ (၀၅၈၈)၊ (၀၅၈၉)၊ (၀၅၉၀)၊ (၀၅၉၁)၊ (၀၅၉၂)၊ (၀၅၉၃)၊ (၀၅၉၄)၊ (၀၅၉၅)၊ (၀၅၉၇)၊ (၀၅၉၈)၊ (၀၆၀၀)၊ (၀၆၀၁)၊ (၀၆၀၂)၊ (၀၆၀၄)၊ (၀၆၀၅)၊ (၀၆၀၆)၊ (၀၆၀၇)၊ (၀၆၀၈)၊ (၀၆၀၉)၊ (၀၆၁၀)၊ (၀၆၁၂)၊ (၀၆၁၄)၊ (၀၆၁၅)၊ (၀၆၁၇)၊ (၀၆၁၉)၊ (၀၆၂၀)၊ (၀၆၂၁)၊ (၀၆၂၂)၊ (၀၆၂၄)၊ (၀၆၂၆)၊ (၀၆၂၇)၊ (၀၆၂၈)၊ (၀၆၃၀)၊ (၀၆၃၁)၊ (၀၆၃၂)၊ (၀၆၃၃)၊ (၀၆၃၄)၊ (၆၀၃၅)၊ (၀၆၃၆)၊ (၀၆၃၇)၊ ( ၀၆၃၈)၊ (၀၆၃၉)၊ (၀၆၄၀)၊ (၀၆၄၂)၊ (၀၆၄၃)၊ (၀၆၄၄)၊ (၀၆၄၅)၊ (၀၆၄၆)၊ (၀၆၄၇)၊ (၀၆၄၈)၊ (၀၆၄၉)၊ (၀၆၅၀)၊ (၀၆၅၂)၊ (၀၆၅၃)၊ (၀၆၅၄)၊ (၀၆၅၅)၊ (၀၆၅၆)၊ (၀၆၅၇)၊ (၀၆၆၁)၊ (၀၆၆၂)၊ (၀၆၆၃)၊ (၀၆၆၄)၊ (၀၆၆၅)၊ (၀၆၆၆)၊ (၀၆၆၈)၊ (၀၆၆၉)၊ (၀၆၇၀)၊ (၀၆၇၁)၊ (၀၆၇၂)၊ (၀၆၇၃)၊ (၀၆၇၄)၊ (၀၆၇၇)၊ (၀၆၇၈)၊ (၀၆၇၉)၊ (၀၆၈၀)၊ (၀၆၈၂)၊ (၀၆၈၃)၊ (၀၆၈၇)၊ (၀၆၈၈)၊ (၀၆၈၉)၊ (၀၆၉၀)၊ (၀၆၉၁)၊ (၀၆၉၂)၊ (၀၆၉၃)၊ (၀၆၉၅)၊ (၀၆၉၆)၊ (၀၆၉၇)၊ (၀၆၉၉)၊ (၀၇၀၀)၊ (၀၇၀၂)၊ (၀၇၀၃)၊ (၀၇၀၄)၊ (၀၇၀၇)၊ (၀၇၁၂)၊ (၀၇၁၃)၊ (၀၇၁၇)၊ (၀၇၁၈)၊ (၀၇၁၉)၊ (၀၇၂၀)၊ (၀၇၂၂)၊ (၀၇၂၃)၊ (၀၇၂၄)၊ (၀၇၂၅)၊ (၀၇၂၆)၊ (၀၇၂၉)၊ ၀၇၃၀)၊ (၀၇၃၃)၊ (၀၇၃၄)၊ (၀၇၃၅)၊ (၀၇၃၆)၊ (၀၇၃၇)၊ (၀၇၃၈)၊ (၀၇၄၀)၊ (၀၇၄၁)၊ (၀၇၄၂)၊ (၀၇၄၃)၊ (၀၇၄၆)၊ (၀၇၄၉)၊ (၀၇၅၀)၊ (၀၇၅၁)၊ (၀၇၅၂)၊ (၀၇၅၅)၊ (၀၇၅၆)၊ (၀၇၅၇)၊ (၀၇၅၈)၊ (၀၇၅၉)၊ (၀၇၆၀)၊ (၀၇၆၂)၊ (၀၇၆၃)၊ (၀၇၆၄)၊ (၀၇၆၅)၊ (၀၇၆၆)၊ (၀၇၆၈)၊ (၀၇၆၉)၊ (၀၇၇၀)၊ (၀၇၇၁)၊ (၀၇၇၅)၊ (၀၇၇၆)၊ (၀၇၇၇)၊ (၀၇၈၁)၊ (၀၇၈၃)၊ (၀၇၈၄)၊ (၀၇၈၈)၊ (၀၇၈၉)၊ (၀၇၉၀)၊ (၀၇၉၁)၊ (၀၇၉၂)၊ (၀၇၉၃)၊ (၀၇၉၄)၊ (၀၇၉၇)၊ (၀၇၉၈)၊ (၀၈၀၁)၊ (၀၈၀၄)၊ (၀၈၀၅)၊ (၀၈၀၆)၊ (၀၈၀၇)၊ (၀၈၀၉)၊ (၀၈၁၁)၊ (၀၈၁၂)၊ (၀၈၁၃)၊ (၀၈၁၄)၊ (၀၈၁၉)၊ (၀၈၂၁)၊ (၀၈၂၂)၊ (၀၈၂၄)၊ (၀၈၂၅)၊ (၀၈၂၆)၊ (၀၈၂၈) ၀၈၃၁)၊ (၀၈၃၂)၊ (၀၈၃၃)၊ (၀၈၄၀)၊ (၀၈၄၁)၊ (၀၈၄၂)၊ (၀၈၄၄)၊ (၀၈၄၆)၊ (၀၈၄၇)၊ (၀၈၄၉)၊ (၀၈၅၁)၊ (၀၈၅၂)၊ (၀၈၅၃)၊ (၀၈၅၄)၊ (၀၈၅၅)၊ (၀၈၅၆)၊ (၀၈၅၇)၊ (၀၈၅၈)၊ (၀၈၅၉)၊ (၀၈၆၀)၊ (၀၈၆၁)၊ (၀၈၆၂)၊ (၀၈၆၄)၊ (၀၈၆၆)၊ (၀၈၆၇)၊ (၀၈၆၈)၊ (၀၈၆၉)၊ (၀၈၇၀)၊ (၀၈၇၁)၊ (၀၈၇၂)၊ (၀၈၇၃)၊ (၀၈၇၄)၊ (၀၈၇၅)၊ (၀၈၇၇)၊ (၀၈၇၈)၊ (၀၈၇၉)၊ (၀၈၈၀)၊ (၀၈၈၁)၊ (၀၈၈၂)၊ (၀၈၈၃)၊ (၀၈၈၄)၊ (၀၈၈၅)၊ (၀၈၈၇)၊ (၀၈၈၈)၊ (၀၈၉၃)၊ (၀၈၉၄)၊ (၀၈၉၅)၊ (၀၈၉၇)၊ (၀၈၉၈)၊ (၀၈၉၉)၊ (၀၉၀၀)၊ (၀၉၀၂)၊ (၀၉၀၃)၊ (၀၉၀၆)၊ (၀၉၀၇)၊ (၀၉၀၉)၊ (၀၉၁၀)၊ (၀၉၁၁)၊ (၀၉၁၂)၊ (၀၉၁၃)၊ (၀၉၁၅)၊ (၀၉၁၇)၊ (၀၉၁၈)၊ (၀၉၁၉)၊ (၀၉၂၀)၊ (၀၉၂၁)၊ (၀၉၂၂)၊ (၀၉၂၃)၊ (၀၉၂၄)၊ (၀၉၂၆)၊ (၀၉၃၀)၊ (၀၉၃၁)၊ (၀၉၃၂)၊ (၀၉၃၃)၊ (၀၉၃၄)၊ (၀၉၃၆)၊ (၀၉၃၉)၊ (၀၉၄၀)၊ (၀၉၄၃)၊ (၀၉၄၄)၊ (၀၉၄၆)၊ (၀၉၄၇)၊ (၀၉၄၈)၊ (၀၉၄၉)၊ (၀၉၅၁)၊ (၀၉၅၂)၊ (၀၉၅၃)၊ (၀၉၅၅)၊ (၀၉၅၇)၊ (၀၉၅၉)၊ (၀၉၆၀)၊ (၀၉၆၁)၊ (၀၉၆၂)၊ (၀၉၆၃)၊ (၀၉၆၄)၊ (၀၉၆၆)၊ (၀၉၉၇)၊ (၀၉၆၇)၊ (၀၉၆၉)၊ (၀၉၇၀)၊ (၀၉၇၁)၊ (၀၉၇၂)၊ (၀၉၇၃)၊ (၀၉၇၄)၊ (၀၉၇၅)၊ (၀၉၇၆)၊ (၀၉၇၈)၊ (၀၉၇၉)။
(ခ) ပထမထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ
(၁၁၅၀)၊ (၁၁၅၁)၊ (၁၁၅၂)၊ (၁၁၅၃)၊ (၁၁၅၄)၊ (၁၁၅၅)၊ (၁၁၅၆)၊ (၁၁၅၇)၊ (၁၁၅၈)၊ (၁၁၅၉)၊ (၁၁၆၀)၊ (၁၁၆၁)၊ (၁၁၆၂)၊ (၁၁၆၃)၊ (၁၁၆၄)၊ (၁၁၆၅)၊ (၁၁၆၆)၊ (၁၁၆၈)၊ (၁၁၆၉)၊ (၁၁၇၀)၊ (၁၁၇၁)၊ (၁၁၇၂)၊ (၁၁၇၃)၊ (၁၁၇၄)၊ (၁၁၇၅)၊ (၁၁၇၆)၊ (၁၁၇၇)၊ (၁၁၇၈)၊ (၁၁၇၉)၊ (၀၁၈၀)၊ (၁၁၈၂)၊ (၁၁၈၄)၊ (၁၁၈၅)၊ (၁၁၈၆)၊ (၁၁၈၇)၊ (၁၁၈၈)၊ (၁၁၈၉)၊ (၁၁၉၁)၊ (၁၁၉၂)၊ (၁၁၉၃)၊ (၁၁၉၄)၊ (၁၁၉၅)၊ (၁၁၉၆)၊ (၁၁၉၇)၊ (၁၁၉၈)၊ (၁၁၉၉)၊ (၁၂၀၀)၊ (၁၂၀၁)၊ (၁၂၀၂)၊ (၁၂၀၃)၊ (၁၂၀၄)၊ (၁၂၀၅)၊ (၁၂၀၆)၊ (၁၂၀၇)၊ (၁၂၀၈)၊ (၁၂၀၉)၊ (၁၂၁၀)၊ (၁၂၁၁)၊ (၁၂၁၂)၊ (၁၂၁၃)၊ (၁၂၁၄)၊ (၁၂၁၅)၊ (၁၂၁၆)၊ (၁၂၁၇)၊ (၁၂၁၈)၊ (၁၂၁၉)၊ (၁၂၂၀)၊ (၁၂၂၁)၊ (၁၂၂၂)၊ (၁၂၂၃)၊ (၁၂၂၄)၊ (၁၂၂၅)၊ (၁၂၂၆)၊ (၁၂၂၇)၊ (၁၂၂၈)၊ (၁၂၂၉)၊ (၁၂၃၀)၊ (၁၂၃၁)၊ (၁၂၃၂)၊ (၁၂၃၃)၊ (၁၂၃၄)၊ (၁၂၃၅)၊ (၁၂၃၆)၊ (၁၂၃၇)၊ (၁၂၃၈)၊ (၁၂၃၉)၊ (၁၂၄၀)၊ (၁၂၄၁)၊ (၁၂၄၂)၊ (၁၂၄၃)၊ (၁၂၄၄)၊ (၁၂၄၅)၊ (၁၂၄၆)၊ (၁၂၄၇)၊ (၁၂၄၉)၊ (၁၂၅၀)၊ (၁၂၅၁)၊ (၁၂၅၂)၊ (၁၂၅၃)၊ (၁၂၅၄)၊ (၁၂၅၅)၊ (၁၂၅၆)၊ (၁၂၅၈)၊ (၁၂၅၉)၊ (၁၂၆၀)၊ (၁၂၆၁)၊ (၁၂၆၂)၊ (၁၂၆၃)၊ (၁၂၆၄)၊ (၁၂၆၅)၊ (၁၂၆၆)၊ (၁၂၆၇)၊ (၁၂၆၈)၊ (၁၂၇၀)၊ (၁၂၇၁)၊ (၁၂၇၂)၊ (၁၂၇၃)၊ (၁၂၇၄)၊ (၁၂၇၅)၊ (၁၂၇၇)၊ (၁၂၇၈)၊ (၁၂၇၉)၊ (၁၂၈၀)၊ (၁၂၈၁)၊ (၁၂၈၂)၊ (၁၂၈၃)၊ (၁၂၈၄)၊ (၁၂၈၅)၊ (၁၂၈၆)၊ (၁၂၈၇)၊ (၁၂၈၈)၊ (၁၂၉၀)၊ (၁၂၉၁)၊ (၁၂၉၃)၊ (၁၂၉၄)၊ (၁၂၉၅)၊ (၁၂၉၆)၊ (၁၂၉၈)၊ (၁၂၉၉)၊ (၁၃၀၀)၊ (၁၃၀၁)၊ (၁၃၀၂)၊ (၁၃၀၄)၊ (၁၃၀၅)၊ (၁၃၀၆)၊ (၁၃၀၇)၊ (၁၃၀၈)၊ (၁၃၁၀)၊ (၁၃၁၁)၊ (၁၃၁၂)၊ (၁၃၁၃)၊ (၁၃၁၄)၊ (၁၃၁၅)၊ (၁၃၁၆)၊ (၁၃၁၇)၊ (၁၃၁၈)၊ (၁၃၁၉)၊ (၁၃၂၀)၊ (၁၃၂၁)၊ (၁၃၂၂)၊ (၁၃၂၃)၊ (၁၃၂၅)၊ (၁၃၂၆)၊ (၁၃၂၇)၊ (၁၃၂၈)၊ (၁၃၂၉)၊ (၁၃၃၀)၊ (၁၃၃၁)၊ (၁၃၃၂)၊ (၁၃၃၃)၊ (၁၃၃၄)၊ (၁၃၃၅)၊ (၁၃၃၆)၊ (၁၃၃၈)၊ (၁၃၃၉)၊ (၁၃၄၀)၊ (၁၃၄၁)၊ (၁၃၄၂)၊ (၁၃၄၃)၊ (၁၃၄၄)၊ (၁၃၄၅)၊ (၁၃၄၆)၊ (၁၃၄၇)၊ (၁၃၄၈)၊ (၁၃၄၉)၊ (၁၃၅၀)၊ (၁၃၅၁)၊ (၁၃၅၂)၊ (၁၃၅၃)၊ (၁၃၅၄)၊ (၁၃၅၅)၊ (၁၃၅၆)၊ (၁၃၅၇)၊ (၁၃၅၈)၊ (၁၃၅၉)၊ (၁၃၆၀)၊ (၁၃၆၁)၊ (၁၃၆၂)၊ (၁၃၆၃)၊ (၁၃၆၄)၊ (၁၃၆၅)၊ (၁၃၆၇)၊ (၁၃၆၈)၊ (၁၃၆၉)၊ (၁၃၇၀)၊ (၁၃၇၁)၊ (၁၃၇၂)၊ (၁၃၇၃)၊ (၁၃၇၄)၊ (၁၃၇၅)၊ (၁၃၇၆)၊ (၁၃၇၇)၊ (၁၃၇၈)၊ (၁၃၇၉)၊ (၁၃၈၀)၊ (၁၃၈၁)၊ (၁၃၈၂)၊ (၁၃၈၃)၊ (၁၃၈၄)၊ (၁၃၈၅)၊ (၁၃၈၆)၊ (၁၃၈၇)၊ (၁၃၈၈)၊ (၁၃၈၉)၊ (၁၃၉၀)၊ (၁၃၉၁)၊ (၁၃၉၂)၊ (၁၃၉၃)၊ (၁၃၉၄)၊ (၁၃၉၅)၊ (၂၃၉၆)၊ (၁၃၉၇)၊ (၁၃၉၉)၊ (၁၄၀၀)၊ (၁၄၀၁)၊ (၁၄၀၂)၊ (၁၄၀၃)၊ (၁၄၀၄)၊ (၁၄၀၅)၊ (၁၄၀၆)၊ (၁၄၀၇)၊ (၁၄၀၈)၊ (၁၄၀၉)၊ (၁၄၁၀)၊ (၁၄၁၁)၊ (၁၄၁၂)၊ (၁၄၁၃)၊ (၁၄၁၄)၊ (၁၄၁၅)၊ (၁၄၁၆)၊ (၁၄၁၇)၊ (၁၄၁၈)၊ (၁၄၁၉)၊ (၁၄၂၀)၊ (၁၄၂၁)၊ (၁၄၂၂)၊ (၁၄၂၃)၊ (၁၄၂၄)၊ (၁၄၂၅)၊ (၁၄၂၆)၊ (၁၄၂၇)၊ (၁၄၂၈)၊ (၁၄၂၉)၊ (၁၄၃၀)၊ (၁၄၃၁)၊ (၁၄၃၂)၊ (၁၄၃၄)၊ (၁၄၃၅)၊ (၁၄၃၆)၊ (၁၄၃၇)၊ (၁၄၃၈)၊ (၁၄၃၉)၊ (၁၄၄၀)၊ (၁၄၄၁)၊ (၁၄၄၂)၊ (၁၄၄၃)၊ (၁၄၄၄)၊ (၁၄၄၇)၊ (၁၄၄၈)၊ (၁၄၄၉)၊ (၁၄၅၀)၊ (၁၄၅၁)၊ (၁၄၅၂)၊ (၁၄၅၃)၊ (၁၄၅၄)၊ (၁၄၅၅)၊ (၁၄၅၆)၊ (၁၄၅၇)၊ (၁၄၅၈)၊ (၁၄၅၉)၊ (၁၄၆၀)၊ (၁၄၆၁)၊ (၁၄၆၂)၊ (၁၄၆၃)၊ (၁၄၆၄)၊ (၁၄၆၅)၊ (၁၄၆၆)၊ (၁၄၆၇)၊ (၁၄၆၈)၊ (၁၄၆၉)၊ (၁၄၇၀)၊ (၁၄၇၁)၊ (၁၄၇၃)၊ (၁၄၇၄)၊ (၁၄၇၅)၊ (၁၄၇၆)၊ (၁၄၇၇)၊ (၁၄၇၈)၊ (၁၄၇၉)၊ (၁၄၈၀)၊ (၁၄၈၁)၊ (၁၄၈၂)၊ (၁၄၈၅)၊ (၁၄၈၆)၊ (၁၄၈၇)၊ (၁၄၈၈)၊ (၁၄၈၉)၊ (၁၄၉၀)၊ (၁၄၉၁)၊ (၁၄၉၄)၊ (၁၄၉၅)၊ (၁၄၉၆)၊ (၁၄၉၇)၊ (၁၄၉၈)၊ (၁၄၉၉)၊ (၁၅၀၀)၊ (၁၅၀၁)၊ (၁၀၅၂)၊ (၁၅၀၃)၊ (၁၅၀၄)၊ (၁၅၀၅)၊ (၁၅၀၆)၊ (၁၅၀၇)၊ (၁၅၀၈)၊ (၁၅၁၀)၊ (၁၅၁၂)၊ (၁၅၁၉)၊ (၁၅၂၁)၊ (၁၅၂၂)၊ (၁၅၂၃)၊ (၁၅၂၄)၊ (၁၅၂၇)၊ (၁၅၃၀)၊ (၁၅၃၁)၊ (၁၅၃၂)၊ (၁၅၃၃)၊ (၁၅၃၄)၊ (၁၅၃၇)၊ (၁၅၃၈)၊ (၁၅၃၉)၊ (၁၅၄၀)၊ (၁၅၄၃)၊ (၁၅၄၆)၊ (၁၅၄၇)၊ (၁၅၄၈)၊ (၁၅၄၉)၊ (၁၅၅၀)၊ (၁၅၅၁)၊ (၁၅၅၂)၊ (၁၅၅၄)၊ (၁၅၅၅)၊ (၁၅၅၆)၊ (၁၅၅၇)၊ (၁၅၅၈)၊ (၁၅၆၀)၊ (၁၅၆၁)၊ (၁၅၆၂)၊ (၁၅၆၃)၊ (၁၅၆၅)၊ (၁၅၆၈)၊ (၁၅၆၉)၊ (၁၅၇၀)၊ (၁၅၇၁)၊ (၁၅၇၂)၊ (၁၅၇၃)၊ (၁၅၇၄)၊ (၁၅၇၅)၊ (၁၅၈၂)၊ (၁၅၈၃)၊ (၁၅၈၄)၊ (၁၅၈၇)၊ (၁၅၉၃)၊ (၁၆၀၀)၊ (၁၆၀၇)၊ (၁၆၀၈)၊ (၁၆၀၉)၊ (၁၆၁၂)၊ (၁၆၁၃)၊ (၁၆၁၅)၊ (၁၆၁၆)၊ (၁၆၁၇)၊ (၁၆၁၈)၊ (၁၆၂၁)၊ (၁၆၂၃)၊ (၁၆၂၅)၊ (၁၆၂၆)၊ (၁၆၂၉)၊ (၁၆၃၁)၊ (၁၆၃၃)၊ (၁၆၃၄)၊ (၁၆၃၅)၊ (၁၆၃၆)၊ (၁၆၃၈)၊ (၁၆၄၀)၊ (၁၆၄၉)၊ (၁၆၈၀)၊ (၁၆၈၉)၊ (၁၆၉၄)၊ (၁၇၂၂)၊ (၁၇၃၀)၊ (၁၇၃၁)၊ (၁၇၃၉)၊ (၁၇၅၂)၊ (၁၇၅၃)၊ (၁၇၅၄)၊ (၁၇၅၅)၊ (၁၇၅၆)၊ (၁၇၅၇)၊ (၁၇၅၈)၊ (၁၇၅၉)၊ (၁၇၆၀)၊ (၁၇၆၁)၊ (၁၇၆၂)၊ (၁၇၆၄)၊ (၁၇၆၅)၊ (၁၇၆၆)၊ (၁၇၆၇)၊ (၁၇၆၈)၊ (၁၇၆၉)၊ (၁၇၇၀)၊ (၁၇၇၁)၊ (၁၇၇၂)၊ (၁၇၇၃)၊ (၁၇၇၄)၊ (၁၇၇၅)၊ (၁၇၇၆)၊ (၁၇၈၃)၊ (၁၇၉၁)၊ (၁၈၁၁)၊ (၁၈၄၉)၊ (၂၀၁၇)၊ (၂၀၁၉)၊ (၂၀၂၀)၊ (၂၀၂၃)၊ (၂၀၂၄)၊ (၂၀၂၅)၊ (၂၀၂၇)၊ (၂၀၂၈)၊ (၂၀၂၉)၊ (၂၀၃၀)၊ (၂၀၃၁)၊ (၂၀၃၂)၊ (၂၀၃၃)၊ (၂၀၃၄)၊ (၂၀၃၅)၊ (၂၀၃၈)၊ (၂၀၄၀)၊ (၂၀၄၁)၊ (၂၀၄၂)၊ (၂၀၄၃)၊ (၂၀၄၄)၊ (၂၀၄၅)၊ (၂၀၄၆)၊ (၂၀၄၇)၊ (၂၀၄၈)၊ (၂၀၄၉)၊ (၂၀၅၀)၊ (၂၀၅၁)၊ (၂၀၅၄)၊ (၂၀၅၅)၊ (၂၀၅၆)၊ (၂၀၅၇)၊ (၂၀၅၉)၊ (၂၀၆၁)၊ (၂၀၆၂)၊ (၂၀၆၄)၊ (၂၀၆၅)၊ (၂၀၆၆)၊ (၂၀၆၈)၊ (၂၀၆၉)၊ (၂၀၇၁)၊ (၂၀၇၂)၊ (၂၀၇၃)၊ (၂၀၇၄)၊ (၂၀၇၅)၊ (၂၀၇၆)၊ (၂၀၇၇)၊ (၂၀၇၈)၊ (၂၀၇၉)၊ (၂၀၈၀)၊ (၂၀၈၁)၊ (၂၀၈၂)၊ (၂၀၈၃)၊ (၂၀၈၄)၊ (၂၀၈၅)၊ (၂၀၈၆)၊ (၂၀၈၇)၊ (၂၀၈၈)၊ (၂၀၈၉)၊ (၂၀၉၀)။
(ဂ) ဒုတိယထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ
(၂၁၆၂)၊ (၂၁၆၃)၊ (၂၁၆၄)၊ (၂၁၆၅)၊ (၂၁၆၆)၊ (၂၁၆၇)၊ (၂၁၆၈)၊ (၂၁၆၉)၊ (၂၁၇၀)၊ (၂၁၇၁)၊ (၂၁၇၂)၊ (၂၁၇၃)၊ (၂၁၇၄)၊ (၂၁၇၅)၊ (၂၁၇၆)၊ (၂၁၇၇)၊ (၂၁၇၈)၊ (၂၁၇၉)၊ (၂၁၈၀)၊ (၂၁၈၁)၊ (၂၁၈၂)၊ (၂၁၈၃)၊ (၂၁၈၄)၊ (၂၁၈၅)၊ (၂၁၈၆)၊ (၂၁၈၇)၊ (၂၁၈၈)၊ (၂၁၈၉)၊ (၂၁၉၀)၊ (၂၁၉၁)၊ (၂၁၉၂)၊ (၂၁၉၃)၊ (၂၁၉၄)၊ (၂၁၉၅)၊ (၂၁၉၆)၊ (၂၁၉၇)၊ (၂၁၉၈)၊ (၂၁၉၉)၊ (၂၂၀၀)၊ (၂၂၀၁)၊ (၂၂၀၂)၊ (၂၂၀၃)၊ (၂၂၀၄)၊ (၂၂၀၅)၊ (၂၂၀၆)၊ (၂၂၀၇)၊ (၂၂၀၈)၊ (၂၂၀၉)၊ (၂၂၁၀)၊ (၂၂၁၁)၊ (၂၂၁၂)၊ (၂၂၁၃)၊ (၂၂၁၄)၊ (၂၂၁၅)၊ (၂၂၁၆)၊ (၂၂၁၇)၊ (၂၂၁၈)၊ (၂၂၁၉)၊ (၂၂၂၀)၊ (၂၂၂၁)၊ (၂၂၂၂)၊ (၂၂၂၃)၊ (၂၂၂၄)၊ (၂၂၂၅)၊ (၂၂၂၆)၊ (၂၂၂၇)၊ (၂၂၂၈)၊ (၂၂၂၉)၊ (၂၂၃၀)၊ (၂၂၃၁)၊ (၂၂၃၂)၊ (၂၂၃၃)၊ (၂၂၃၄)၊ (၂၂၃၅)၊ (၂၂၃၆)၊ (၂၂၃၇)၊ (၂၂၃၈)၊ (၂၂၃၉)၊ (၂၂၄၀)၊ (၂၂၄၁)၊ (၂၂၄၂)၊ (၂၂၄၃)၊ (၂၂၄၄)၊ (၂၂၄၅)၊ (၂၂၄၆)၊ (၂၂၄၇)၊ (၂၂၄၉)၊ (၂၂၅၀)၊ (၀၀၅၁)၊ (၂၂၅၂)၊ (၂၂၅၃)၊ (၂၂၅၄)၊ (၂၂၅၅)၊ (၂၂၅၆)၊ (၂၂၅၇)၊ (၂၂၅၈)၊ (၂၂၅၉)၊ (၂၂၆၀)၊ (၂၂၆၁)၊ (၂၂၆၂)၊ (၂၂၆၃)၊ (၂၂၆၄)၊ (၂၂၆၅)၊ (၂၂၆၆)၊ (၂၂၆၇)၊ (၂၂၆၉)၊ (၂၂၇၀)၊ (၂၂၇၁)၊ (၂၂၇၂)၊ (၂၂၇၃)၊ (၂၂၇၄)၊ (၂၂၇၅)၊ (၂၂၇၆)၊ (၂၂၇၇)၊ (၂၂၇၈)၊ (၂၂၇၉)၊ (၂၂၈၀)၊ (၂၂၈၁)၊ (၂၂၈၂)၊ (၂၂၈၃)၊ (၂၂၈၅)၊ (၂၂၈၆)၊ (၂၂၈၇)၊ (၂၂၈၈)၊ (၂၂၈၉)၊ (၂၂၉၀)၊ (၂၂၉၁)၊ (၂၂၉၂)၊ (၂၂၉၃)၊ (၂၂၉၄)၊ (၂၂၉၅)၊ (၂၂၉၆)၊ (၂၂၉၇)၊ (၂၂၉၈)၊ (၂၂၉၉)၊ (၂၃၀၀)၊ (၂၃၀၁)၊ (၂၃၀၂)၊ (၂၃၀၃)၊ (၂၃၀၄)၊ (၂၃၀၅)၊ (၂၃၀၆)၊ (၂၃၀၇)၊ (၂၃၀၈)၊ (၂၃၀၉)၊ (၂၃၁၀)၊ (၂၃၁၂)၊ (၂၃၁၃)၊ (၂၃၁၄)၊ (၂၃၁၅)၊ (၂၃၁၆)၊ (၂၃၁၇)၊ (၂၃၁၈)၊ (၂၃၂၁)၊ (၂၃၂၂)၊ (၂၃၂၃)၊ (၂၃၂၄)၊ (၂၃၂၅)၊ (၂၃၂၆)၊ (၂၃၂၇)၊ (၂၃၂၈)၊ (၂၃၂၉)၊ (၂၃၃၀)၊ (၂၃၃၁)၊ (၂၃၃၂)၊ (၂၃၃၃)၊ (၂၃၃၄)၊ (၂၃၃၅)၊ (၂၃၃၆)၊ (၂၃၃၇)၊ (၂၃၃၈)။
၃။-------အထက်အမှတ်စဉ်ပါမှ တိုက်ခန်းတန်ဖိုးကျသင့်ငွေ၏ (၃၀%) ပေးသွင်းပြီးသူများကို အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီမှ တိုက်ခန်းများအား မဲစနစ်ဖြင့် နေရာချထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး နေရာချထားပေးမည့် နေ့ရက်အား NPTDC Website ဖြစ်သော www.nptdc.gov.mm နှင့် NPTDC webportal Facebook Page တို့တွင် ထည့်သွင်းကြေညာ သွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူများ၏ လျှောက်လွှာပါ ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ သို့လည်း အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာနကွပ်ကဲမှုအောက် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်ရှိ အဆင့်မြင့်ဈေးဆိုင်ခန်း(၁၄)ခန်းနှင့် ဇီဝကဆိုင်ခန်း (၂)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် အဆောက်အဦ(၃)လုံး ( ၆ )ခန်း လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်-
(က) အဆင့်မြင့်ဈေးဆိုင်ခန်း ၁၄ ခန်း ၉၅၀
( ခ ) ဇီဝကဆိုင်ခန်း ၆ ခန်း ၁၂၀၀
၂။-------အဆိုပါ လစ်လပ်ဆိုင်ခန်းများအား အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်များအတိုင်း မည်သူ မဆိုလွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်-
(က) ဆိုင်ခန်းတန်ဖိုးအား (၂)နှစ်အတွင်း ဆိုင်ခန်းတန်ဖိုး၏ ပထမအရစ်၃၀%၊ ဒုတိယအရစ် ၄၀%၊ တတိယအရစ်၃၀% အရစ်ကျပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်။
( ခ ) ဆိုင်ခန်းတန်ဖိုးအား ၃၀% ပေးသွင်းစေပြီး ကျန် ၇၀%ကို နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်မှ ချေးငွေယူ၍ ဝယ်ယူမှုစနစ်ဖြင့်ရောင်းချမည်။
၃။-------ဆိုင်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် (၇.၁၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၆:၃၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ဈေးများဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန ဦးမောင်မောင်စံ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(၀၉-၂၅၀၀၉၀၀၀၆)နှင့် ရုံးတယ်လီဖုန်း အမှတ် (၀၆၇-၃၄၁၄၂၉၃ ၊ ၀၆၇-၃၄၁၄၁၆၈)သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်း(၂၃)မျိုးအား တင်ဒါခေါ်ယူ၍ ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် (၄.၁၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့
( ခ ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် (၄.၁၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၅:၀၀)နာရီ
( ဂ ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ အုပ်ချုပ်မှုဌာန၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီး
၂။-------အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် မေးမြန်းစုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်-
- ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုကားလမ်း၊ ဇီဇဝါပန်းဝိုင်းအနီး၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
- ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၅၅၀၁၅၁၊ ၀၆၇-၅၅၀၁၅၃။
- တင်ဒါကြော်ငြာအား www.facebook.com/ZabuthiriSpecialistHospital/ တွင်လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ဌာန(၅)ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရပ်ရပ်အခွင့်အ‌ရေးလိုင်စင်များရောင်းချပြီးစီးမှုစာရင်းအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/10.6.20SoldOutList.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------	ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ အတွင်း Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေးနှင့် ကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနကွပ်ကဲမှု အောက်ရှိ ဈေးများတွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော RCဆိုင်ခန်းများ၊ ပွဲရုံဆိုင်ခန်းများ၊ ဝပ်ရှော့ ဆိုင်ခန်းများ၊ ဇီဝကဆိုင်ခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်ခန်းများ၊ (LF-44)ကုန်စိမ်း/ကုန်ခြောက်၊ သား/ငါးဆိုင်ခန်းများ၊ နံနက်ပိုင်း ပျံကျဈေး/ ညဈေးများနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-
(က) ဈေးများရှိ RCဆိုင်ခန်းများ၊ ပွဲရုံဆိုင်ခန်းများ၊ ဝပ်ရှော့ဆိုင်ခန်းများ၊ ဇီဝကဆိုင်ခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်ခန်းများ၊ (LF-44)ကုန်စိမ်း/ကုန်ခြောက်၊ သား/ငါးဆိုင်ခန်းများ၊ (ဆေးဆိုင်ခန်းများမပါ)အား နံနက်(၀၆:၀၀)နာရီမှ ညနေ (၁၈:၀၀)နာရီအထိသာ ဖွင့်လှစ်ရန်၊
(ခ) နံနက်ပိုင်း ပျံကျဈေးများအားလုံး နံနက် (၀၆:၀၀) နာရီမှ နေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီ အထိသာ ဖွင့်လှစ်ရန်၊
(ဂ) ဈေးများရှိ ညဈေးအားလုံး ယာယီ ပိတ်သိမ်းရန်၊
(ဃ) ဈေးများရှိ ဆေးရုံ၊ဆေးဆိုင်ခန်း များအား ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်ရန်၊
(င) အာဟာရသုခဈေးတွင် ပျံကျဈေးနှင့် ပတ်သက်၍ နံနက်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းဈေး ရှိရာ နံနက်ပိုင်းဈေးအား နံနက်(၀၄:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီအထိသာ ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် ညနေပိုင်းဈေးအား ယာယီပိတ်သိမ်းရန်၊
၂။------- ဤကြေညာချက်အား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့မှစ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး မိဘပြည်သူများ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးအသိဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
စျေးခုံအများစနစ်အား အခြားနည်းဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အသား (ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ်) ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား စျေးခုံအများစနစ်အား အခြားနည်းဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါစျေးခုံနေရာ(၂၀)ခုအား စျေးခုံအများစနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါ၍ လုပ်ကိုင်လိုသူများအနေဖြင့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနသို့(၂၄.၉.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၁:၃၀)နာရီအချိန်တွင် စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ အခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူပြီး တင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
( က ) အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်(ဝက်)စျေးခုံနေရာ (၉) ခု
( ခ ) အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်(အမဲ)စျေးခုံနေရာ (၄) ခု
( ဂ ) အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်(ဆိတ်)စျေးခုံနေရာ (၇) ခု
စုစုပေါင်း (၂၀) ခု
၂။-------အသေးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် (၀၆၇-၄၃၂၄၉၃)သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ပထမအကြိမ် တတိယထပ်အခန်းများ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မဈေးအနီး)တွင် ပထမအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၃၉)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် တတိယထပ် (၁၁)ခန်းအား (၁၈-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားခဲ့သော တိုက်အမှတ်နှင့် အခန်းအမှတ် စာရင်းများအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/3000HousingThirdFloor.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ပထမအကြိမ် ဒုတိယထပ်အခန်းများ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မဈေးအနီး)တွင် ပထမအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၃၉)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ဒုတိယထပ် (၁၂၄)ခန်းအား (၁၈-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားခဲ့သော တိုက်အမှတ်နှင့် အခန်းအမှတ် စာရင်းများအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/3000housingSecondFloor.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် ( ၄၄ )ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား အိတ်ဖွင့်/အခြားနည်းစနစ်ဖြင့်ရောင်းချ ခြင်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) နေ့ရက် - (၂၅.၉.၂၀၂၀)ရက်(သောကြာနေ့)
( ခ ) အချိန် - နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီ
( ဂ ) နေရာ - ဈေးများဌာနအစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊
၂။------- ရောင်းချမည့်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေအား နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှတဆင့် နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် လီမိတက်သို့ ( ၂၃.၉.၂ဝ၂၀ ) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။------- လျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အောက်ပါဌာနများတွင် ရုံးချိန်အတွင်း အခမဲ့ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာပိတ်ရက် မှာ (၂၃.၉.၂ဝ၂၀)ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မွန်းလွဲ(၃:၃ဝ)နာရီဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိ လိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
(က) စီမံရေးရာဌာန - ဝ၆၇-၃၄၁၄၆၁၇
(	ခ	) အခွန်ဌာန - ဝ၆၇-၃၄၁၄၂၉၄၊ဝ၆၇-၈၁ဝ၈၂၁ဝ
(	ဂ	) စျေးများဌာန - ဝ၆၇-၃၄၁၄၂၉၃
(ဃ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန - ဝ၆၇-၃၄၃၂၄၉၃
(	င	) အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းတံတား) - ဝ၆၇-၃၄၃၂ဝ၃၇
၄။-------၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ရောင်းချမည့် လိုင်စင်များစာရင်အား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/18.9.2020licencelist.pdf တွင်လည်းကောင်း၊ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာများအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/18.9.2020applicationform.pdf တွင်လည်းကောင်း download ရယူနိုင်ပါသည်။
အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ပထမအကြိမ် ပထမထပ်အခန်းများ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မဈေးအနီး)တွင် ပထမအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၃၉)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ပထမထပ် (၁၄၈)ခန်းအား (၁၇-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားခဲ့သော တိုက်အမှတ်နှင့် အခန်းအမှတ် စာရင်းများအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/3000HousingFirstFloor.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ပထမအကြိမ် မြေညီထပ်အခန်းများ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မဈေးအနီး)တွင် ပထမအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၃၉)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် (၁၅၆)ခန်းအား (၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားခဲ့သော တိုက်အမှတ်နှင့် အခန်းအမှတ် စာရင်းများအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/3000housing_GroundFloor.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညို လမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ပထမအကြိမ်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက် (၃၉)လုံးမှ အခန်းများ မဲနှိုက်နေရာချထားပေးမည့်အခမ်းအနားများအား (၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၈-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အောက်ပါအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-
(က) မြေညီထပ်ငွေပေးသွင်းသည့်အခန်း (၁၅၆)ခန်းအား (၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီအချိန်မှစ၍ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း၊
(ခ) ပထမထပ်ငွေပေးသွင်းသည့်အခန်း (၁၄၈)ခန်းအား (၁၇-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီအချိန်မှစ၍ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း၊
(ဂ) ဒုတိယထပ်ငွေပေးသွင်းသည့်အခန်း(၁၂၄)ခန်းနှင့် တတိယထပ်ငွေပေးသွင်းသည့် အခန်း (၁၁)ခန်းတို့အား (၁၈-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီအချိန်မှစ၍ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း၊
၂။------- အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် လျှောက်ထားသူများကို Covid – 19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း လူစုလူဝေးမဖြစ်စေရေးအတွက် ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုတော့ဘဲ လျှောက်ထား သူများကိုယ်စား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီက မဲနှိုက်ဆောက်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားကျင်းပနေမှုများအား နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၏ NPTDC webportal Facebook Page တွင် တိုက်ရိုက် ( Live ) ထုတ်လွှင့် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မဲနှိုက်မည့်လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) မြေညီထပ် (၁၅၆)ခန်း၊ (၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့
(၀၀၀၁)၊ (၀၀၀၂)၊ (၀၀၀၃)၊ (၀၀၀၄)၊ (၀၀၀၅)၊ (၀၀၀၇)၊ (၀၀၀၈)၊ (၀၀၁၀)၊ (၀၀၁၂)၊ (၀၀၁၄)၊ (၀၀၁၅)၊ (၀၀၁၇)၊ (၀၀၁၈)၊ (၀၀၂၃)၊ (၀၀၂၄)၊ (၀၀၂၅)၊ (၀၀၂၆)၊ (၀၀၂၉)၊ (၀၀၃၀)၊ (၀၀၃၁)၊ (၀၀၃၂)၊ (၀၀၃၃)၊ (၀၀၃၄)၊ (၀၀၃၅)၊ (၀၀၃၇)၊ (၀၀၃၈)၊ (၀၀၄၀)၊ (၀၀၄၁)၊ (၀၀၄၂)၊ (၀၀၄၃)၊ (၀၀၄၄)၊ (၀၀၄၅)၊ (၀၀၅၀)၊ (၀၀၅၁)၊ (၀၀၅၄)၊ (၀၀၅၅)၊ (၀၀၅၆)၊ (၀၀၅၇)၊ (၀၀၅၈)၊ (၀၀၅၉)၊ (၀၀၆၅)၊ (၀၀၆၆)၊ (၀၀၆၇)၊ (၀၀၆၈)၊ (၀၀၇၀)၊ (၀၀၇၁)၊ (၀၀၇၂)၊ (၀၀၇၃)၊ (၀၀၇၈)၊ (၀၀၈၀)၊ (၀၀၈၂)၊ (၀၀၈၄)၊ (၀၀၈၅)၊ (၀၀၈၈)၊ (၀၀၈၉)၊ (၀၀၉၄)၊ (၀၀၉၅)၊ (၀၀၉၆)၊ (၀၁၀၃)၊ (၀၁၀၄)၊ (၀၁၀၆)၊ (၀၁၀၈)၊ (၀၁၁၂)၊ (၀၁၁၅)၊ (၀၁၁၇)၊ (၀၁၁၉)၊ (၀၁၂၀)၊ (၀၁၂၁)၊ (၀၁၂၂)၊ (၀၁၂၃)၊ (၀၁၂၆)၊ (၀၁၂၉)၊ (၀၁၃၂)၊ (၀၁၃၄)၊(၀၁၃၉)၊ (၀၁၄၄)၊ (၀၁၄၈)၊ (၀၁၄၉)၊ (၀၁၅၀)၊ (၀၁၅၁)၊ (၀၁၅၅)၊ (၀၁၅၆)၊ (၀၁၅၉)၊ (၀၁၆၂)၊ (၀၁၆၅)၊ (၀၁၆၆)၊ (၀၁၆၇)၊ (၀၁၆၉)၊ (၀၁၇၀)၊ (၀၁၇၂)၊ (၀၁၇၄)၊ (၀၁၇၆)၊ (၀၁၇၇)၊ (၀၁၇၈)၊ (၀၁၇၉)၊ (၀၁၈၃)၊ (၀၁၉၀)၊ (၀၁၉၂)၊ (၀၁၉၄)၊ (၀၁၉၅)၊ (၀၁၉၇)၊ (၀၁၉၈)၊ (၀၂၀၂)၊ (၀၂၀၃)၊ (၀၂၀၄)၊ (၀၂၀၅)၊ (၀၂၀၇)၊ (၀၂၀၈)၊ (၀၂၁၂)၊ (၀၂၁၃)၊ (၀၂၁၄)၊ (၀၂၁၅)၊ (၀၂၁၉)၊ (၀၂၂၁)၊ (၀၂၂၂)၊ (၀၂၂၅)၊ (၀၂၂၉)၊ (၀၂၃၀)၊ (၀၂၃၁)၊ (၀၂၃၂)၊ (၀၂၃၃)၊ (၀၂၃၆)၊ (၀၂၃၇)၊ (၀၂၄၀)၊ (၀၂၄၂)၊ (၀၂၄၃)၊ (၀၂၄၅)၊ (၀၂၄၆)၊ (၀၂၄၇)၊ (၀၂၄၈)၊ (၀၂၄၉)၊ (၀၂၅၂)၊ (၀၂၅၅)၊ (၀၂၅၇)၊ (၀၂၅၈)၊ (၀၂၆၀)၊ (၀၂၆၂)၊ (၀၂၆၃)၊ (၀၂၆၅)၊ (၀၂၆၇)၊ (၀၂၆၈)၊ (၀၂၇၁)၊ (၀၂၇၂)၊ (၀၂၇၆)၊ (၀၂၇၇)၊ (၀၂၈၀)၊ (၀၂၈၁)၊ (၀၂၈၂)၊ (၀၂၈၄)၊ (၀၂၈၉)၊ (၀၂၉၁)၊ (၀၂၉၂)၊ (၀၂၉၃)၊ (၀၂၉၄)၊ (၀၂၉၈)၊ (၀၂၉၉)။
(ခ) ပထမထပ် (၁၄၈)ခန်း၊ (၁၇-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့
(၀၀၀၆)၊ (၀၀၁၃)၊ (၀၀၁၉)၊ (၀၀၂၀)၊ (၀၀၂၂)၊ (၀၀၂၇)၊ (၀၀၃၉)၊ (၀၀၄၆)၊ (၀၀၄၇)၊ (၀၀၄၈)၊ (၀၀၆၉)၊ (၀၀၇၅)၊ (၀၀၇၉)၊ (၀၀၈၇)၊ (၀၁၀၁)၊ (၀၁၁၆)၊ (၀၁၃၁)၊ (၀၁၃၅)၊ (၀၁၄၂)၊ (၀၁၅၄)၊ (၀၁၅၈)၊ (၀၁၆၄)၊ (၀၂၀၀)၊ (၀၂၂၄)၊ (၀၂၂၇)၊ (၀၂၃၄)၊ (၀၂၄၁)၊ (၀၂၄၄)၊ (၀၂၅၀)၊ (၀၂၅၉)၊ (၀၂၆၄)၊ (၀၂၇၄)၊ (၀၂၈၃)၊ (၀၂၉၇)၊ (၀၃၆၁)၊ (၀၃၆၄)၊ (၀၃၈၀)၊ (၀၃၉၄)၊ (၀၃၉၅)၊ (၀၃၉၉)၊ (၀၄၁၂)၊ (၀၄၁၄)၊ (၀၄၃၀)၊ (၀၄၃၁)၊ (၀၄၃၇)၊ (၀၄၄၇)၊ (၀၄၆၀)၊ (၀၄၆၄)၊ (၀၄၆၈)၊ (၀၄၇၂)၊ (၀၄၇၄)၊ (၀၄၈၁)၊ (၀၄၈၃)၊ (၀၄၈၆)၊ (၀၄၉၇)၊ (၀၅၁၉)၊ (၀၅၄၀)၊ (၀၅၄၈)၊ (၀၅၅၄)၊ (၀၅၆၁)၊ (၀၅၆၂)၊ (၀၅၆၅)၊ (၀၅၆၆)၊ (၀၅၇၀)၊ (၀၅၇၂)၊ (၀၅၇၅)၊ (၀၅၇၉)၊ (၀၆၁၁)၊ (၀၆၂၅)၊ (၀၆၄၁)၊ (၀၆၅၁)၊ (၀၆၅၈)၊ (၀၆၆၀)၊ (၀၆၇၅)၊ (၀၆၈၁)၊ (၀၆၈၄)၊ (၀၆၈၅)၊ (၀၇၀၁)၊ (၀၇၀၈)၊ (၀၇၀၉)၊ (၀၇၁၀)၊ (၀၇၁၁)၊ (၀၇၁၄)၊ (၀၇၁၅)၊ (၀၇၁၆)၊ (၀၇၃၁)၊ (၀၇၅၃)၊ (၀၇၅၄)၊ (၀၇၆၁)၊ (၀၇၇၂)၊ (၀၇၇၃)၊ (၀၇၈၂)၊ (၀၇၈၅)၊ (၀၇၈၆)၊ (၀၇၉၅)၊ (၀၇၉၆)၊ (၀၈၀၈)၊ (၀၈၁၆)၊ (၀၈၁၇)၊ (၀၈၂၃)၊ (၀၈၂၇)၊ (၀၈၃၆)၊ (၀၈၃၇)၊ (၀၈၄၃)၊ (၀၈၄၈)၊ (၀၈၅၀)၊ (၀၈၇၆)၊ (၀၈၉၂)၊ (၀၉၀၅)၊ (၀၉၁၄)၊ (၀၉၂၇)၊ (၀၉၂၉)၊ (၀၉၃၈)၊ (၀၉၄၁)၊ (၀၉၄၂)၊ (၀၉၄၅)၊ (၀၉၇၇)၊ (၀၉၈၆)၊ (၀၉၈၈)၊ (၀၉၈၉)၊ (၁၀၀၄)၊ (၁၀၀၅)၊ (၁၀၁၉)၊ (၁၀၄၇)၊ (၁၀၅၃)၊ (၁၀၅၆)၊ (၁၀၅၇)၊ (၁၀၅၈)၊ (၁၀၅၉)၊ (၁၀၆၀)၊ (၁၀၆၅)၊ (၁၀၆၆)၊ (၁၀၇၃)၊ (၁၀၇၆)၊ (၁၀၇၉)၊ (၁၀၈၄)၊ (၁၀၉၁)၊ (၁၀၉၇)၊ (၁၁၀၀)၊ (၁၁၀၃)၊ (၁၁၀၅)၊ (၁၁၁၀)၊ (၁၁၁၆)၊ (၁၁၁၇)၊ (၁၁၁၉)၊ (၁၁၂၅)၊ (၁၁၂၆)၊ (၁၁၂၉)။
(ဂ) ဒုတိယထပ် (၁၂၄)ခန်း၊ (၁၈-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့
(၀၀၆၃)၊(၀၁၇၅)၊ (၀၂၃၅)၊ (၀၃၁၀)၊ (၀၃၂၇)၊ (၀၃၃၉)၊ (၀၄၀၉)၊ (၀၅၀၃)၊ (၀၅၈၀)၊(၀၆၇၆)၊ (၀၇၄၈)၊ (၀၈၀၂)၊ (၀၈၃၈)၊ (၀၉၃၇)၊(၀၉၅၈)၊ (၀၉၉၂)၊ (၁၀၀၃)၊ (၁၀၃၈)၊ (၁၀၄၁)၊ (၁၁၃၄)၊ (၁၁၉၀)၊ (၁၂၄၈)၊ (၁၂၅၇)၊ (၁၂၇၆)၊ (၁၂၈၉)၊ (၁၂၉၇)၊ (၁၃၀၃)၊ (၁၃၆၆)၊ (၁၄၇၂)၊ (၁၄၈၄)၊ (၁၅၁၄)၊ (၁၅၁၇)၊ (၁၅၂၅)၊ (၁၅၄၅)၊ (၁၅၈၁)၊ (၁၅၈၆)၊ (၁၅၉၇)၊ (၁၆၀၂)၊ (၁၆၁၄)၊ (၁၆၂၂)၊ (၁၆၂၄)၊(၁၆၃၇)၊ (၁၆၄၆)၊ (၁၆၉၆)၊ (၁၆၉၇)၊ (၁၆၉၉)၊ (၁၇၀၈)၊ (၁၇၀၉)၊ (၁၇၁၈)၊ (၁၇၁၉)၊(၁၇၂၆)၊ (၁၇၃၂)၊ (၁၇၃၃)၊ (၁၇၃၅)၊ (၁၇၃၇)၊ (၁၇၄၅)၊ (၁၇၄၈)၊ (၁၇၆၃)၊ (၁၇၈၀)၊(၁၇၈၂)၊ (၁၇၈၄)၊ (၁၇၉၃)၊ (၁၇၉၄)၊ (၁၇၉၅)၊ (၁၇၉၈)၊ (၁၈၁၀)၊ (၁၈၁၃)၊ (၁၈၁၄)၊ (၁၈၁၆)၊ (၁၈၁၉)၊ (၁၈၂၀)၊ (၁၈၂၃)၊ (၁၈၃၀)၊ (၁၈၃၃)၊ (၁၈၃၆)၊(၁၈၃၈)၊ (၁၈၃၉)၊ (၁၈၄၂)၊(၁၈၄၃)၊ (၁၈၄၄)၊ (၁၈၄၅)၊ (၁၈၅၀)၊ (၁၈၅၁)၊(၁၈၅၃)၊ (၁၈၅၄)၊ (၁၈၅၆)၊ (၁၈၆၁)၊ (၁၈၆၂)၊ (၁၈၆၄)၊ (၁၈၆၇)၊ (၁၈၇၀)၊(၁၈၇၅)၊ (၁၈၇၆)၊ (၁၈၈၀)၊ (၁၈၈၁)၊ (၁၈၈၅)၊(၁၈၈၈)၊ (၁၈၈၉)၊ (၁၈၉၀)၊(၁၈၉၁)၊ (၁၈၉၇)၊ (၁၈၉၈)၊ (၁၉၁၄)၊ (၁၉၁၆)၊ (၁၉၁၇)၊ (၁၉၁၈)၊ (၁၉၁၉)၊ (၁၉၂၁)၊ (၁၉၂၂)၊ (၁၉၂၄)၊ (၁၉၂၇)၊ (၁၉၂၈)၊ (၁၉၂၉)၊ (၁၉၃၀)၊ (၁၉၃၃)၊ (၁၉၃၄)၊ (၁၉၃၈)၊ (၁၉၃၉)၊ (၁၉၄၀)၊ (၁၉၄၁)၊ (၁၉၄၄)၊ (၁၉၄၈)၊ (၁၉၄၉)၊ (၁၉၅၁)။
(ဃ) တတိယထပ် (၁၁)ခန်း၊ (၁၈-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့
(၀၂၇၉)၊ (၀၆၁၈)၊ (၀၉၅၄)၊ (၁၀၃၇)၊ (၁၀၄၆)၊ (၁၅၂၈)၊ (၁၇၂၄)၊ (၁၈၀၄) (၁၈၆၆)၊ (၂၂၆၈)၊ (၂၂၈၄)၊၊
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) ဇေယျာသီရိမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်းအတွင်း အမှုထမ်းနေအိမ်(၄)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် သံကူကွန်ကရစ်အဆောက်အဦ(၁)လုံးနှင့် နေပြည်တော်စည်ပင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်း အပျိုဆောင်(၃)တွင် လုံခြုံရေးဂိတ်အဆောက်အဦ(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် (၁၅.၁၀.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၆:ဝဝ)နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ (ဖုန်း-၀၆၇၈၁၀၈၂၁၂) တွင် မေးမြန်းစုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၆၁) ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား (တတိယအကြိမ်) စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) နေ့ရက် - (၁၈.၉.၂၀၂၀)ရက်(သောကြာနေ့)
၂။------- လေလံတင်ရောင်းချမည့်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာန မှတဆင့် နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်သို့ (၁၆.၉.၂ဝ၂၀)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။------- လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အောက်ပါဌာနများတွင်ရုံးချိန်အတွင်းအခမဲ့ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မှာ (၁၆.၉.၂ဝ၂၀)ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)မွန်းလွဲ(၃:၃ဝ)နာရီဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက် များသိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
၄။-------၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (တတိယအကြိမ်)လေလံတင်ရောင်းချမည့် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များစာရင်း၊ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ လေလံဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ၊ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ အား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/10.9.20Ation.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
စျေးခုံအများစနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အသား (ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ်) ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား စျေးခုံအများစနစ်ဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါစျေးခုံနေရာ(၂၀)ခုအား စျေးခုံအများစနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည် -
၂။-------အသား(ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ်)ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား စျေးခုံအများစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင် လိုသူများသည် (၄.၉.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၉.၉.၂၀၂၀)ရက်နေ့အတွင်း နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနသို့ စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ များထုတ်ယူပြီး လာရောက်တင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းနှင့် စျေးခုံနယ်မြေသတ်မှတ်ချက်များ၊ စည်းကမ်းချက်များအား လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
၃။-------အသေးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် (၀၆၇-၄၃၂၄၉၃)သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနတွင် ထိန်းသိမ်း ထားရှိသော တာယာအဟောင်းဆိုဒ်စုံ(၁၃၃၆)လုံးနှင့် ဘတ္ထရီအဟောင်းဆိုဒ်စုံ(၃၆၂)လုံးတို့အား နှစ်ခု ပေါင်း၍ Lot တစ်ခုတည်းဖြင့် မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။-------လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များအား ( ၃.၉.၂၀၂၀ )( ကြာသပတေးနေ့ )မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၌ လျှောက်လွှာတစ်စောင်ကို (၂၀၀ဝ/-)ကျပ်ဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာများကို (၁၆.၉.၂၀၂၀)(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)(၁၆:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းလျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
၃။-------အထက်ဖော်ပြပါ တာယာအဟောင်းဆိုဒ်စုံ(၁၃၃၆)လုံးနှင့် ဘတ္ထရီအဟောင်းဆိုဒ်စုံ(၃၆၂)လုံး တို့အား နှစ်ခုပေါင်း၍ Lot တစ်ခုတည်းဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း လေလံတင်ရောင်းချသွား မည်ဖြစ်ပါသည်-
နေ့ရက် ( ၁၇ . ၉ . ၂၀၂၀ )(ကြာသပတေးနေ့)
၄။-------အသေးစိတ်သိရှိလိုသော အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆)သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်(၂)(ဓာတ်ခွဲ) လစာနှုန်း(၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ)ရာထူး (၄)နေရာ ခန့်ထားရန်ရှိပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်-
(ခ) (၃၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
(င) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲနည်းပညာဘွဲ့ B.Med.Tech(Laboratory) ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
(စ) ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါက အနည်းဆုံး(၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၂။-------လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပြီး လျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးပို့ရမည်-
(ခ) မွေးသက္ကရာဇ်နှင့် အသက်
(ဂ) လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊
(ဃ) ပညာအရည်အချင်းနှင့် အောင်မြင်သည့်ခုနှစ်၊ အောင်မြင့်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊
(င) မိဘအမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်နှင့် ၄င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊
(စ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နေ့စွဲနှင့် အလုပ်သမားရုံးအမည်၊
(ဆ) ဆက်သွယ်ရန်နေရပ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊
(စျ) ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် လက်ရှိရာထူး၊ လစာနှုန်းနှင့်ဌာနအမည်။
၃။-------လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲပေးပို့ရမည်-
(က) တစ်လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ( ၁.၂လက်မ x ၁.၅ လက်မ) (၃)ပုံ၊ (နောက်ကျောတွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ရေးသားရန်)၊
(ဂ) အသက်အထောက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)၊
(ဃ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မိတ္တူ)၊ အိမ်ထောင်စုဇယား (ပုံစံ-၆၆/၆) (မိတ္တူ)	၊
(င) သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ (၃၁-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း ရရှိသည့်အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံချက်(မူရင်း)၊
(စ) သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် (မူရင်း)၊
(ဆ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လျှင် (၆)လအတွင်း ပြုလုပ်ထားသော အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ်(မူရင်း)၊
(ဇ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်(မူရင်း)။ (ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံတစ်ခုခုမှ)
၄။-------ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် လျှောက်လွှာများကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီးသို့ လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍ လည်းကောင်း (၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားရမည်။
၅။-------ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအကဲမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာ၏ ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်(မူရင်း) ရယူပြီး၊ နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီးသို့ (၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အရောက်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။
၆။-------သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများနှင့် သတ်မှတ်ချက် နှင့် မကိုက်ညီသူများအား ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
၇။-------ရေးဖြေစာမေးပွဲအား (၁-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီး၌ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာရပ်များမှာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှင့်အထွေထွေဗဟုသုတ တို့ဖြစ်ပါသည်။
၉။-------အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Website www.nptdc.gov.mm နှင့် www.facebook.com/ZabuthiriSpecialistHospital/ တို့တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီးသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၅၅၀၁၅၁၊ ၀၆၇-၅၅၀၁၅၃ သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၆၃) ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား (ဒုတိယအကြိမ်) စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) နေ့ရက် - (၈.၉.၂၀၂၀)ရက်(အင်္ဂါနေ့)
(ဃ) လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက် - (၄.၉.၂ဝ၂၀)ရက်(သောကြာနေ့)မွန်းလွဲ(၃:၃ဝ)နာရီ
၂။-------လေလံတင်ရောင်းချမည့်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာန မှတဆင့် နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်သို့ (၄.၉.၂ဝ၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။-------လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အောက်ပါဌာနများတွင်ရုံးချိန်အတွင်းအခမဲ့ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မှာ(၄.၉.၂ဝ၂၀)ရက်(သောကြာနေ့)မွန်းလွဲ(၃:၃ဝ)နာရီဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက် များသိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
၄။-------၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (ဒုတိယအကြိမ်)လေလံတင်ရောင်းချမည့် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များစာရင်း၊ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ လေလံဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ၊ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပထမအကြိမ် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် လေလံအောင်မြင်သူများစာရင်းအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/2ndauction.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်အတွင်း မြေကွက်(၂၄)ကွက် ဖော်ထုတ်ခြင်းတွင် Box Culvert ၊ ကျောက်စီရေမြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QA/QC) ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -
တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် ၃၁.၈.၂၀၂၀ ရက်
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် ၁၄.၉.၂၀၂၀ ရက်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုသည့် အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား)၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဖုန်း - ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉-၆၉၅၀၁၆၀၄၁ တွင် မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည် -
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနတွင် အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား)မှ လာရောက်အပ်နှံထားသောပလတ်စတစ်ရေဆေးပုံးခွံ(၄၉၁၄)ပုံး ( Lot-1 ) နှင့် ကတ္တရာပုံးခွံ(၅၆၅)ပုံး(Lot-2)အားမျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်းလေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။-------လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များအား (၂၅.၈.၂၀၂၀) (အင်္ဂါနေ့)မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၌ လျှောက်လွှာ( ၁ )စောင်လျှင် (၂၀၀၀)ကျပ်ဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာများကို (၈.၉.၂၀၂၀)(အင်္ဂါနေ့)(၁၆:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။-------အထက်ဖော်ပြပါ ပလတ်စတစ်ရေဆေးပုံးခွံ( ၄၉၁၄ )ပုံး ( Lot-1 ) နှင့် ကတ္တရာပုံးခွံ (၅၆၅)ပုံး (Lot-2)အားအောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်းလေလံတင်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
နေ့ရက် ၉.၉.၂၀၂၀ ရက်
၄။-------အသေးစိတ်သိရှိလိုသောအချက်အလက်များအားရုံးချိန်အတွင်းဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆)သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အသား (ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ်) ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား စျေးခုံအများစနစ်ဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါစျေးခုံနေရာ(၇၂)ခုအား စျေးခုံအများစနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည် -
( က ) အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်(ဝက်)စျေးခုံနေရာ (၂၄) ခု
( ခ ) အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်(အမဲ)စျေးခုံနေရာ (၂၄) ခု
( ဂ ) အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်(ဆိတ်)စျေးခုံနေရာ (၂၄) ခု
စုစုပေါင်း (၇၂) ခု
၂။-------အသား(ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ်)ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား စျေးခုံအများစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင် လိုသူများသည် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများ ဌာနတွင် (၁၄.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း စျေးခုံလုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ စျေးခုံနယ်မြေသတ်မှတ်ချက်များ၊ စည်းကမ်းချက်များအား အခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး (၂၈.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၅:၃၀) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်လွှာများ ပြန်လည်တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂ဝ၂၀-၂ဝ၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အောက်ပါ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် ( ၉၉ )ခုအား စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်-
( က ) လမ်းဘေးပျံကျစျေးကောက်လိုင်စင်(ပျဉ်းမနား၊တပ်ကုန်း၊လယ်ဝေး) ( ၃) ခု
( ခ ) နေပြည်တော်ဝင်ကြေးဘီးကောက်လိုင်စင်(တပ်ကုန်း၊ဒက္ခိဏသီရိ၊ဥတ္တရသီရိ) ( ၄) ခု
( ဂ ) တန်ပိုကြေးကောက်ခံခွင့်လိုင်စင်(ဥတ္တရသီရိ) ( ၁) ခု
(ဃ) ဘောဂသီရိကားဝင်းယာဉ်ဝင်ကြေးနှင့်သန့်စင်ခန်းရေချိုးခန်းဝင်ကြေး ကောက်ခံခွင့်လိုင်စင် ( ၁) ခု
( င ) မြို့နယ်(၈)မြို့နယ်၏ ပုဂ္ဂလိကအပေါင်ဆိုင်လိုင်စင် (၂၈) ခု
( စ ) ယာဉ်အပ်နှံမှုကောက်ခံခွင့်လိုင်စင်(ပျဉ်းမနားဈေး၊ အာဟာရသုခဈေး၊ယုဇနဈေး၊ လယ်ဝေးဈေး၊သာဝတ္ထိဈေး၊ (၁၀) ခု
( ဆ) ရေချိုးခန်းနှင်ရေလောင်းအိမ်သာဝင်ကြေးကောက်ခံခွင့်လိုင်စင်(သပြေကုန်းစျေး)၊ ( ၁) ခု
( ဇ ) ရေလောင်းအိမ်သာဝင်ကြေးကောက်ခံခွင့်လိုင်စင်(နေပြည်တော်မြို့မစျေး၊အကွက်ကြီး (၅)ကွက်စျေး(၅)စျေး၊ (၁၆) ခု
ရွှေကြာပင်စျေး၊ ရွှေသဇင်စျေး၊ အောင်ဇမ္ဗူဈေး၊ ပျဉ်းမနားမြို့မစျေး၊ အာဟာရသုခစျေး၊ ယုဇနစျေး၊ လမ်းပျဉ်းမနားဈေး၊ လယ်ဝေးမြို့မစျေး၊ သပြေပင်ဈေး၊ သာဝတ္ထိဈေး၊ တပ်ကုန်းမြို့မစျေး၊ ညောင်လွန့်ဈေး၊ ဒက္ခိဏသီရိစျေး၊ ပုဗ္ဗသီရိစျေး)
( ဈ ) မြို့နယ်(၈)မြို့နယ်ရှိ စျေး(၃၀)စျေး၏ နေ့စဉ်ပျံကျစျေးကောက်လိုင်စင် (၂၆) ခု
( ည ) နွားပွဲဈေးဝင်ကြေးလိုင်စင်နှင့်ယဉ်အပ်နှံခွင့်လိုင်စင်(တပ်ကုန်း၊လယ်ဝေး၊သာဝတ္ထိ) ( ၆) ခု
( ဋ ) မြို့တွင်းယာဉ်ရပ်နားခနှင့်ညအိပ်ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံခွင့်လိုင်စင်(ပျဉ်းမနား) ( ၁) ခု
( ဌ ) မြို့တွင်းယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံခွင့်လိုင်စင်(တပ်ကုန်း၊ လယ်ဝေး) ( ၂) ခု
စုစုပေါင်း ( ၉၉) ခု
၂။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၉၉) ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) နေ့ရက် - (၂၆.၈.၂၀၂၀)ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊(၂၇.၈.၂၀၂၀)ရက်(ကြာသပတေးနေ့)
( ဂ ) နေရာ - နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ။
(ဃ) လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက် - (၂၀.၈.၂၀၂၀)ရက်(ကြာသပတေးနေ့)ညနေ(၃:၃ဝ)နာရီ
၃။-------လေလံတင်ရောင်းချမည့်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့်အာမခံငွေအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာန မှတဆင့် နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်သို့ (၂၀.၈.၂ဝ၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။-------လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အောက်ပါဌာနများတွင်ရုံးချိန်အတွင်းအခမဲ့ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မှာ (၂၀.၈.၂ဝ၂၀)ရက်(ကြာသပတေးနေ့) မွန်းလွဲ(၃:၃ဝ)နာရီဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက် အလက်များသိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
၅။-------၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လေလံတင်ရောင်းချသည့် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များစာရင်း၊ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ လေလံဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာနှင့် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/auction.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် အစားအသောက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် အထွေထွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ်များအား (၁.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ ဖုန်း (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာရှိ browser တစ်ခုခုတွင် Business License Application ၏ link ဖြစ်သော https://app.nptdc.gov.mm/businesslicense/#/dashboard ကို ရိုက်ထည့်ပြီး online မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၂။-------မြို့တော်တွင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်များချထားခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသုံးပြုပုံ (NPTDC Online Business Application (For Public) User Manual)အား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/businesslicense_public.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------မြို့နယ်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်များအတွင်း စားသုံးသူပြည်သူများအနေဖြင့် စားသောက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတို့အား အဆင်ပြေလွယ်လင့်တကူဝယ်ယူ နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူများ သိရှိစေရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၂။-------ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့် လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
(၂) စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ကုန်မျိုးစုံရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း၊
(၃) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း၊
(၄) ကုန်စိမ်း/ ဟင်းသီးဟင်းရွက်/ အသီးအနှံစသည်များ ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်း၊
(၅) အသား/ ငါး/ ပုစွန် စသည်များ ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း၊
(၆) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း၊
(၇) ဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းများ။
၃။-------ယာဉ်ဖြင့် လှည့်လည်ရောင်းချခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/mobile_market_license.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပြည်ပနိုင်ငံထုတ်မော်တော် ယာဉ် ၅ စီးအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိသူများ အောက်ပါအတိုင်းအိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် ၂၈ - ၇ - ၂၀၂၀
(ခ) တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက် ၁၁ - ၈ - ၂၀၂၀ ၊ (၁၆:၀၀)နာရီ
(ဂ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိလို ပါက ရုံးချိန်အတွင်း စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇ - ၃၄၃၂၀၈၁ ၊ ၀၆၇ - ၃၄၃၂၀၈၃ သို့ စုံစမ်း မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)မှ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနသို့ လာရောက်အပ်နှံထားသော ပြုပြင်သုံးစွဲ၍မရသည့် ရေမီတာအဟောင်း (ဆိုဒ်စုံ)(၂၉၈)လုံးအား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။-------လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များအား( ၁၄.၇.၂၀၂၀ )(အင်္ဂါနေ့)မှစ၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၌ အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာများကို ( ၂၈.၇.၂၀၂၀ )( အင်္ဂါနေ့ ) ( ၁၆ : ၀၀ )နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။-------အထက်ဖော်ပြပါ ရေမီတာအဟောင်းဆိုဒ်စုံ(၂၉၈)လုံးတို့အား အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း လေလံတင် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
နေ့ရက် ၃၀ . ၇ . ၂၀၂၀ ရက်
အချိန် နံနက်(၀၉ : ၃၀)နာရီ
၄။-------အသေးစိတ်သိရှိလိုသော အချက်အလက်များအားရုံးချိန်အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆)သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညို လမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုက်(၁၈၀)လုံးမှှ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် တိုက်(၃၉)လုံးရှိ မြေညီထပ်(၁၅၆)ခန်း၊ ပထမထပ်(၁၅၆)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်(၁၅၆)ခန်း၊ တတိယထပ် (၁၅၆)ခန်းတို့အား နေရာချထားနိုင်ရေးအတွက် ငွေအကြေပေးသွင်းသူများနှင့် ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းသူများကို အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီမှ အောက်ပါ အချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) လျှောက်ထားသူများအနက် လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်အရ ငွေအကြေ ပေးသွင်းသူ နှင့်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းသူများမှ (၇)ရက်အတွင်း တိုက်ခန်းတန်ဖိုး ၏ (၃၀%)အားပေးသွင်းရန်၊ သတ်မှတ်ထားသောရက်အတွင်း ငွေမသွင်းသူ များ၏ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များကို ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်၊
(ခ) ငွေသွင်းပြီးပါက လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်အလိုက် လျှောက်ထားသည့်အထပ်များ ရှိ အခန်းများကို မဲစနစ်ဖြင့် နေရာချထားပေးမည်၊
(ဂ) မဲစနစ်ဖြင့် အခန်းနေရာရရှိပါက လက်ငင်းငွေအကြေစနစ်ဖြင့် ပေးသွင်းသူ များအနေဖြင့် ကျန် (၇၀%)အား (၃၅%) နှစ်ကြိမ်ခွဲ၍ ပေးသွင်းနိုင်ပြီး (၃၀-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့မတိုင်မီ အကြေပေးသွင်းရမည်။ ကျန်(၇၀%)အား သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း မပေးသွင်းလျှင် အခန်းနေရာရရှိထားမှုအား ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်၊
(ဃ) ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းသူများမှ မဲစနစ်ဖြင့်အခန်းနေရာရရှိပြီး သည့်နေ့မှ(၁၄)ရက်အတွင်း	နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်နှင့်ဆက် သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ခြင်းမရှိလျှင် အခန်းနေရာရရှိမှုအား ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
၂။-------(၁၈-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မြေညီထပ်လျှောက်ထားလာသူ (၁၅၆)ခန်း၊ ပထမထပ် လျှောက်ထားလာသူ (၁၅၆)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်လျှောက်ထားလာသူ (၃၇)ဦးနှင့် တတိယထပ် လျှောက်ထားလာသူ (၈)ဦးတို့အား ကြေညာအသိပေးခဲ့ပြီး ငွေပေးသွင်းမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၃။-------ယခုထပ်မံ၍ လျှောက်ထားလာသူများအနက် လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်အလိုက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်အရ အောက်ပါဒုတိယထပ်နှင့် တတိယထပ်အခန်းများ၏ ကျသင့်ငွေ (၃၀%)အား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၌ ဘဏ်ငွေသွင်းချလံ လာရောက်ထုတ်ယူ၍ (၉-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၇-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ဇမ္ဗူသီရိဘဏ်ခွဲ၊ မြို့မစျေး ဘဏ်ခွဲ၊ သပြေကုန်းစျေးဘဏ်ခွဲ၊ ဥတ္တရသီရိဘဏ်ခွဲ၊ ပျဉ်းမနားဘဏ်ခွဲ)တို့တွင် ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်-
(က) ဒုတိယထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ
(၁၂၄၈)၊ (၁၂၅၇)၊ (၁၂၆၉)၊ (၁၂၇၆)၊ (၁၂၈၉)၊ (၁၂၉၂)၊ (၁၂၉၇)၊ (၁၃၀၃)၊ (၁၃၀၉)၊ (၁၃၃၇)၊ (၁၃၆၆)၊ (၁၃၉၈)၊ (၁၄၃၃)၊ (၁၄၇၂)၊ (၁၄၈၃)၊ (၁၄၈၄)၊ (၁၄၉၂)၊ (၁၅၀၉)၊ (၁၅၁၀)၊ (၁၅၁၁)၊ (၁၅၁၂)၊ (၁၅၁၃)၊ (၁၅၁၄)၊ (၁၅၁၅)၊ (၁၅၁၆)၊ (၁၅၁၇)၊ (၁၅၁၉)၊ (၁၅၂၀)၊ (၁၅၂၁)၊ (၁၅၂၂)၊ (၁၅၂၃)၊ (၁၅၂၄)၊ (၁၅၂၅)၊ (၁၅၂၆)၊ (၁၅၂၇)၊ (၁၅၂၉)၊ (၁၅၃၀)၊ (၁၅၃၁)၊ (၁၅၃၂)၊ (၁၅၃၃)၊ (၁၅၃၄)၊ (၁၅၃၅)၊ (၁၅၃၆)၊ (၁၅၃၇)၊ (၁၅၃၈)၊ (၁၅၃၉)၊ (၁၅၄၀)၊ (၁၅၄၁)၊ (၁၅၄၃)၊ (၁၅၄၄)၊ (၁၅၄၅)၊ (၁၅၄၆)၊ (၁၅၄၇)၊ (၁၅၄၈)၊ (၁၅၄၉)၊ (၁၅၅၀)၊ (၁၅၅၁)၊ (၁၅၅၂)၊ (၁၅၅၃)၊ (၁၅၅၄)၊ (၁၅၅၅)၊ (၁၅၅၆)၊ (၁၅၅၇)၊ (၁၅၅၈)၊ (၁၅၅၉)၊ (၁၅၆၀)၊ (၁၅၆၁)၊ (၁၅၆၂)၊ (၁၅၆၃)၊ (၁၅၆၄)၊ (၁၅၆၅)၊ (၁၅၆၇)၊ (၁၅၆၈)၊ (၁၅၆၉)၊ (၁၅၇၀)၊ (၁၅၇၁)၊ (၁၅၇၂)၊ (၁၅၇၃)၊ (၁၅၇၄)၊ (၁၅၇၅)၊ (၁၅၇၆)၊ (၁၅၇၇)၊ (၁၅၇၈)၊ (၁၅၇၉)၊ (၁၅၈၀)၊ (၁၅၈၁)၊ (၁၅၈၂)၊ (၁၅၈၃)၊ (၁၅၈၄)၊ (၁၅၈၅)၊ (၁၅၈၆)၊ (၁၅၈၇)၊ (၁၅၈၈)၊ (၁၅၈၉)၊ (၁၅၉၀)၊ (၁၅၉၁)၊ (၁၅၉၂)၊ (၁၅၉၃)၊ (၁၅၉၄)၊ (၁၅၉၅)၊ (၁၅၉၆)၊ (၁၅၉၇)၊ (၁၅၉၈)၊ (၁၅၉၉)၊ (၁၆၀၀)၊ (၁၆၀၁)၊ (၁၆၀၂)၊ (၁၆၀၃)၊ (၁၆၀၄)၊ (၁၆၀၅)၊ (၁၆၀၇)၊ (၁၆၀၈)၊ (၁၆၀၉)၊ (၁၆၁၀)၊ (၁၆၁၁)၊ (၁၆၁၂)၊ (၁၆၁၃)၊ (၁၆၁၄)၊ (၁၆၁၅)။
(ခ) တတိယထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ
(၁၃၂၄)၊ (၁၄၄၅)၊ (၁၄၄၆)၊ (၁၄၉၃)၊ (၁၅၂၈)၊ (၁၅၆၆)၊ (၁၆၀၆)။
၄။-------အထက်အမှတ်စဉ်ပါမှ တိုက်ခန်းတန်ဖိုးကျသင့်ငွေ၏ (၃၀%)ပေးသွင်းပြီး သူများကို အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီမှ တိုက်ခန်းများအား မဲစနစ်ဖြင့် နေရာချထားပေးမည်ဖြစ်၍ နေရာချထားပေးမည့် နေ့ရက်အား NPTDC Website ဖြစ်သော www.nptdc.gov.mm နှင့် NPTDC webportal Facebook Page တို့တွင် ထည့်သွင်း ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူများ၏ လျှောက်လွှာပါ ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များသို့လည်း အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။-------အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်ခန်းများအား ဆက်လက်တည်ဆောက်ပြီးပါက ကျန်ရှိသည့် လျှောက်ထားသူများအား ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုအပေါ်မူတည်၍ တိုက်ခန်းတန်ဖိုး ကျသင့်ငွေ၏ (၃၀%)ကိုပေးသွင်းစေပြီး မဲစနစ်ဖြင့် ထပ်မံနေရာချထားမှုအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။------- အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မဈေးအနီး) မြေဧရိယာ (၂၃၀)ဧကပေါ်တွင် (၆၅၀)စတုရန်းပေ အကျယ်ရှိသော (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်၊ အိပ်ခန်း (၂)ခန်း၊ အခန်းပေါင်း (၃၀၀၀)တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပါ၍ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများအပြင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းဝန်ထမ်းများကိုလည်း ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။------- ထိုသို့ ရောင်းချခဲ့ရာ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများမှ (၁-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ရောင်းချခဲ့ရာ မြေညီထပ်နှင့် ပထမထပ်အခန်းများအားလုံး ဝယ်ယူသွားပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ဒုတိယထပ်နှင့် တတိယထပ်အခန်းလက်ကျန်များကို လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်အလိုက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။-------အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ လျှောက်ထားလိုသူများသည် ပူးတွဲ(က)နှင့်(ခ)ပါ လျှောက်လွှာ ပုံစံများတွင် ဖြည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ နေပြည်တော် သို့ လိပ်မူ၍ (၃၁-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပေးပို့ပါရန်နှင့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်ခန်းများကို ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ တိုက်ခန်းချေးငွေရယူနိုင်ရေး ပူးတွဲပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
၄။------- အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီသို့ ပေးပို့လာ သည့် လျှောက်လွှာအမည်စာရင်းများကို အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရေးဦးစီး ကော်မတီသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူပြီး ကျန်ရှိတိုက်ခန်းအရေအတွက်အား လျှောက်ထား သည့် လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်အလိုက် ဦးစားပေး၍ စိစစ်ပြီး တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန် နှင့် လိုအပ်သည့်လျှောက်လွှာပုံစံများအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/7.1.20HousingsForm.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ပထမအဆင့် တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူများ ငွေပေးသွင်းခြင်း
၁။------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) တည်ဆောက်နေသည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်ခန်း များအား လျှောက်ထားသူများအနက်မှ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် တိုက်(၃၉)လုံးရှိ အခန်းများအား စတင်နေရာချထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်ထားသူများအနက်မှ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ် အလိုက် လျှောက်ထားသူ(၃၅၇)ဦးအား (၂၉-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၇-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ငွေပေးသွင်းနိုင် ကြောင်း ကြေညာခဲ့ရာ (၂၉-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ငွေပေးသွင်းသူ(၉၆)ဦးရှိပါသည်။
၂။------- (၇-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဘဏ်ငွေသွင်းမှုအား လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ငွေပေးသွင်းသူများအား လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်အလိုက် မဲစနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်းနေရာချထားပေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။------- တိုက်ခန်းများအား လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်အလိုက် မဲစနစ်ဖြင့် နေရာချထားပေး မည့် နေ့ရက်အား NPTDC Website ဖြစ်သော www.nptdc.gov.mm နှင့် NPTDC Webportal Facebook Page တို့တွင် ထည့်သွင်းကြော်ငြာသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူများ၏ လျှောက်လွှာပါဆက်သွယ် ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်း အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) တည်ဆောက်နေသည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်ခန်းများအား လျှောက်ထားသူများအနက်မှ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် စတင်နေရာချထားမည့် လျှောက်ထားသူများသည် ရပ်ဝေးဒေသမှ တိုက်ခန်းတန်ဖိုးငွေများအား ငွေလွှဲဖြင့် ပေးသွင်းလိုပါက အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီ (ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ)၏ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် (၀၆၇-၃၄၁၄၂၉၀)သို့ ဆက်သွယ်၍ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ငွေပေးသွင်းသည့် လျှောက်ထားသူများ လွဲမှားမှုမရှိစေရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း မရှိဘဲ ငွေပေးသွင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညို လမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုက်ခန်း(၃၀၀၀)အနက်မှ ပထမအဆင့် အနေဖြင့် တိုက် (၃၉)လုံးရှိ မြေညီထပ်(၁၅၆)ခန်း၊ ပထမထပ်(၁၅၆)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်(၁၅၆)ခန်း၊ တတိယထပ် (၁၅၆)ခန်းတို့အား နေရာချထားနိုင်ရေးအတွက် ငွေအကြေပေးသွင်းသူများနှင့် ဘဏ် ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းသူများကို အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများစိစစ်နေရာချထားရေးဆပ် ကော်မတီမှ အောက်ပါအချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(ဂ) မဲစနစ်ဖြင့် အခန်းနေရာရရှိပါက လက်ငင်းငွေအကြေစနစ်ဖြင့် ပေးသွင်းသူ များအနေဖြင့် ကျန် (၇၀%) အား (၃၅%) နှစ်ကြိမ်ခွဲ၍ ပေးသွင်းနိုင်ပြီး (၃၀-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့မတိုင်မီ အကြေပေးသွင်းရမည်။ ကျန်(၇၀%) အား သတ်မှတ် ထားသည့်ရက်အတွင်း မပေးသွင်းလျှင် အခန်းနေရာရရှိထားမှုအား ပယ်ဖျက် ခြင်းခံရမည်၊
(ဃ) ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်းသူများမှ မဲစနစ်ဖြင့်အခန်းနေရာရရှိပြီး သည့်နေ့မှ(၁၄)ရက်အတွင်း	နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်နှင့်ဆက် သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိ လျှင်အခန်းနေရာရရှိမှုအား ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
၂။-------လျှောက်ထားသူများအနက် အောက်ပါလျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များမှာ တိုက်ခန်းတန် ဖိုးကျသင့်ငွေ၏ (၃၀%)အား အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ် ကော်မတီ၌ ဘဏ်ငွေသွင်းချလံ လာရောက်ထုတ်ယူ၍ (၂၉-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၇-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ဇမ္ဗူသီရိဘဏ်ခွဲ၊ မြို့မစျေး ဘဏ်ခွဲ၊ သပြေကုန်းစျေးဘဏ်ခွဲ၊ ဥတ္တရသီရိဘဏ်ခွဲ၊ ပျဉ်းမနားဘဏ်ခွဲ)တို့တွင် ပေးသွင်းနိုင်ပါ သည်-
(၀၀၀၁)၊ (၀၀၀၂)၊ (၀၀၀၃)၊ (၀၀၀၄)၊ (၀၀၀၅)၊ (၀၀၀၇)၊ (၀၀၀၈)၊ (၀၀၀၉)၊ (၀၀၁၀)၊ (၀၀၁၂)၊ (၀၀၁၄)၊ (၀၀၁၅)၊ (၀၀၁၆)၊ (၀၀၁၇)၊ (၀၀၁၈)၊ (၀၀၂၃)၊ (၀၀၂၄)၊ (၀၀၂၅)၊ (၀၀၂၆)၊ (၀၀၂၈)၊ (၀၀၂၉)၊ (၀၀၃၀)၊ (၀၀၃၁)၊ (၀၀၃၂)၊ (၀၀၃၃)၊ (၀၀၃၄)၊ (၀၀၃၅)၊ (၀၀၃၆)၊ (၀၀၃၇)၊ (၀၀၃၈)၊ (၀၀၄၀)၊ (၀၀၄၁)၊ (၀၀၄၂)၊ (၀၀၄၃)၊ (၀၀၄၄)၊ (၀၀၄၅)၊ (၀၀၄၉)၊ (၀၀၅၀)၊ (၀၀၅၁)၊ (၀၀၅၂)၊ (၀၀၅၄)၊ (၀၀၅၅)၊ (၀၀၅၆)၊ (၀၀၅၇)၊ (၀၀၅၈)၊ (၀၀၅၉)၊ (၀၀၆၁)၊ (၀၀၆၂)၊ (၀၀၆၅)၊ (၀၀၆၆)၊ (၀၀၆၇)၊ (၀၀၆၈)၊ (၀၀၇၀)၊ (၀၀၇၁)၊ (၀၀၇၂)၊ (၀၀၇၃)၊ (၀၀၇၄)၊ (၀၀၇၆)၊ (၀၀၇၈)၊ (၀၀၈၀)၊ (၀၀၈၁)၊ (၀၀၈၂)၊ (၀၀၈၃)၊ (၀၀၈၄)၊ (၀၀၈၅)၊ (၀၀၈၆)၊ (၀၀၈၈)၊ (၀၀၈၉)၊ (၀၀၉၄)၊ (၀၀၉၅)၊ (၀၀၉၆)၊ (၀၁၀၂)၊ (၀၁၀၃)၊ (၀၁၀၄)၊ (၀၁၀၆)၊ (၀၁၀၇)၊ (၀၁၀၈)၊ (၀၁၀၉)၊ (၀၁၁၁)၊ (၀၁၁၂)၊ (၀၁၁၃)၊ (၀၁၁၅)၊ (၀၁၁၇)၊ (၀၁၁၈)၊ (၀၁၁၉)၊ (၀၁၂၀)၊ (၀၁၂၁)၊ (၀၁၂၂)၊ (၀၁၂၃)၊ (၀၁၂၄)၊ (၀၁၂၆)၊ (၀၁၂၇)၊ (၀၁၂၈)၊ (၀၁၂၉)၊ (၀၁၃၀)၊ (၀၁၃၂)၊ (၀၁၃၄)၊ (၀၁၃၆)၊ (၀၁၃၇)၊ (၀၁၃၈)၊ (၀၁၃၉)၊ (၀၁၄၁)၊ (၀၁၄၃)၊ (၀၁၄၄)၊ (၀၁၄၆)၊ (၀၁၄၇)၊ (၀၁၄၈)၊ (၀၁၄၉)၊ (၀၁၅၀)၊ (၀၁၅၁)၊ (၀၁၅၂)၊ (၀၁၅၃)၊ (၀၁၅၅)၊ (၀၁၅၆)၊ (၀၁၅၇)၊ (၀၁၅၉)၊ (၀၁၆၀)၊ (၀၁၆၂)၊ (၀၁၆၃)၊ (၀၁၆၅)၊ (၀၁၆၆)၊ (၀၁၆၇)၊ (၀၁၆၈)၊ (၀၁၆၉)၊ (၀၁၇၀)၊ (၀၁၇၁)၊ (၀၁၇၂)၊ (၀၁၇၃)၊ (၀၁၇၄)၊ (၀၁၇၆)၊ (၀၁၇၇)၊ (၀၁၇၈)၊ (၀၁၇၉)၊ (၀၁၈၁)၊ (၀၁၈၃)၊ (၀၁၈၅)၊ (၀၁၈၇)၊ (၀၁၈၉)၊ (၀၁၉၀)၊ (၀၁၉၁)၊ (၀၁၉၂)၊ (၀၁၉၃)၊ (၀၁၉၄)၊ (၀၁၉၅)၊ (၀၁၉၆)၊ (၀၁၉၇)၊ (၀၁၉၈)၊ (၀၁၉၉)၊ (၀၂၀၂)၊ (၀၂၀၃)၊ (၀၂၀၄)၊ (၀၂၀၅)၊ (၀၂၀၆)၊ (၀၂၀၇)၊ (၀၂၀၈)၊ (၀၂၁၀)။
(၀၀၀၆)၊ (၀၀၁၁)၊ (၀၀၁၃)၊ (၀၀၁၉)၊ (၀၀၂၀)၊ (၀၀၂၁)၊ (၀၀၂၂)၊ (၀၀၂၇)၊ (၀၀၃၉)၊ (၀၀၄၆)၊ (၀၀၄၇)၊ (၀၀၄၈)၊ (၀၀၅၃)၊ (၀၀၆၄)၊ (၀၀၆၉)၊ (၀၀၇၅)၊ (၀၀၇၉)၊ (၀၀၈၇)၊ (၀၀၉၀)၊ (၀၀၉၂)၊ (၀၀၉၃)၊ (၀၀၉၇)၊ (၀၀၉၈)၊ (၀၀၉၉)၊ (၀၁၀၀)၊ (၀၁၀၁)၊ (၀၁၀၅)၊ (၀၁၁၀)၊ (၀၁၁၄)၊ (၀၁၁၆)၊ (၀၁၂၅)၊ (၀၁၃၁)၊ (၀၁၃၃)၊ (၀၁၃၅)၊ (၀၁၄၀)၊ (၀၁၄၂)၊ (၀၁၄၅)၊ (၀၁၅၄)၊ (၀၁၅၈)၊ (၀၁၆၁)၊ (၀၁၆၄)၊ (၀၁၈၀)၊ (၀၁၈၂)၊ (၀၁၈၈)၊ (၀၂၀၀)၊ (၀၂၀၁)၊ (၀၂၁၁)၊ (၀၂၂၃)၊ (၀၂၂၄)၊ (၀၂၂၇)၊ (၀၂၂၈)၊ (၀၂၃၄)၊ (၀၂၄၁)၊ (၀၂၄၄)၊ (၀၂၅၀)၊ (၀၂၅၉)၊ (၀၂၆၄)၊ (၀၂၇၃)၊ (၀၂၇၄)၊ (၀၂၈၃)၊ (၀၂၈၅)၊ (၀၂၈၇)၊ (၀၂၉၇)၊ (၀၃၀၅)၊ (၀၃၂၂)၊ (၀၃၆၁)၊ (၀၃၆၄)၊ (၀၃၇၀)၊ (၀၃၇၅)၊ (၀၃၇၉)၊ (၀၃၈၀)၊ (၀၃၉၄)၊ (၀၃၉၅)၊ (၀၃၉၇)၊ (၀၃၉၉)၊ (၀၄၁၂)၊ (၀၄၁၄)၊ (၀၄၃၀)၊ (၀၄၃၁)၊ (၀၄၃၇)၊ (၀၄၄၅)၊ (၀၄၄၇)၊ (၀၄၆၀)၊ (၀၄၆၄)၊ (၀၄၆၈)၊ (၀၄၇၂)၊ (၀၄၇၃)၊ (၀၄၇၄)၊ (၀၄၈၁)၊ (၀၄၈၃)၊ (၀၄၈၆)၊ (၀၄၉၇)၊ (၀၄၉၉)၊ (၀၅၀၀)၊ (၀၅၁၅)၊ (၀၅၁၉)၊ (၀၅၂၄)၊ (၀၅၂၉)၊ (၀၅၃၂)၊ (၀၅၃၈)၊ (၀၅၃၉)၊ (၀၅၄၀)၊ (၀၅၄၂)၊ (၀၅၄၇)၊ (၀၅၄၈)၊ (၀၅၅၂)၊ (၀၅၅၄)၊ (၀၅၅၇)၊ (၀၅၆၁)၊ (၀၅၆၂)၊ (၀၅၆၅)၊ (၀၅၆၆)၊ (၀၅၇၀)၊ (၀၅၇၂)၊ (၀၅၇၅)၊ (၀၅၇၉၊)၊ (၀၅၈၂)၊ (၀၅၉၆)၊ (၀၅၉၉)၊ (၀၆၀၃)၊ (၀၆၁၁)၊ (၀၆၁၃)၊ (၀၆၁၆)၊ (၀၆၂၃)၊ (၀၆၂၅)၊ (၀၆၄၁)၊ (၀၆၅၁)၊ (၀၆၅၈)၊ (၀၆၅၉)၊ (၀၆၆၀)၊ (၀၆၆၇)၊ (၀၆၇၅)၊ (၀၆၈၁)၊ (၀၆၈၄)၊ (၀၆၈၅)၊ (၀၆၈၆)၊ (၀၆၉၈)၊ (၀၇၀၁)၊ (၀၇၀၅)၊ (၀၇၀၈)၊ (၀၇၀၉)၊ (၀၇၁၀)၊ (၀၇၁၁)၊ (၀၇၁၄)၊ (၀၇၁၅)၊ (၀၇၁၆)၊ (၀၇၂၁)၊ (၀၇၂၇)၊ (၀၇၂၈)၊ (၀၇၃၁)။ (၀၇၃၉)၊ (၀၇၄၄)၊ (၀၇၄၅)၊ (၀၇၄၇)၊ (၀၇၅၃)၊ (၀၇၅၄)။
(၀၀၆၃)၊ (၀၀၉၁)၊ (၀၁၇၅)၊ (၀၁၈၆)၊ (၀၂၀၉)၊ (၀၂၃၅)၊ (၀၂၇၀)၊ (၀၃၁၀)၊ (၀၃၁၉)၊ (၀၃၃၉)၊ (၀၄၇၁)၊ (၀၅၀၃)၊ (၀၅၈၀)၊ (၀၆၂၉)၊ (၀၆၇၆)၊ (၀၆၉၄)၊ (၀၇၀၆)၊ (၀၇၄၈)၊ (၀၈၃၈)၊ (၀၉၀၁)၊ (၀၉၃၇)၊ (၀၉၅၈)၊ (၀၉၉၂)၊ (၁၀၀၃)၊ (၁၀၂၈)၊ (၁၀၃၈)။
(ဃ) တတိယထပ်လျှောက်ထားသူများ၏ အမှတ်စဉ်များ
(၀၂၇၉)၊ (၀၃၄၈)၊ (၀၄၂၇)၊ (၀၆၁၈)၊ (၀၇၃၂)၊ (၀၉၅၄)၊ (၁၀၃၇)၊ (၁၀၄၆)။
၃။-------အထက်အမှတ်စဉ်ပါမှ တိုက်ခန်းတန်ဖိုးကျသင့်ငွေ၏ (၃၀%)ပေးသွင်းပြီးသူများကို အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ စိစစ်နေရာချထားရေးဆပ်ကော်မတီမှ တိုက်ခန်းများအား မဲစနစ်ဖြင့် နေရာချထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး နေရာချထားပေးမည့် နေ့ရက်အား NPTDC Website ဖြစ်သော www.nptdc.gov.mm နှင့် NPTDC webportal Facebook Page တို့တွင် ထည့်သွင်းကြေညာ သွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူများ၏ လျှောက်လွှာပါ ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ သို့လည်း အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။-------အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်ခန်းများအား ဆက်လက်တည်ဆောက်ပြီးပါက ကျန်ရှိသည့် လျှောက်ထားသူများအား ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုအပေါ်မူတည်၍ တိုက်ခန်းတန်ဖိုး ကျသင့်ငွေ၏ (၃၀%)ကိုပေးသွင်းစေပြီး မဲစနစ်ဖြင့် ထပ်မံနေရာချထားမှုအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
------- Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လုပ်ငန်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့သော MSME လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက် (နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်)တွင် JICA SME TSL Emergency Loan လျှောက်ထားရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
၁။-------၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ (ဖြည့်စွက်)ရန်ပုံငွေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား)မှ တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်မည့် အငြိမ်းစား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် မြေဖြတ်ခြင်းနှင့်လမ်းတံတား၊ ရေမြောင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း Lot(၁၀)ခု အတွက် လုပ်ငန်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QA/QC) ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၉.၆.၂၀၂၀	ရက်
တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက် ၂၂.၆.၂၀၂၀	ရက်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား)၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။------- တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား) တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉-၆၉၅၀၁၆၀၄၁ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
၁။------- ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နိုင်ငံတော် ထောက်ပံ့(ဖြည့်စွက်)ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အငြိမ်းစားနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် မြေဖြတ်ခြင်းနှင့် လမ်းတံတား၊ရေမြောင်းများဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း(၁၀)ခုအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည် -
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၂ .၆.၂၀၂၀ ရက်
တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက် ၁၅ .၆.၂၀ ၂၀ ရက်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ
၂။------- တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား) တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉၆၉၅၀၁၆၀၄၁ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန် နှင့် လိုအပ်သည့်လျှောက်လွှာပုံစံများအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/retirement housing.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ မြို့ပြ/ ကျေးလက်ဈေးများနှင့် စားသောက်ဆိုင်Food Shop များ၏ ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခ (ဆိုင်ခန်းခွန်) ပေးသွင်းရမည့်ရက်အား အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ)ကြောင့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့မှုအပေါ် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလနှင့် မေလအတွက် ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခ (ဆိုင်ခန်းခွန်) ပေးသွင်းရမည့် နေ့ရက်များအား အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) ၄/၂၀၂၀ ၁၅-၄-၂၀၂၀	 ၃၁-၅-၂၀၂၀
< (ခ) ၅/၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀	 ၃၁-၅-၂၀၂၀
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၄ / ၂၀၂၀) ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပုဗ္ဗသီရိမြို့ ၊ ရတနာဒီပရပ်ကွက် ၊ သံလွင်လမ်းရှိ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ စီမံခန့်ခွဲသည့် မြေဧရိယာ (၁.၁၆) ဧကခန့်တွင် မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ (၁) ရုံ တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ပြသနိုင်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဒေါ်ဝါဝါဆွေ ၊ ၉/ မတရ(နိုင်) ၀၀၃၉၄၁ အား တင်ဒါအောင်မြင်သူ အဖြစ် ကြေညာလိုက်သည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် နေပြည်တော်စည်ပင်၊ မြို့တော်ခန်းမနှင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်း၌ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) မြို့တော်ခန်းမနှင့်အိမ်ရာ၀င်းအတွင်းရှိဂိတ်များတွင် CCTV Camera(၄၉လုံး) နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် (၂ .၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် (၂၁.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၆:ဝဝ)နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ နိုင်ငံပိုင်အိမ်ရာထိန်းသိမ်းရေးဌာနခွဲ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ (ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၁၄၂၉၇) တွင် မေးမြန်းစုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား) မှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်လွန်ကတ္တရာတွန့်ခေါက်မှု ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ကတ္တရာဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၂၅. ၃.၂၀၂၀	ရက်
တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက် ၃၁. ၃.၂၀၂၀	ရက်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ
၂။------- တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား) တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉၆၈၂၅၄၅၂၉၄ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပျဉ်းမနားမြို့၊ ဇေယျာသီရိမြို့၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နှင့် ဒက္ခိဏသီရိမြို့တို့ရှိ မြို့မြေကွက် (၁၈၆၉.၆၈) ဧကခန့်အား မြေတိုင်းတာခြင်းနှင့် စကေးကိုက်မြေပုံရေးဆွဲ ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် WTK Planet Union Co;Ltd အား တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ကြေညာလိုက်သည်။
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း ဒက္ခိဏသီရိမြို့ရှိ ပေ (၈၀×၈၀) မြေကွက်(၁၉၇)ကွက်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားမည်သူမဆို အဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် မြေကွက်(၁)ကွက်လျှင် မြေတန်ဖိုးငွေကျပ်(၂၅၀)သိန်းနှုန်း သတ်မှတ်၍ မဲစနစ်ဖြင့်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း (၁၈-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့နှင့် (၂၅-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့များတွင် နေ့စဉ်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာတို့တွင် ကြေညာခဲ့ ပြီး (၁၀.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မြေကွက်လျှောက်ထားသူ (၃၂၈)ဦးအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ၊ မင်္ဂလာခန်းမတွင် လျှောက်လွှာအလိုက် မဲနှိုက်နေရာ ချထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။-------မြေကွက်လျှောက်ထားသူ (၃၂၈)ဦးတွင် မဲပေါက်သူ (၁၉၇)ဦး၊ မဲမပေါက်သူ (၁၃၁)ဦး ရှိပြီး မြေကွက်မဲပေါက်သူများမှ မြေတန်ဖိုး ပေးသွင်းပြီးစီးမှုအခြေအနေအရ ကျန်ရှိနေသော မြေကွက်(၁၄၆)ကွက်ကို ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် မဲနှိုက်နေရာချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။-------ပထမအကြိမ် မဲစနစ်ဖြင့်နေရာချထားခဲ့ရာတွင် အထက်အပိုဒ်(၂)ပါ မဲမပေါက်သူ(၁၃၁)ဦး အနက် (၈၈)ဦးသည် ထပ်မံမဲနှိုက်ရန် အဆိုပြုထားပြီး၊ ထပ်တိုးလျှောက်ထားသူ(၃)ဦးရှိသဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် မဲနှိုက်မည့်သူ စုစုပေါင်း(၉၁)ဦး ရှိပါသည်။
၄။------- အဆိုပါ မြေကွက်ဝယ်ယူလိုသူ(၉၁)ဦးကို ဒုတိယအကြိမ်မဲစနစ်ဖြင့် မြေကွက်ရောင်းချ ခြင်း အခမ်းအနားကို (၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့(သောကြာနေ့)၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ အချိန်မှ စတင်၍ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မင်္ဂလာခန်းမတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။-------ဒုတိယအကြိမ်မဲစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် (၈၀×၈၀) လက်ကျန်မြေကွက် (၁၄၆)ကွက်၏ နေရာပြမြေပုံနှင့် မြေကွက်ဝယ်ယူလိုသူ(၉၁)ဦး၏ အမည်စာရင်းကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ Website လိပ်စာ www.nptdc.gov.mm နှင့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ Facebook Page ဖြစ်သည့် NPTDC Webportal တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၆။-------(၂၀-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ မဲနှိုက်နေရာချထားခြင်း အစီအစဉ် ပြီးဆုံးသည်နှင့် မဲပေါက်သူ များ အမည်စာရင်းနှင့် မြေကွက်အမှတ်များကို ဖော်ပြပါ Website နှင့် Webportal တို့တွင် ကြေညာပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။-------အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါလိပ်စာ/ဖုန်းများသို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဒက္ခိဏသီရိမြို့မှ ပေ(၈၀×၈၀)မြေကွက်မျာရောင်းချရန် ဒုတိယအကြိမ်အသိပေးကြေညာချက် ကို အောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်တွင် www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/146Notice.pdf လည်းကောင်း၊ ပထမအဆင့် မဲပေါက်ပြီးမြေတန်ဖိုးပေးသွင်းခြင်းမရှိသည့်မြေကွက်များကို မဲမပေါက်သူများအနက်မှ မဲနှိုက်၍ဝယ်ယူလိုသူများစာရင်းကို ဖော်ပြပါလင့်ခ်တွင် www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/2nd Wich to sale plots 91 Nos Lists.pdf လည်းကောင်း download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ကျောပိုး မြက်ဖြတ်စက်(၄၃)လုံးဝယ်ယူရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ (ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနအရောက်တန်ဖိုး) ဖြင့် အချိန်မီ ပြုလုပ်တင်သွင်းနိုင်မည့် စက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ ကုမ္ပဏီများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -
တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ပေးမည့်ရက် ၆ . ၃ .၂၀၂၀
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် ၂၀ . ၃ .၂၀၂၀( ၁၆:၀၀ နာရီ )
တင်ဒါလျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်နေရာ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။------- တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ( ၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆ ) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်း စုံစမ်းထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
အသိပေးကြေညာခြင်း (5(T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Colocation Data Center Virtualization အဆင့်မြှင့်တင်ရန် VMware Licenses ဝယ်ယူခြင်း (5 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020) လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ၁၄−၁−၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ခြင်း အခမ်းအနားကို ၁၉−၂−၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၈/၂၀၂၀) ၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အရ Sun Ivy Solutions ကုမ္ပဏီအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အသိပေးကြေညာခြင်း ( 1 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Central Control Room တည်ဆောက်ခြင်း (1 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020) လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ၂−၁၂−၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာ ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်း အခမ်းအနားနှင့် စျေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၁−၁−၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၀) ၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အရ Sun Ivy Solutions ကုမ္ပဏီအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အသိပေးကြေညာခြင်း (2(T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ GPS Tracking System တည်ဆောက်ခြင်း (2 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020) လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ၂−၁၂−၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာ ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်း အခမ်းအနားနှင့် စျေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၁−၁−၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၀) ၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အရ Linn IT Solution ကုမ္ပဏီအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အသိပေးကြေညာခြင်း (3(T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
--------	နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ArcGIS Software အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (3 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020) လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ၂−၁၂−၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာ ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်း အခမ်းအနားနှင့် စျေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်းအခမ်း အနားကို ၂၁−၁−၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၀) ၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အရ Mandalay Technology and Development ကုမ္ပဏီအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အသိပေးကြေညာခြင်း (4(T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ArcGIS Online Software ဖြင့် မြေပြင်အချက် အလက်ကောက်ခံခြင်းနှင့် Database တည်ဆောက်ခြင်း (4 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020) လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ၂−၁၂−၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာ ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်း အခမ်းအနားနှင့် စျေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်းအခမ်း အနားကို ၂၁−၁−၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၀) ၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အရ Asia Air Survey Myanmar ကုမ္ပဏီအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ၊ ပျဉ်းမနားမြို့ ၊ ဇေယျာသီရိမြို့ ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့ ၊ ဒက္ခိဏ သီရိမြို့ တို့ရှိ မြို့မြေကွက်များအား မြေတိုင်းတာ၍ စကေးကိုက်မြေပုံ ရေးဆွဲထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည် -
(က) တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် ၃. ၂.၂၀၂၀ ရက်
(ခ) တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် ရက်/အချိန် ၁၇. ၂.၂၀၂၀ ရက်၊ (၁၆: ၀၀) နာရီ
(ဂ) တင်ဒါပုံစံထုတ်ယူရမည့်နေရာနှင့်တင်သွင်းရမည့်နေရာ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊
၂။------- အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ် ဝ၆၇ - ၃၄၁၄၂၉၂သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁။------- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား) မှ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်ကောင်စီငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း၊ တံတား၊ ရေမြောင်း၊ ပလက်ဖောင်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ လုပ်ငန်းများ Lot (၈)ခု အတွက် (QA/QC) ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၃.၂.၂၀၂၀	ရက်
တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက် ၁၇.၂.၂၀၂၀	ရက်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပြည်ပနိုင်ငံထုတ်မော်တော် ယာဉ် ၁၅ စီးနှင့် အမှိုက်ကန် ၄ ကန်အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိသူများ အောက် ပါအတိုင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
တင်ဒါပုံစံစတင်ဝယ်ယူရမည့်ရက်	 ၂၇ - ၁ - ၂၀၂၀
တင်ဒါပုံစံတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်	 ၁၄ - ၂ - ၂၀၂၀
တင်ဒါပေးသွင်းမည့်နေရာ	 စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၊	နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၃၂၀၈၁၊ ၀၆၇-၃၄၃၂၀၈၃ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
၁။------- ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်ကောင်စီ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း၊ တံတား၊ ရေမြောင်း၊ ပလက်ဖောင်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ လုပ်ငန်း (၈) ခု နှင့်ပတ်သက်၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၂၁.၁.၂၀၂၀ ရက်
တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက် ၁၉.၂.၂၀၂၀ ရက်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား) တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉၆၈၂၅၄၅၂၉၄ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေဖြင့် အောက်ပါ e-Government လုပ်ငန်းများအား ( ၂-၁၂-၂၀၁၉ ) ရက်နေ့ မှ (၂-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်-
(က) Central Control Room တည်ဆောက်ခြင်း 1 T
( ခ ) GPS Tracking System တည်ဆောက်ခြင်း2T
( ဂ ) ArcGIS Software အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း3T
(ဃ) ArcGIS Online Software ဖြင့် မြေပြင်အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်းနှင့် Database တည်ဆောက်ခြင်း4T
၂။-------သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာ e-Government လုပ်ငန်းအလိုက် တင်ဒါတင်သွင်းလာသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ နည်းပညာဖွင့်ဖောက်စိစစ်ရွေးချယ်မည့် အခမ်းအနားအား အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အခမ်းအနား တက်ရောက်ပေးနိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-
နေ့ရက် - ၂၁ - ၁ - ၂၀၂၀ ( အင်္ဂါနေ့ )
အချိန် - နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
နေရာ - အုပ်ချုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (5 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Colocation Data Center Virtualization အဆင့်မြှင့်တင်ရန် VMware Licenses ဝယ်ယူခြင်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (5 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020) တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
၂။-------တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် ------------- ၂၈-၁-၂၀၂၀ (အင်္ဂါနေ့)
၃။-------တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/5(T)_eGov-NPTDC_2019-2020 .pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြို့တော်ခန်းမ၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၂၃၄၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၈၀၁၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) Computer & Accessories (၂၀) စုံ
(ခ) Printer (၁၀) လုံး
(ဂ) Printer (A5) (၅) လုံး
(ဃ) Colour Printer (၄) လုံး
(င) Copier (၃) လုံး
တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ပေးမည့်ရက် ၁၀ - ၁ -၂၀၂၀
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် ၂၃ - ၁ -၂၀၂၀ (၁၆ : ၀၀)နာရီ
၂။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၏ (၂၇.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်ကြော်ငြာခဲ့သော ယခင်ကြော်ငြာစာအား ယခုတင်ဒါကြော်ငြာစာ(၁/၂၀၂၀)ဖြင့် လွှမ်းမိုး ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။
၃။-------တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆)သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်း စုံစမ်းထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
၁။-------ဒက္ခိဏသီရိမြို့ရှိ ပေ(၈၀×၈၀) မြေကွက်(၁၉၇)ကွက်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားမည်သူမဆို အဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် မြေကွက်(၁)ကွက် လျှင် မြေတန်ဖိုးငွေကျပ်(၂၅၀)သိန်းနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း (၁၈ - ၁၁ - ၂၀၁၉) ရက်နေ့နှင့် ( ၂၅ - ၁၁ - ၂၀၁၉)ရက်နေ့များတွင် နေ့စဉ်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာတို့တွင်လည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၏ Website ဖြစ်သည့် www.nptdc.gov.mm နှင့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ Facebook Page ဖြစ်သည့် NPTDC Webportal တို့တွင်လည်းကောင်း အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် ကြေညာခဲ့ရာ (၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ မြေကွက်ဝယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားသူပေါင်း (၃၂၇)ဦးရှိခဲ့ပါသည်။
၂။-------မြေကွက်ဝယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားသူ(၃၂၇)ဦး၏ အမည်စာရင်းကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/DKN.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။ အမည်စာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့် မြေကွက်လျှောက်ထားသူများရှိပါက မူလ လျှောက်ထားခဲ့သည့် အထောက်အထားနှင့်အတူ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ (၈-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ တင်ပြလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။-------မြေကွက်လွတ်(၁၉၇)ကွက်အား ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် မဲစနစ်ဖြင့် နေရာချထားခြင်းကို (၁၀ - ၁ - ၂၀၂၀)ရက်နေ့(သောကြာနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်မှ စတင်၍ နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ မင်္ဂလာခန်းမတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ မဲနှိုက်ခြင်းအစီအစဉ်ကို မြေကွက်လျှောက်ထားသူများမှ စိတ်ဝင်စားသူများ မင်္ဂလာခန်းမသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၄။-------အဆိုပါ အစီအစဉ်အား လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိသူများအတွက်လည်း မဲနှိုက်စနစ်ဖြင့် မြေကွက်နေရာချထားမှု အစီအစဉ်ကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ Facebook Page ဖြစ်သည့် NPTDC Webportal တွင် Live ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၅။-------ပထအကြိမ်မြေကွက် (၁၉၇)ကွက်အား မဲစနစ်ဖြင့် နေရာချထားရာတွင် မဲမပေါက်သူ များအတွက် ဒုတိယအကြိမ် မြေကွက်များထပ်မံရောင်းချမည့် အစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းပေး မည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ယင်းအစီအစဉ်အား ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
------- ဒက္ခိဏသီရိမြို့တွင် ပေ(၈၀×၈၀)မြေကွက်များ ဝယ်ယူခွင့် အသိပေးကြေညာချက်ကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/notic.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
အိတ်ပိတ် စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်း
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ အခမ်းအနားသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းဟောင်း(၇)မျိုးတို့အား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ပိတ် စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) ကြိမ်(ယုဇန) ၃၉ လုံး
(ခ) ကြိမ်(PMH) ၇၂ လုံး
(ဂ) ကြိမ်ဆက်တီ ၁၀ လုံး
(ဃ) စားပွဲဝိုင်းကြီး ၃ လုံး
(င) ပလတ်စတစ်ထိုင်ခုံ ၁၅ လုံး
(စ) သစ်သားဘီရို ၃ လုံး
(ဆ) ၄'x၂' စားပွဲ ၁ လုံး
၂။-------လေလံလျှောက်လွှာနှင့်စည်းကမ်းချက်များအား(၃.၁.၂၀၂၀)(သောကြာနေ့)မှစ၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၌ အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာများကို (၁၅.၁.၂၀၂၀) (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) (၁၆:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။-------သို့ဖြစ်ပါ၍ အခမ်းအနားသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းဟောင်း(၇)မျိုးတို့အား အောက်ဖော် ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း လေလံတင်ရောင်းချ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
နေ့ရက် - (၁၆.၁.၂၀၂၀)
၄။-------အသေးစိတ်သိရှိလိုသောအချက်အလက်များအားရုံးချိန်အတွင်းဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆)သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
-------၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ရန်ပုံငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်မည့် လမ်းတံတားလုပ်ငန်း Lot 10 ခုအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်းအား Tender Pass Capital (R&B).pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
-------၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်မည့် လမ်းတံတားလုပ်ငန်း Lot2ခုအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်းအား Tender Pass NF (R&B).pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး ဌာန၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ Dozer (Crawler, 200HP) (၁)စီးအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) Dozer (Crawler, 200HP) (၁) စီး ဝယ်ယူခြင်း
တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် ၂၄ . ၁၂ . ၂၀၁၉၊ နံနက် (၀၉:၃၀)နာရီ
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် ၂၄ . ၁ . ၂၀၂၀၊ ညနေ (၄:၀၀)နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းမျဉ်း/စည်းကမ်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန် အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၁၄၅၂၅ တွင် မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Lot (၅) ခုအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်း
၁။-------မဟာသကျရံသီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး၊ဂန္ဓကုဋီတိုက်ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၃၁၂၀၀စတုရန်းပေ)အား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုသော မြန်မာနိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း များကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
တင်ဒါလျှောက်လွှာစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၁၀. ၁၂. ၂၀၁၉
တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်နေ့၊ ရက်၊ အချိန် ၂၄ . ၁၂ . ၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့) ( ၁၆ : ၀၀ ) နာရီ
တင်ဒါလျှောက်လွှာထုတ်ယူ/ ပေးသွင်းရမည့်နေရာ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရာပြတ်ဌာန
၂။-------တင်ဒါလျှောက်လွှာများနှင့် စည်းကမ်းချက်(၁)စုံလျှင် ( ၂,၀၀၀ /- ) (ကျပ်နှစ်ထောင် တိတိ) ဖြင့် ဝယ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။-------အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါကဖုန်း၊ ၀၆၇- ၄၁၄၅၉၃ သို့ ရုံးချိန် အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် သူနာပြု-၃ (လစာနှုန်း ၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ)ရာထူး (၃၀)နေရာအား ရွေးချယ် ခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) B.N.Sc ဘွဲ့(သို့မဟုတ်) သူနာပြု-သားဖွား ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ် ရရှိပြီး၊ သူနာပြု-သားဖွား လိုင်စင်သက်တမ်း ရှိသူဖြစ်ရမည်။
(ဂ) (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၅)နှစ်ထက် မကြီးသူဖြစ်ရမည်။
၃။-------ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည်။ ဖြေဆိုရမည့် ဘာသာရပ်များမှာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှင့် အထွေထွေဗဟုသုတဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့်ရက်ကို အကြောင်းကြားပါမည်။
(ဃ) ပညာအရည်အချင်းနှင့် အောင်မြင်သည့်ခုနှစ်၊
(င) မိဘအမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်နှင့် ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ၊
(စ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် မှတ်ပုံတင်သည့်ရက်စွဲ၊
(ဆ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊
(ဇ) အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(မိဘနေရပ်)တို့ကို ဖော်ပြရမည်၊
(စျ) အခြားဆေးရုံ/ဆေးခန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးပါက(ထမ်းဆောင်ခဲ့ သည့်ကာလ)။
(က) သူနာပြုဘွဲ့လက်မှတ်(သို့မဟုတ်) သူနာပြု-သားဖွားဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ် မိတ္တူ(မူရင်းပြရန်)၊
(ခ) သူနာပြု-သားဖွားလိုင်စင်မိတ္တူ(လျှောက်လွှာတင်သည့်နေ့တွင် မူရင်းပြရန်)၊
(ဂ) အသက်အထောက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊
(စ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်း၊
(ဆ) (၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နောက်ပိုင်းရရှိသည့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်(မူရင်း)၊ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်(မူရင်း)၊
(စျ) တစ်လအတွင်းရိုက်ကူးထားသည့် ပတ်စပို့အရွယ် ရောင်စုံဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (နောက်ကျောတွင် အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်ရေးရန်)၊
၆။-------လျှောက်ထားလိုသူများသည် လျှောက်လွှာအား ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ အုပ်ချုပ်မှု ဌာန၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲသို့ (၇-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထား ရမည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်း-၀၆၇-၅၅၀၁၅၁၊ ၀၆၇-၅၅၀၁၅၃ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ နိုင်ငံပိုင် အိမ်ရာထိန်းသိမ်းရေးဌာနခွဲ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မင်္ဂလာသိဒ္ဓိရပ်ကွက် (ကံ့ကော်အိမ်ရာ) 4U4S(3-Bed)အဆောက်အဦ(၄)လုံးနှင့် 4U4S(2-Bed)အဆောက်အဦ(၆)လုံး စုစုပေါင်းအဆောက် အဦ(၁၀)လုံး အပြင်ပိုင်းဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) မင်္ဂလာသိဒ္ဓိရပ်ကွက် (ကံ့ကော်အိမ်ရာ) 4U4S(3-Bed) အဆောက်အဦ(၄)လုံး နှင့် 4U4S(2-Bed)အဆောက်အဦ(၆)လုံး စုစုပေါင်းအဆောက်အဦ(၁၀)လုံး အပြင်ပိုင်းဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် ၂၃.၁၂.၂၀၁၉၊ ညနေ(၄:၀၀)နာရီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းမျဉ်း/စည်းကမ်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန် အတွင်း အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ နိုင်ငံပိုင်အိမ်ရာထိန်းသိမ်းရေးဌာနခွဲ	နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မင်္ဂလာသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်၊ (ဖုန်း-၀၆၇၃-၄၁၄၄၂၀) တွင် မေးမြန်းစုံစမ်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား) မှ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်စည်ပင်ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေ နှင့် နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ ရန်ပုံငွေတို့ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း Lot (၁၇) ခု အတွက် (QA/QC) ငှားရမ်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၂၉.၁၁.၂၀၁၉	ရက်
တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက် ၁၂.၁၂.၂၀၁၉	ရက်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား) နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (1 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Central Control Room တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (1 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020) တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
၂။-------တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် ------------- ၂-၁-၂၀၂၀ (ကြာသပတေးနေ့)
၃။-------တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/1-(T)-CCR_TenderRules_WPT.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြို့တော်ခန်းမ၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၂၃၄၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၈၀၁၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၄။-------Central Control Room တည်ဆောက်ရန်အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအား (၂၆.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်လည်း ကြော်ငြာထည့်သွင်းထားပါသည်။
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (2 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ GPS Tracking System တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (2 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020) တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
၃။-------တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/2 (T)_eGov-NPTDC_ 2019-2020 .pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြို့တော်ခန်းမ၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၂၃၄၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၈၀၁၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၄။-------GPS Tracking System တည်ဆောက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအား (၂၆.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်လည်း ကြော်ငြာထည့်သွင်းထားပါသည်။
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (3 (T)/ eGov-NPTDC / 2019-2020)
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ArcGIS Software အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (3 (T)/ eGov-NPTDC / 2019-2020) တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
၃။-------တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/3 (T)_eGov-NPTDC_2019-2020.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြို့တော်ခန်းမ၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၂၃၄၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၈၀၁၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၄။-------ArcGIS Software အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအား (၂၆.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်လည်း ကြော်ငြာထည့်သွင်းထားပါသည်။
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (4 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ArcGIS Online Software ဖြင့် မြေပြင်အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းနှင့် Database တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (4 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020) တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
၃။-------တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/4 (T) _eGov-NPTDC_2019-2020.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြို့တော်ခန်းမ၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၂၃၄၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၈၀၁၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၄။-------ArcGIS Online Software ဖြင့် မြေပြင်အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းနှင့် Database တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအား (၂၆.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်လည်း ကြော်ငြာထည့်သွင်းထားပါသည်။
ဒက္ခိဏသီရိမြို့ရှိ ပထမအဆင့် ပေ(၈၀×၈၀)မြေကွက်များ ရောင်းချရန် အသိပေးကြေညာခြင်း
ပထမအဆင့်ရောင်းချမည့် (80ပေ x 80 ပေ) မြေကွက်လွတ်နေရာများ
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဒက္ခိဏသီရိမြို့မှ ပေ(၈၀×၈၀)မြေကွက်များရောင်းချရန်အသိပေးကြေညာချက်၊ ဝယ်ယူခွင့်လျှောက်ထားရန်လျှောက်လွှာပုံစံ၊ ပထမအဆင့်ရောင်းချမည့် ဒက္ခိဏသီရိမြို့ရှိ ၊ပေ(၈၀×၈၀)မြေကွက်များ လက်ကျန်စာရင်းနှင့် နေရာပြပုံများကိုwww.nptdc.gov.mm/customized/pdf/Terms&Conditions(80x80)ftplotsforsale.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ပရိဘောဂပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေ(ဗဟိုပစ္စည်းထိန်း
ဌာနအရောက်တန်ဖိုး)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်အတွက် အချိန်မီပြုလုပ်တင်သွင်းနိုင်မည့် ပရိဘောဂအရောင်းဆိုင်များ၊ ကုမ္ပဏီများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်
(က) အရာရှိကြီးစားပွဲ(၆'×၄'×၂.၅') (၂) လုံး
(ခ) အရာထမ်းစားပွဲ(၅'×၃'×၂.၅') (၈၅) လုံး
(ဂ) အမှုထမ်းစားပွဲ(၄'×၂.၅'×၂.၅') (၁၀၀) လုံး
(ဃ) ဖိုင်တင်စင်(ကြီး)(၆'×၂၀"×၇') (၅) လုံး
(င) ဖိုင်တင်စင်(သေး) (၄'×၁၅"×၃') (၄၀) လုံး
(စ) လက်တင်ပါကုလားထိုင် (၈၅) လုံး
(ဆ) လက်တင်မဲ့ကုလားထိုင် (၁၀၀) လုံး
(ဇ) အစည်းအဝေးခန်းသုံးစားပွဲ(၅'×၂၀"×၂'၆") (၄) လုံး
(ဈ) သံဗီရို(၃'×၁'၄" ×၆') (၅၃) လုံး
တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် - ၁၃.၁၁.၂၀၁၉(ရုံးချိန်အတွင်း)
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉( ၁၆:၀၀ နာရီ )
တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက် - ၃.၁၂.၂၀၁၉( ၁၀:၀၀ နာရီ )
တင်ဒါထုတ်ယူ/ပေးသွင်းရမည့်နေရာ - ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------တင်ဒါစည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းများနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်
သာယာရေးကော်မတီ တယ်လီဖုန်းအမှတ် (၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆)သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
စဉ် Lot No လုပ်ငန်းအမည်
(က) Lot1 ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ လမ်းပျဉ်းမနားစျေးရှိ စျေးရုံ(၄)ရုံ ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း(၄)ခု
( ခ ) Lot2 ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ရေဆင်းစျေးအတွင်းအများသုံး သန့်စင်ခန်း နှင့် ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း(၆)ခု
(၁)	ရေဆင်းစျေး(၄)ခန်းတွဲအုတ်ညှပ်(၁)ထပ်	သန့်စင်ခန်း(၂)လုံး (၁၆'×၁၀'×၁၂') ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်
(၂)	ဂါလံ(၃၂၀၀)ဆံ့ အမြင့်(၃၀') ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း
(၃)	ဂါလံ(၆၀၀၀)ဆံ့ ရေစုကန်နှင့် ရေစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း
(၄)	(၄")စက်ရေတွင်း(၄၈၀')တူးဖော်ခြင်း၊ ရေစက်နှင့် ရေစက်အိမ်တည်ဆောက်ခြင်း
(၅)	(၃")ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းနှင့် အများသုံးရေတိုင်၊ မီးသတ်ငုတ်ပြုလုပ်ခြင်း
(၆)	1.5HP မော်တာ(၂)လုံး တပ်ဆင်ခြင်း
( ဂ ) Lot3 ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ကျည်တောင်ကန်စျေးအတွင်း အများသုံး သန့်စင်ခန်းနှင့်ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း
(၁)	ကျည်တောင်ကန်ဈေး(၄)ခန်းတွဲ အများသုံးသန့်စင်ခန်းတည်ဆောက်ခြင်း(၁၆'×၁၀'×၈')နှင့် Septic Tank
(၂)	ဂါလံ(၃၂၀၀)ဆံ့ အမြင့်(၃၀') ရေစင် တည်ဆောက်ခြင်း
(၃)	ဂါလံ(၆၀၀၀)ဆံ့ ရေစုကန်နှင့် ရေစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း
(၄)	(၄")စက်ရေတွင်း(၄၈၀')တူးဖော်ခြင်း၊ရေစက်နှင့် ရေစက်အိမ်တည်ဆောက်ခြင်း
(ဃ) Lot4 ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ကျည်တောင်ကန်စျေးအတွင်း ရိစာခင်းခြင်း နှင့်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
(၁)	ကျည်တောင်ကန်ဈေး ပျံကျစျေးအတွင်း မြေသားပြုပြင်ခြင်း နှင့်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း(၃၂'×၂၀၀'×၈")
(၂)	စျေးအတွင်း ရိစာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	(၂၁၀'+ ၂၁၇')/၂၊ (၂၉၀'+ ၂၇၈')/၂
(၃)	စျေးအတွင်း လမ်း(၂)လမ်းမြေသား ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း(၄၇၀'× ၂၀'×၈'')
(င) Lot5 အောင်ဇမ္ဗူစျေးအတွင်းရိစာခင်းခြင်းနှင့် ရွှေကြာပင်စျေးအတွင်း လုံခြုံရေးမီးတိုင်စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း
(၁)	အောင်ဇမ္ဗူစျေးအတွင်းမြေသားပြုပြင်ရိစာခင်းခြင်း လုပ်ငန်း (၈၉၉၆၁ စ/ပေ)
(၂)	ရွှေကြာပင်စျေးအတွင်း လုံခြုံရေး	ကွန်ကရစ်မီးတိုင် (၁၀)တိုင်စိုက်ထူခြင်း
(စ) Lot6 လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ သီရိရတနာမြို့မစျေးနှင့် အေလာစျေးအတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ
(၁)	လယ်ဝေးမြို့ သီရိရတနာမြို့မစျေး အုတ်ရေမြောင်းများအား မြောင်းဖုံးပြုလုပ်ခြင်း(၄'၆''× ၂'× ၄'' )Drain (over Slab) 297 nos
(၂)	လယ်ဝေးမြို့နယ် သီရိရတနာမြို့မစျေးအတွင်း လုံခြုံရေးမီးတိုင်(၂၂)တိုင် စိုက်ထူခြင်းနှင့် မီးလိုင်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း(ကွန်ကရစ်တိုင် အမြင့် ၂၀')
(၃)	လယ်ဝေးမြို့နယ် အေလာစျေးအတွင်း လုံခြုံရေးမီးတိုင် (၃၀)တိုင်စိုက်ထူခြင်းနှင့် မီးလိုင်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း(ကွန်ကရစ်တိုင် အမြင့် ၂၀')
(ဆ) တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည်ရက် - ၅ . ၁၁ .၂၀၁၉ ရက်
(ဇ) တင်ဒါ လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက် - ၁၉ . ၁၁ .၂၀၁၉ ရက် ၁၆:၀၀ နာရီ
(ဈ ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ - စျေးများဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိလိုပါကဈေးများဌာန တယ်လီဖုန်း အမှတ်၀၆၇-၄၁၄၂၉၃သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်၊ ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ခေါ်ယူထားသော အငယ်တန်းစာရေး/ လက်ထောက်ငွေကိုင်နှင့် လက်ထောက်ကွန်ပျူတာစက်ကိုင်ရာထူး တို့အတွက် (၂-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် လူစာရင်းအား www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/writingtest-forbank.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၂။-------ဖြေဆိုခွင့်ရသူများသည် ရေဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် ဝင်ခွင့်ကဒ်ပြားအား (၃၀-၁၀-၂၀၁၉)မှ (၁-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်၊ ဇမ္ဗူသီရိဘဏ်(ရုံးချုပ်) စီမံဌာနသို့ လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား(မူရင်း)နှင့်အတူ ဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြား လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ဖြေဆိုရမည့် နေရာသို့ သတ်မှတ်ချိန်မတိုင်မီ မိနစ်(၃၀:၀၀)ကြိုတင် ရောက်ရှိရမည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ပြင်ပဗဟုသုတများ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။-------ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အောက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာ အပ်ပါသည်-
(၁) ကျင်းပမည့်ရက် - (၂-၁၁-၂၀၁၉)၊ (စနေနေ့)
(၂) ကျင်းပမည့်အချိန် - (၀၉:၀၀)နာရီမှ (၁၁:၀၀)နာရီထိ
(၃) ကျင်းပမည့်နေရာ - နေပြည်တော်စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ အမှတ်(၂)ရှိ၊ စားရိပ်သာအဆောင်
အမှတ်(၁)နှင့် (၂)၊ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့် မီးပွိုင့်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်-
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၅.၁၁.၂၀၁၉ ရက်
တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက် ၁၉.၁၁.၂၀၁၉	ရက်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား) တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉-၆၈ ၂၅၄၅၂၉၄ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်ရန်ပုံငွေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် သပြေကုန်းစည်ပင်ဘဏ်ဝင်းအတွင်း၌ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) သပြေကုန်းဘဏ်ခွဲငယ် မူလအဆောက်အဦအား ဖြိုဖျက်၍ သံကူကွန်ကရစ် (၂)ထပ် အဆောက်အဦ(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် (၂၀.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၆:ဝဝ)နာရီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန် အတွင်း အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၊ ၀၆၇၃၄၁၄၂၉၇ တွင် မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေ၊ နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လမ်း၊ တံတား၊ ရေမြောင်း လုပ်ငန်း (၁၂) ခု အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ရက်
တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက် ၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ရက်၊ (၁၆:၀၀) နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/တံတား)၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုသည့် အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်းအင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား)၊ ဖုန်း - ၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၉၆၈၂၅၄၅၂၉၄ တွင် မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေ၊ နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေတို့ဖြင့် ဝယ်ယူမည့် လမ်းတံတားလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း များ (ကတ္တရာ၊ ပလပ်စတစ်ရေဆေး၊ သာမိုပလပ်စတစ်ဆေး၊ ဆိုဒီယမ်မီးလုံးဆက်စပ်ပစ္စည်း) နှင့် စက်ယန္တရား (Excavator, Mini Excavator) များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါသည် -
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် နေပြည်တော်စည်ပင်၊ မြို့တော်ခန်းမရင်ပြင်၌ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်-
(က) Underground Main Power Supply Cable တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် ( ၁၆.၁၀.၂၀၁၉)ရက်နေ့
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် (၂၉ .၁၀.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၆:ဝဝ)နာရီ
၁။-------နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ကျည်တောင်ကန်ရပ်ကွက်၊ ကျည်တောင်ကန်စျေးအား စျေးအဆင့်မြှင့်တင်ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်၍ စိတ်၀င် စားသည့် ကုမ္ပဏီများသည် စိတ်၀င်စားမှုဖော်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ (Expression of Interest- EOI) ကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာနရုံးသို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၁ ) ရက်၊ ညနေ (၁၅:၃၀)နာရီ(မြန်မာစံတော်ချိန်)အရောက် အချိန်မီတင်သွင်းရမည်။
၂။-------(Expression of Interest- EOI) Form အဆိုပြုလွှာပုံစံနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း စျေးများဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၁၄၂၉၃ သို့ ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပြီး လာရောက်ထုတ်ယူစဉ် မိမိတို့၏ ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအထောက်အထား မိတ္တူများပြလျက် အထက်ပါလိပ် စာတွင် (၇ - ၁၀ -၂၀၁၉) ရက်နေ့မှစ၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် နေပြည်တော် စည်ပင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်း၌ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် မြန်မာကျပ် ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) 6U4S (2 Bed) အမှုထမ်းနေအိမ် သံကူကွန်ကရစ်အဆောက်အဦ(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် (၁.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၆:ဝဝ)နာရီ
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနတွင် အင်ဂျင်နီယာ ဌာန(လမ်း/တံတား)မှ ပလတ်စတစ်(၅)ဂါလံရေဆေးပုံးခွံ (၂၈၆၉) ပုံးတို့အား စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။-------လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များအား(၂၆.၉.၂၀၁၉) (ကြာသပတေးနေ့)မှ စ၍ ရုံးချိန်အတွင်းဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၌ ထုတ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာများကို (၁၀.၁၀.၂၀၁၉) (ကြာသပတေး)နေ့(၁၆:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပြန်လည်တင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။-------အထက်ဖော်ပြပါ ပလတ်စတစ်ရေဆေးပုံးခွံ(၂၈၆၉)ပုံးတို့အား အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း လေလံတင်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) နေ့ရက် - (၂၃.၁၀.၂၀၁၉)
(ခ) အချိန် - နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီ
(ဂ) နေရာ - ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန
၄။-------အသေးစိတ်သိရှိလိုသောအချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်းဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် (၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆) သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဌာန (၅)ခု၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အ‌ရေးလိုင်စင် လေလံအောင်မြင်သူများစာရင်း
၃။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဌာန (၅)ခု၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အ‌ရေးလိုင်စင်များအား စျေးပြိုင်စနစ်၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်၊ အခြားနည်းတို့ ဖြင့်လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ရာတွင် လိုင်စင်ရရှိသူများစာရင်းအားwww.nptdc.gov.mm/customized/pdf/general license.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ နေပြည်တော် တွင်၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနှင့်၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုနှစ်များအတွက်ဆေးဆိုင်တွဲ(၂)ဆိုင်အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် (၂)နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ငှာရမ်းလိုပါသည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများကို ကြော်ငြာသည့်ရက် နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဇမ္ဗူသီရိအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ အုပ်ချုပ်မှုဌာန(စီမံရေးရာ)တွင် ရယူနိုင်ပြီး (၁၃-၉-၂၀၁၈)ရက်(သောကြာနေ့) နေ့လည်(၃:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၆၇-၅၅၀၁၅၁၊ ၀၆၇-၅၅၀၁၅၃ တို့သို့ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------( ၂၀၁၉-၂၀၂၀ )ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးရန်ပုံငွေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ပရိဘောဂပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေ ( ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနအရောက်တန်ဖိုး )ဖြင့် ဝယ်ယူရန်အတွက်အချိန်မီပြုလုပ်တင်သွင်းမည့် ပရိဘောဂအရောင်းဆိုင်များ၊ကုမ္ပဏီများကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) ကုတင်(ကျွန်း) (၆.၅'×၃'×၁.၅') (၁၉) လုံး
(ခ) ဗလာစားပွဲ(၃'×၂.၅'×၂.၅') (၁၃၁) လုံး
(ဂ) ကြောင်အိမ်(၅'×၃'×၁.၅') (၅၉) လုံး
(ဃ) ပန်းကန်စင်(၃'×၁.၅'×၃') (၁၁၀) လုံး
(င) ရေအိုးစင်(၃' အမြင့်) (၁၀၃) လုံး
(စ) လက်တင်မဲ့ကုလားထိုင် (၃၁၆) လုံး
(ဆ) ကွပ်ပျစ်(၈'×၄'×၄") (၅၅) လုံး
တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် ၁၆. ၉ .၂၀၁၉(ရုံးချိန်အတွင်း)
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် ၃၀. ၉ .၂၀၁၉ ( ၁၆:၀၀နာရီ)
တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက် ၇ . ၁၀.၂၀၁၉ (၁၀:၀၀နာရီ)
၂။-------တင်ဒါစည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းများနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တယ်လီဖုန်းအမှတ် (၀၆၇-၈၁၀၈၂၈၆)သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာနရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၃၅)ခု၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) နေ့ရက် - (၅.၉.၂၀၁၉)ရက်(ကြာသာပတေးနေ့)
(ခ) အချိန် - နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီ
(ဂ) နေရာ - အုပ်ချုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးအစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။
၂။-------အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့် အာမခံငွေအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှတဆင့် နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်သို့ (၃.၉.၂ဝ၁၉)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။-------အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် အရပ်ရပ်အခွင့်အ‌ရေးလိုင်စင်အလိုက် ပေးသွင်းရမည့်အာမခံ‌ငွေစာရင်းများကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/23−8−9.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အောက်ပါဌာနများတွင်ရုံးချိန်အတွင်းအခမဲ့ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မှာ(၃.၉.၂ဝ၁၉)ရက်(အင်္ဂါနေ့)မွန်းလွဲ(၃:၃ဝ)နာရီဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
(ခ) အခွန်ဌာန - ဝ၆၇-၃၄၁၄၂၉၄၊ဝ၆၇-၈၁ဝ၈၂၁ဝ
(ဂ) စျေးများဌာန - ဝ၆၇-၃၄၁၄၂၉၃
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၃၅)ခု၏ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား တတိယအကြိမ် စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) နေ့ရက် - (၂၁.၈.၂၀၁၉)ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
၂။-------လေလံတင်ရောင်းချမည့် အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့် အာမခံငွေအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှတဆင့် နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်သို့ (၁၉.၈.၂ဝ၁၉)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။-------အရပ်ရပ်အခွင့်အ‌ရေးလိုင်စင်အလိုက် ပေးသွင်းရမည့်အာမခံ‌ငွေစာရင်းများကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/9.8.19bit security account.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အောက်ပါဌာနများတွင်ရုံးချိန်အတွင်းအခမဲ့ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မှာ(၁၉.၈.၂ဝ၁၉)ရက်(တနင်္လာနေ့)မွန်းလွဲ(၃:၃ဝ)နာရီဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက် များသိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
(င) အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းတံတား) - ဝ၆၇-၃၄၃၂ဝ၃၇
ဌာန (၅)ခုမှ အရပ်ရပ်အခွင့်အ‌ရေးလိုင်စင် (၉၇)ခု၏ ပထမအကြိမ်လေလံအောင်မြင်သူများစာရင်း
၃။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဌာန (၅)ခုမှ အရပ်ရပ်အခွင့်အ‌ရေးလိုင်စင် (၉၇)ခု၏ လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား ပထမအကြိမ်စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ရာတွင် ဆွဲဝယ်ရရှိခဲ့သော လေလံအောင်မြင်သူများစာရင်းအားwww.nptdc.gov.mm/customized/pdf/first auction winner.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၃၅)ခု၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား ဒုတိယအကြိမ် စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) နေ့ရက် - (၈.၈.၂၀၁၉)ရက်(ကြာသပတေးနေ့)
၂။-------လေလံတင်ရောင်းချမည့် အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့် အာမခံငွေအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှတဆင့် နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်သို့ (၆.၈.၂ဝ၁၉) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။-------အရပ်ရပ်အခွင့်အ‌ရေးလိုင်စင်အလိုက် ပေးသွင်းရမည့်အာမခံ‌ငွေစာရင်းများကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/1.8.19 bid security account.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အောက်ပါဌာနများတွင်ရုံးချိန်အတွင်းအခမဲ့ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မှာ (၆.၈.၂ဝ၁၉)ရက်(အင်္ဂါနေ့) မွန်းလွဲ(၃:၃ဝ)နာရီဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက် များသိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း ( 8(T)/eGov-NPTDC/2018-2019)
-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ e-Government လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Data Center အားVirtualization စနစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (8 (T) / eGov-NPTDC / 2018-2019) ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာ ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်းနှင့် စျေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၃-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၉-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၉/၂၀၁၉) ၏ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အရ Sun Ivy Solutions(Myanmar) ကုမ္ပဏီအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးအကြောင်း ကြားအပ်ပါသည်။
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွက် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၂၃၂)ခုအား စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရန် (၇.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ပြည်သူသို့ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ မြန်မာ့အလင်းနှင့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ Webportal များမှတဆင့် အသိပေးကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။-------အထက်ပါအရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၂၃၂)ခုအနက် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများဌာနမှ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည့် အောက်ဖော်ပြပါ အရပ်ရပ်အခွင့်ရေးလိုင်စင် (၁၃၅)ခု အား အများပြည်သူအကျိုးငှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရောင်းချသွားနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှုအရ ယခင်ကြေညာထားသောရက်များတွင် လေလံတင်ရောင်းချမည့် အစီအစဉ်များအနက် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှ ရောင်းချမည့် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေး လိုင်စင်(၁၃၅)ခုအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်းမှ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ဌာနများ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၉၇)ခုအား မူလအစီအစဉ်အတိုင်း လေလံတင် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေး လိုင်စင်(၁၃၅)ခုအတွက် ရောင်းချမည့်စနစ်၊ ရောင်းချမည့်လိုင်စင် အရေအတွက်များအား ကော်မတီမှ အတည်ပြုပြီးပါက လုံလောက်သောအချိန်အတွင်း အများပြည်သူသို့ ထပ်မံအသိပေးကြော်ငြာ ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည် -
(က) အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ဝက်) လိုင်စင် ( ၆၅) ခု
( ခ) အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (အမဲ) လိုင်စင် ( ၄၁) ခု
( ဂ) အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ဆိတ်) လိုင်စင် ( ၂၉) ခု
စုစုပေါင်း (၁၃၅) ခု
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၂၃၂)ခု၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချ ခြင်းကို (၇.၇.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် လေလံကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၉) ဖြင့်ကြော်ငြာခဲ့သော ရောင်းချမည့်ရက် (၂၄.၇.၂၀၁၉)၊ (၂၅.၇.၂၀၁၉) နှင့်(၂၆.၇.၂၀၁၉) ရက်တို့အစား အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြောင်းလဲကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) နေ့ရက် - (၂၅.၇.၂၀၁၉)ရက်(ကြာသပတေးနေ့)၊(၂၆.၇.၂၀၁၉)ရက် (သောကြာနေ့)နှင့်(၂၉.၇.၂၀၁၉)(တနင်္လာနေ့)
(ဂ) နေရာ - နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ။
၂။-------လေလံတင်ရောင်းချမည့် အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ၏ ပေးသွင်းရမည့် အာမခံငွေအား နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှတဆင့် နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်သို့ (၂၂.၇.၂ဝ၁၉) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။-------လေလံလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အောက်ပါဌာနများတွင်ရုံးချိန်အတွင်းအခမဲ့ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်မှာ(၂၂.၇.၂ဝ၁၉)ရက်(တနင်္လာနေ့)မွန်းလွဲ(၃:၃ဝ)နာရီဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက် များသိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
(က) စီမံရေးရာဌာန - ၀၆၇-၃၄၁၄၆၁၇
၁။-------နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လိုအပ် သည့် ပြည်ပနိုင်ငံထုတ် Garbage Truck(2-Tons)အမှိုက်သိမ်းယာဉ် ၃ စီးနှင့် Garbage Truck(4-Tons)အမှိုက် သိမ်းယာဉ် ၂ စီး၊ Dump Truck(4-Tosn)ယာဉ် ၁ စီး၊ စုစုပေါင်းမော်တော်ယာဉ် ၆ စီးအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိသူများ အောက်ပါအတိုင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
တင်ဒါပုံစံစတင်ဝယ်ယူရမည့်ရက် - ၂၄ - ၆ - ၂၀၁၉
တင်ဒါပုံစံတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၁၂ - ၇ - ၂၀၁၉
ယာဉ်များတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၉ - ၉ - ၂၀၁၉
တင်ဒါပေးသွင်းမည့်နေရာ - စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၂။-------မော်တော်ယာဉ်များ၏ စံချိန်စံညွှန်း အတိုင်းအတာများကို www.nptdc.gov.mm/customized/pdf/car2018-2019.pdf တွင် download ရယူနိုင်ပြီး၊ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရုံးချိန်အတွင်း စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၃၂၀၈၁၊ ၀၆၇-၃၄၃၂၀၈၃တွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-